CalebaMan ofaDifferent Spirit - Burmese Translation – World Wide Christian Ministries
Posted on 22nd May 2020 22nd May 2020 by Albert Martin
ကာလက်(Caleb) – ခြားနားသောစိတ်ဓာတ်ရှိသူ
ငါ့ကျွန်ကာလက်မူကား ထူးခြားသောသဘောရှိ၍၊ ငါ့နောက်သို့လုံးလုံးလိုက်သောကြောင့်၊ သူသွားခဲ့ပြီသော ပြည်သို့သူ့ကို ငါဆောင်သွားသဖြင့်၊ သူ၏ သားမြေးတို့သည် အမွေခံရကြလိမ်မည်။ တော ၁၄း၂၄ / သတင်းစကား
ကျမ်းစာဇာတ်ကောင်တစ်ဦးဖြစ်သော ကာလက်အကြောင်းကို သင်ကြားပေးခွင့်ရရှိလို့ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိ ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤလေ့လာချက်အတွက် အချိန်ပေးနိုင်မည်ဆိုသော် ကျနော်ဝမ်းသာပါ၏။ သင်တို့အားအတင်း အဓ္ဓမလ့လာစေ ခွင့်တော့ မရှိဘူး၊ အကယ်စင်စစ်ကျနော်ဟာ သင်တို့အဖို့ သူစိမ်း သက်သက်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ဤအကြောင်း၌ မိတ်ဆွေရဲ့အချိန်ပေးလေ့လာခြင်းအတွက်ကျနော်ရဲ့ စိတ်ရင်းနှင့် အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြော ကြားလိုပြီး၊ ကျနော်ရဲ့အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ အတူတကွ အချိန်ယူခြင်းသည်သခင်ဘုရား၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာစီးဆင်းရာ ပြွန်မကြီးတစ်ခုဖြစ် ရေးဖြစ်ပေ သည်။
ယနေ့ကျနော်မေးခွန်းတစ်ခုနှင့် အစပြုပါရစေ။ “သင်သည်ဘယ်နေရာမှာရပ်နေပါသလဲ” ကောင်းပါတယ်၊ ကျနော်သင့် အားပြောပြပါမည်။ “ယနေ့သင်ခြေထောက်များ” ရပ်နေသောနေရာသည် ယေရှုခရစ်တော် တည်း ဟူသော ကျောက်ပေါ်မှာဖြစ်ပြီး သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။
သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘ၀၊ မိသားစုဘ၀၊ သင့်ရဲ့အိမ်ထောင်ရေး၊ ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်း (သို့) အမူတော်နှင့် ဆိုင်သောဘ၀ အသက်တာများထဲ၌၊ သင့်ရဲ့ပင်ကိုယ်စွမ်းရည် (သို့) ကျွမ်းကျင်မှုတွေဟာ၊ လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိသော အခြေခံအုတ်မြစ် (သို့) အောက်ခြေရှိကျောက်မဟုတ်ပဲ ငါတို့၏ကျောက်ဖြစ်သောယေရှုပေါ်မှာတည်မှသာ ခိုင်ခံ့ ပေမည်။ အခြားသောကြမ်းပြင် အားလုံးဟာ နှစ်မြှပ်စိမ့်ဝင်သော သဲများသာဖြစ်၏။
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကျနော်လုပ်ဆောင်သာ အမှုတော်မြတ်တွင်ဘုရားသခင်သည် သှူုလူများကိုတိုက် တွန်းခွန်အားပေးဖို့ အကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိပါသဖြင့် ကျနော်တရားဟောတိုင်းသော်၎င်း၊ သင်ကြားပေးခြင်းအမှု
တော်မြတ်တွင်၎င်း၊ ထို့သို့သာ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
ဒုက္ခပြဿနာတိမ်တိုက်ကြီးလူးလိမ့်လာသည်ကိုသင်နှင့် ကျွန်ုပ်မြင်သောအခါသော်၎င်း၊ ခက်ခဲမှုများက အကျွန်ုပ်တို့အားလှုပ်ခတ်နေသည်ဟု ခံစားရသောအခါမျိုးတွင်သော်၎င်း၊ ကျွနုုပ်တို့သည်မှန်တကယ်ပြော နိုင်သည်မှာ “ငါသည်ရွေ့လျား ခြင်းမရှိရပေ” ဘာကြောင့်လဲ၊အကြောင်းမူကား “ငါသည်ကျောက်ပေါ်မှာရပ် နေသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။” ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ သေချာသောအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သဖြင့် ကျွန်ပ်တို့ သည် ရွေ့လျား ခြင်းရှိလိမ်မည်မဟုတ်ပေ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၏နေ့စဉ်အသက်တာ၌ဘာတွေတွေ့ရှိရပါသလဲ။ ခြေမျက်စိခန့်မြင့်တတ်သော ရေလွမ်းမိုးခြင်းမျိုး ကဲ့သို့သော စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းရေလှိုင်းများကျွန်ုပ်တို့တွေ့ကြုံရတတ်သည်။ ကျွနုုပ်တို့အား ကြောက်ရွံ့ ခြင်းနှင့်အသက်ရှင်စေဖို့၊ ရန်သူများသည်ငါတို့နားထဲသို့ ကြားနေရအောင်ရှုတ်ချခြင်း နှင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်း မုသားစကားများ ပြောနေသည်ကိုတွေ့ရတတ်သည်။ ကောင်းလေစွ၊ ထို့သို့ဖြစ်ပျက်သည့်အခါ အကျွန်ုပ်တို့ မှန်ကန်စွာပြော နိုင်သည်မှာ “ငါသည်ရွေ့လျားခြင်းရှိမည်မဟုတ်” အဘယ်ကြောင့်ဆုသော် “ငါသည်ကျောက် ပေါ်မှာရပ်နေ၏။”
ရိုးသားစွာဝန်ခံရရင်၊ ငါတို့၏မျှော်လင့်ချက်များချိုးပျက်ခြင်းရှိ၏ဟု ခံစားရသောအချိန်မျိုးအကျွန်ုပ်မျိုး၌ရှိတတ် ပါ၏။ ကျွန်ုပ်မှန်ပါသလား၊ ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်။ ထိုအခြေအနေမျိုးမှာ “ကျနော်တို့ဘာကြွေး ကြော်နိုင်ပါသလဲ” ဟုတ်ကဲ့၊ “ငါသည်ကျောက်ပေါ်မှာရပ်နေ၏” ဟု ကြွေးကြော်နိုင်ပါ၏။ ဆက်လက် ပြီး ငါတို့ပြောဆိုနိုင်သည်မှာ “ရေများစီးလာပါစေ၊ မြေကြီးသည် အကျွန်ုပ်အားနိမ့်ကျစေရင်တောင်၊ အကျွန်ုပ်သည် Fred Astaire နှင့် Ginger Rogers တို့သီဆို ထားသော မိုးရေထဲတွင်သီချင်း ဆိုနေသည်ဆို သကဲ့ဖြစ်ပေ လိမ့်မည်။ သမ္မာတရား သည်သာလျှင် ငါတို့ကိုကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်၏။
မိတ်ဆွေတို့ထဲက တစ်ချို့တွင်ခက်ခဲသော အချိန်ကာလနှင့် အရာခပ်းသိမ်းသည် ညှိုနှိုင်းနေပုံရှိပြီး၊ ဦးတည်ရာ မဲ့ဖြစ် နေလျှင်သေ်ာ၎င်း၊ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ယခုပင်လျှင်ဤနေရာမှာတင်၊ “နံနက်မိုးသောက်အလင်း ရောက်လု လာပြီ” ဟူ၍ မိတ်ဆွေတို့အားပြောပြပါရစေ၊ “မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းဘက်ကို သင်ကြည့်မျှော်လျှင် ၀မ်းမြောက်ခြင်း နှင့် ပြည့်ဝလိမ့်မည်။”
ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းနှင့် ကြောက်ရွ့ခြင်းမုသားများသည် ငါတို့အား ရိုက်နှက်လာလိမ့်မည်။
ငါတို့မျှော်လင့်ချက်ချိုးဖျက်ခံသလို ခံစားမူများသည် ငါတို့၏ တွေ့ကြုံခံစားမူဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ ၎င်းတို့အလယ်တွင် ငါတို့သည်ဘေးကင်း၍လုံခြုံပေ၏။ အကြောင်းမှာငါတို့သည် ကျောက်ပေါ်မှာ ရပ်နေကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သူ့ရဲ့မကျရှုံးနိုင်သော ကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ ကိုးစား နိုင်ပေသည်။ သူသည်ဘယ် သောအခါမှ ငါတို့အားချန်ထားကာစွန့်လွတ်မည်မဟုတ်သောကြောင့် သူ့အား ကျွန်ပ်တို့ ကိုးစားနိုင်ပါသည်။
ဆာလံ ၄၆း ၁-၃ ကငါတို့အားဘာပြောထားသနည်း – “ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ခိုလှုံရာ ဖြစ်၍ခွန်အားကို ပေးတော်မူ၏ ဘေးရောက်သည်ကာလအထူးသဖြင့်ကူမတော်မူကြောင်း ထင်ရှားလျက်ရှိ၏။ ထို့ကြောင့် ပထ၀ီ မြေကြီးသည်ရွေ့သွား၍တောင်များတုန်လှုပ်လျက်သမုဒ္ဒရာသို့ကျသော်လည်းငါတို့သည်ကြောက်လန့်ခြင်းမ ရှိ။ သမုဒ္ဒရာသည်ဟုန်း ဟုန်းမြည်၍ မွှေနှောက်ပါလေစေ။ လှိုင်းတံပိုးထသဖြင့် တောင်များ တုန်လှုပ်ပါလေစေ။
အလားတူ တမန်တော်ဝတ္တု ၂း၂၅ တွင် ငါတို့အားဘာပြောထားပါသနည်း။ ထိုသူကိုအကြောင်းပြုလျက်ဒါ ၀ိဒ် မင်းက ငါသည်ထာဝရဘုရားကိုအစဉ်မပြတ်မျက်မှောက်ပြု၏။ အကြောင်းမူကားငါလက်ျာဘက်၌တည်ရှိ တော်မူ သည် ဖြစ်၍ငါသည် လှုပ်ရှားခြင်းမရှိ။
တရားဟောခြင်း၊ သင်ကြားပေးခြင်းနှင့် အမျိုးမျိုးသောအမှုတော်မြတ်တို့သည်ပွဲကြည့် ပရိသတ်တစ်ဦးရဲ့ အားကစား မဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခြင်းဖြင့် ယနေ့ကျနော်အစပြုချင်ပါ၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုင်လျက် ကြည့် ရှုစောင့်စားကြတယ်၊ ဒါပေမဲ့၎င်းသည်(ပွင်)့အချက် မဟုတ်ပေ။ ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပတ်တော်၏ အမှုတော် မြတ်သည် ၀ိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖျော် ဖြေမှုမျိုးမဟုတ်ပေ။
တရားဟောခြင်း၊ သင်ကြားပေးခြင်းနှင့် အမှုတော်မြတ်၏နှလုံးသားအရင်းအမြစ်မှာ အချိန်းအချက်ပုံစံတစ်စုံ တစ်ခု ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည်ဝင်ရောက်လာသော အကြောင်းတရားအား အပြန်အလှန်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးသော စိမ့်ဖြာလေ့လာရာတွင် ဤအချက်မှအကျိုးအမြတ်ကို ပင်ရရှိလိမ့်မည်လို့ ကျနော်ယုံကြည်ပါ ၏။
၁။ ဘုရားသခင်သည်စကားပြောသော ဘုရားဖြစ်လို့ငါတို့သည်တရားဟောကြ၏။
၂။ အခြားသူများထံအမှုဆောင်ခြင်းအနေဖြင့် ငါတို့သည်တရားဟောကြ၏။
၃။ ဧ၀ံဂေလိသည်ပီတိဖြစ်ဖွယ်သော သတင်းကောင်းဖြစ်လို့ငါတို့သည်တရားဟောကြ၏။
၄။ လူတို့သည်ဧ၀ံဂေလိကြားနားရန်လိုအပ်သောကြောင့် ငါတို့သည်တရားဟောကြ၏။
၅။ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို တည်ဆောက်ဖို့ငါတို့သည်တရားဟောကြ၏။
၆။ အမူတော်မြတ်အတွက်အခြားသူများကိုတန်ဆာဆင်ပေးဖို့ ငါတို့သည်တရားဟောကြ၏။
၇။ ငါတို့သည်မကူညီနိုင်သော်လည်း တစ်စုံတစ်ဦးကို အံ့သြဖွယ်ပြောကြားရသောကြောင့် ငါတို့သည်တရား ဟော ကြ၏။
၈။ ငါတို့ဟောပြောသော ပုဂ္ဂိုလ်များကိုငါတို့သည် ဂရုစိုက်သောကြောင့် ငါတို့သည်တရားဟောကြ၏။
ငါတို့သည်တရားဟောသောအခါပြင်းပြသော ဆန္ဒများရှိကြောင်းကို ယနေ့သင်တို့ကို ကျနော်ပြောပြပါရစေ။ မည်သို့ ပင်ဆိုစေကာမှုအမှုတော်မြတ်အတွက်အခြားသူများကိုတန်ဆာဆင်ပေးခြင်းသည်လည်း အမြဲတမ်း ၎င်းတို့ထဲကတစ်ခုဖြစ်သင့်သည်။ “ဧဖက်သြ၀ါဒစာ၎း၁၂” တွင်ငါတို့ဖတ်ကြားရသည်မှာ သူရဲ့ကိုယ်ခန္စာ သို့ငါတို့၏ခေါ်တော်မှုခြင်းနှင့်ဆုကျေးဇူးများကိုထောက်၍ငါတို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ“ခရစ်တော်၏ကိုယ်တော်ကိုတည်ဆောက်၍ ဓမ္မဆရာ၏အမူကိုပြု တတ်မည်အကြောင်းသန့်ရှင်းသူတို့ကိုပြင်ဆင်၏။”
ငါတို့သည်ဘယ်မျှလောက်ကြီးမြတ်သည် (သို့) ထို့သို့ဖြစ်လာမည်ဆိုတာတွေဟာ ပြဿနာမဟုတ်၊ မှန်ပါ တယ်။ အလွန်ဆန္ဒပြင်းပြတာလဲရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ငါတို့သည်မိမိတို့၏ပရိသတ်များကို တန်ဆာဆင်ခြင်း၊ စိတ်အား ထက်သန်ခြင်းနှင့် ယေရှုအားအစေခံခြင်း စတင်စေတာတွေ ကြီးမြတ်မူဘာတစ်ခုမျှမရှိ ကြောင်း သတိပြုရပါမည်။
သမ္မာတရားကိုသိမှတ်၍ အမူတော်မြတ်သည် စာရေးစာချီနှင့်ဆိုင်သောအတန်းမျှ သာရစ်ပတ်ထားခြင်း မဟုတ်ဟု ဆွဲကိုင်ထားသော တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း စီနှင့် အသင်းတော်များသည် – ဘုရားသခင်ကောင်းကြီး မင်္ဂလာပေးသော၊ အသက်သွင်းပေးသော၊ ကြီးမားလာစေသောသူများဖြစ်ကြသည်။
ဘုရားသခင်သည်ပရိသတ်ထဲရှိ တစ်ဦးတစ်ယောက်စီတွင် ခရစ်တော်ကိုအစေခံဖို့အတွက် ယုံကြည်သူများ အား ထပ်လောင်းတန်ဆာဆင်ပေးရန်နှင့် ခွန်အားပေးရန် ၀ိညာဉ်ဆုကျေးဇူးကို ပေးထားပြီးသားဖြစ်၏။
ကျွန်ုပ်ရဲ့ရိုးသားသော နှလုံးသားတောင့်တချက်မှာ ကျနော်အသက်ရှင်ချိန်ခဏတွင်ဘယ်ဂိုဏ်ဂနမဆို ခရစ် တော်၏အသင်းတေ်ာတစ်ခုလုံးသည် ငါတို့ဘုရားသခင်၏အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့် ခိုင်မြဲစွာဖမ်းဆုပ်ခြင်း သူအားဖြင့်အလွန်တန်ဆာ ဆင်ခြင်းရှိရေးနှင့်ထိုသခင်ထဲ၌သူတို့၏ဖြစ်ခြင်း (ရပ်တည်ခြင်း)၌အလွန်ပင်စိတ် လူပ်ရှား မူရှိခြင်းဖြစ်မည့် အချိန်ကြမြင် တွေ့ရဖို့ဖြစ်ပါ၏။
အသင်းတော်တည်းဟူသောသင်နှင့် ကျွန်ုပ်သည်သူ၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ထိရောက်မူရှိသောသက်သေများ တပ်မဟာကြီးတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းသူများနှင့်စ်တ်နှလုံးအပြည့် ၀တ်ပြု ကိုးကွယ်သူများအားလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာပေးပိုင်သောစစ်တပ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သလိုဖြစ်လည်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျနော် တရားဟော သည်ဖြစ်၍ ငါတို့အားလုံးသည် အစေခံကာ အဆုံးတိုင်အောင်ဟောပြောသင့် ကြပါသည်။
ငါတို့သည်ရုပ်ဝတ္တုပစ္စည်းကို ကြည့်၍မဟော – ထက်ကောင်းကင်က တားမြစ်ထား – ထို့သို့မဟုတ်သူသည် (သခင်သည်) ချီးမြှောက်ခြင်းခံ၍ ဘုန်းထင်ရှားမည်အကြောင်း ငါတို့ဟောပြောကြ၏။
ဂုဏ်ကျော်စောခြင်းတွက် ငါတို့သည်မဟော – ထက်ကောင်းကင်က ထားမြစ်ထား – သူ့(သခင့်)အား အစေခံဖို့ ငါတို့ဟောပြော၍၊ သူ့အတွက် သူ့ရဲ့အသင်းတော်ကို အစေခံဖို့ငါတို့ဟောပြောကြ၏။ ၊
ယနေ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်တန်ဆာပလာများသာဖြစ်၏၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလင်းသာဖြစ်၏ ထို့နောက်ဘုရား သခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်တည်းဟူသော အလင်းဖြစ်သည် ယေရှုဘက်သို့သင်တို့အား အကောင်းဆုံးညွှန်ပြ ဖို့ရောင်ပြန်ဟပ် သော အလင်းတစ်ခုမျှသာဖြစ်ကြ၏။
တစ်ချိန်တုန်းကMartin Luther kingပြောခဲ့သည်များ“ငါ့မှာအိမ်မက် တစ်ခုရှိ၏။”သြဂုတ် ၂၈၊ ၁၉၆၃
သူ့ရဲ့မိန့်ဆိုမူသည်အမေရိကန်နိုင်ငံရှိလူမျိုးရေးလျော့ပေါ့ရေးတွင် အထောက်အကူဖြစ်ခဲ့ပြီးသူ့ကိုအများပြည်သူနှင့်စီးပွားရေးအခွင့် အရေးများတွင် လိုအပ် လျက်ရှိကြသည်။
ကောင်းပြီ! ယနေ့ ငါ့မှာ “အိမ်မက်တစ်ခုရှိတယ်”ဆိုတာအားလုံးကိုပြောပြချင်တယ်။
ရာနဲ့ချီသောတက်ရောက်သူများ၊ ထိုမျှမကအသစ်သောအသက်တာကိုတွေ့ရှိ၍ယေရှုနှင့်ဆက် နွယ်မှု သည်အဘယ်မျှလောက်ပြင်းထန်တန်ခိုးရှိကြောင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိနေဆဲဖြစ်ကြသည်။ဘုရားကျောင်းမရောက်သေးသောထောင်နဲ့ချီသော လူတို့ဖြင့်တက်ရောက်မှုရှိသည့်အသင်းတော်တစ်ပါး အတွက် ငါ့မှာ အိမ်မက်တစ်ခု ရှိပါ၏။
စစ်မှန်သောဧ၀ံဂလိသတင်းစကားကို နားလည်ခြင်းနှင့်တုန့်ပြန်ခြင်းအရာများကို ဟန့်တားသည့် အတားအဆီး ဟူသမျှ ဖယ်ရှားခြင်းရှိမည့်နေ့တစ်နေ့အတွက် ငါ့မှာအိမ်မက်တစ်ခုရှိပါ၏။
အားလုံးတို့သည်(မိမိတို့၏ကမ္ဘာအသီးသီး) အားလုံးတို့ထံသွား၍ ဘုရားသခင်၏တန်ခိုး တော်တည်း ဟူသော ဧ၀ံဂလိတရားတော်ကို ဟောပြောဖို့ သူ့ရဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းကို တုန့်ပြန်မူရှိမည့်အကြောင်း ငါ့မှာအိမ်မက် တစ်ခုရှိပါ၏။
ဤကာလက်အကြောင်းကို လေ့လာခြင်း၌သင့်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမူကို ထိန်းသိမ်းထားဖို့သည် ကျွန်ုပ်၏ရည်မှန်း ထားသည့် အရာဖြစ်သည်။ အဘယ်သို့ဆိုစေကာမူ ကျွန်ုပ်သိရှိထားသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တရား တော်သည် ငါတို့၏အာရုံစိုက်မှုကို အစဉ်အမြဲမိန့်ဆိုထားပါသည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည် ငါတို့၏ ၀ိညာဉ်များအတွေးများနှင့် နောက်ဆုံးအနေဖြင့် အကြီးမြတ်ဆုံးတရားဟောဆရာများ၊ ကျမ်းစာသင်ကြား ပေးသော ဆရာသမားများတောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်သော နည်းလမ်းဖြင့်ငါတို့၏ စိတ်များကိုလှုံဆော်ခြင်းအရာ၌ ခိုင်မြဲစွာဖမ်းဆုပ်ထားနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဤကာလက်အကြောင်းလေ့လာဖို့သင်ဝင်လာတာနှင့်အတူ သင့်မှာကျမ်းစာအုပ်ပါလာရင် – သင့်လက်များ ထဲ၌ ပြည့်စုံသောဘုရားသခင်၏စိတ်နှလုံးတော်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်ဖွင့်ပြခြင်းများကို သင့်မှာရှိထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို သင်စိတ်ဝင်စားမှုရှိဖို့သည်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ရေးသားထား သောနှုတ်ကပတ်တော်၊ မှုတ်သွင်းထားသောနှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ၎င်းယူဆောင်လာသောဖွင့်ပြချက်များ သည်သင့်စိတ်နှလုံးသားထဲစွဲမြဲဖို့လိုအပ်ပေသည်။
ဘုရားသခင်ပြီးမြောက်သောအမှုအကြောင်းကိုသင့်အားယနေ့ကျနော်ပြန်လည်သတိပေးပါရစေ-ဘုရား သခင်နှင့်ဘုရားသခင်ကသာလျှင်ငါတို့၏မျိုးဆက်သစ်(ဒုတိယမွေးဖွား) ဖြစ်ခြင်းကိုဖြစ်စေသူဖြစ်၏။ ဘုရား သခင်သာလျှင်ငါတို့၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းကိုပြုလုပ်ပေးသူဖြစ်သည်။ဘုရားသခင်သာလျှင်ယုံ ကြည်ဖို့ ယုံကြည်ခြင်းကို ထာက်ပံ့ပေး သူဖြစ်သည်။
ငါတို့၌ရှိသောပြောင်းလဲခြင်းမျိုးဆက်သစ်ဖြစ်ခြင်း သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းနှင့် ယုံကြည်ခြင်းတို့သည် သင် (သို့) အကျွန်ုပ်၏ လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်မှုကြာင့်လုပ်ဆောင်ထားသောအရာ မဟုတ်ပေ။ လုံးဝကို မဟုတ်ပေ။ ဘုရား သခင်သည် သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်အားဖြင့် မငြင်းဆန်နိုင်သော ကျေးဇူးတော်ကို ၎င်းတို့အားလက်ခံ နိုင်ရန် ထောက်ပံ့ပေးထားခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
သင်နှင် အကျွန်ုပ်သည်တစ်ခြားသူများထက်သာ၍ ပညာရှိလို့ (သို့) ဖြောင့်မတ်လို့ ယုံကြည်တာမဟုတ်ပေ။ လုံးဝမဟုတ်ပေ။ ဘုရားသခင်သည် ကျေးဇူးကြီးမားစွာဖြင့် ကြားဝင်၍သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကို သတိပြုဖို့နှင့် ယုံကြည်ဖို့ ငါတို့၏နှလုံးသားကို ဖွင့်ပေးသောကြောင့် ငါတို့သည် ယုံကြည်ကြ၏။ ယေရှုကအခါ သမယများ များစွာတွင်မိန့်ကြားခဲ့သည်မှာ”နားရှိသောသူကြားစေ”သို့ဖြစ်၍သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်သည် သေခြင်း၏ ကန်းနေသော နားကိုဖယ်ရှားပေးပြီး၊ ကြားနိုင်သောအစွမ်းကိုပေးသနားတော်မူသောကြောင့် ငါတို့ သည်ဘုရား သခင်ကို ယနေ့တွင် ကျေးဇူးတင်နိုင်ပေသည်။
သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်အကျိုးရလဒ်မှာ “ဘုရားသခင်၏သား” ဟူသောငါတို့၏ဖြစ်ခြင်းအရာ၌ ငါတို့သည်ဝမ်း မြောက်ကြ၏။- သူသည်ကောင်းသောခမည်းတော်ဖြစ်ပြီး အကျွန်ုပ်သည်ဘုရားသခင်၏ သားဖြစ်၏။
သို့သော်ငြားလည်း၊ ငါတို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းထဲတွင် ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ရခြင်းအခြေခံ အုတ်မြစ်သည် နက်နဲ သိမ်မွေ့သော တစ်စုံတစ်ခုပေါ်မှာလျောင်းထားသည်ဖြစ်၍ ၎င်းအရာမှာသူသည် Kurios – သခင်ဖြစ်နေဆဲ ဖြစ် ကြောင်းနှင့် ငါတို့သည် Doulos – ကျွန်များသာဖြစ်ကြကြောင်း မမေ့လျော့ကြပါစို့။
Doulos ကို ကျမ်းစာဘာသာပြန်ခြင်းပုံစံ (versions) အများစုတွင်အစေခံအဖြစ် အဓိပ္ပာယ်မရှိပေ။ “အလုပ်သမား” ဟုအဓိပ္ပာယ်မသက်ရောက်ပေ။၎င်းသည် စာရင်းငှါး (ငှါးရမ်းအလုပ်လုပ်သူ)ဟုလည်း မဆိုလို ပေ။ ၎င်းကိုကူညီသူဟု လည်း အဓိပ္ပာယ်မပေါက်ပေ။
ပုံစံအချိုးဖြင့် အစေခံဟုအဓိပ္ပာယ်ရှိသောဂရိစကားလုံးခြောက်ခု (သို့) ခုနှစ်ခုရှိပါ သည်။
Doulos ဟူသောစကားလုံးသည်“အစေခံ”ဟု လုံးဝ အဓိပ္ပာယ်မ ရှိပေ။
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၂၁း၁-၆ တွင်ဖတ်ရသည်မှာ ဟေဗြဲအမျိုးဖြစ်သော ကျွန်ကိုဝယ်လျှင်၊ ခြောက်နှစ်သာ အစေ ကျွန်ခံစေရမည်။ သတ္တမနှစ်ရောက်သော်၊ ကိုယ်ဘိုးကိုမတောင်းပဲ လွှတ်ရမည် …သို့မဟုတ်ကျွန်က ကျွန်တော် သခင်နှင့် မယားသားသမီးတို့ကိုကျွန်တော်ချစ်ပါ၏။ မထွက်မသွားလိုပါဟု အတည့်အလင်းပြော ဆိုလျှင်….သခင်သည်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်သို့၎င်း အိမ်တံခါးတိုင်သို့ ၎င်းဆောင်ယူ၍နားရွက်ကို စူးဖြင့် ဖေါက်ပြီးမှထိုကျွန်သည်အ စဉ်အမြဲကျွန်ခံရမည်။
ဤအရာကငါတို့ဆီသို့ ဘာသယ်ဆောင်ပေးပါသနည်း။ ၎င်းသည်မိမိသခင်ကိုချစ်သော ကျွန်တစ်ဦးက မိမိ၏ သူ့ကျွန်ခိုင်းဖက်ဘ၀နှင့် စပ်လျဉ်း၍ရွေးချယ်မှုအကြောင်းကိုငါတို့အားသတိရစေပါသည်။ ၇နှစ်ပြီးရင် သူသည်လွတ်လပ်ခွင့် ရှိပြီး၊ သူနှစ်သက်ရာဘ၀နဲ့ရှင်သန်လို့ရပေသည်၊ ရွေးချယ်မှုအနေဖြင့်အကယ်၍ သူ (သို့) သူမသည်မိမိတို့၏ သခင်ကို ချစ်မြတ်နှိုးလျှင် ကျွန်တစ်ဦးအနေဖြင့် ကျန်ရစ်ခွင့် ရွေးချယ်နိုင်ပြီး၊ ၎င်းကို နားရွက်တွင် အပေါက်ဖောက်ခြင်း ဖြင့် ထင်ရှားစေခြင်းရှိ၏။
သုတ္တံကျမ်း၂၃း၂၆ တွင် ငါတို့အားကျမ်းစာပြောထားသည်မှာ – “ငါ့သားသင့်နှလုံးသားကို ငါ့အားပေးလော့” ထို့နောက် ဂလာတိ ၆း၇ ထဲတွင် “ ယခုမှစ၍အဘယ်သူမျှငါ့ကို မနှောင့်ယှက်စေနှင့်၊ ငါ့ကိုယ်၌သခင်ယေရှု၏ ဒဏ်ချက်အရာကို ငါဆောင်၏ ငါတို့၏ခန္စာကိုယ်၌ ယေရှု၏ဒဏ်ချက်အရာ (အမှတ်သား)ကို ဆောင်ကြ၏။” NIV
ဤအရာသည် ခပ်သိမ်းသောဒုစရိုက်မှငါတို့ကို ရွေးနှုတ်ခြင်းငှား၎င်း၊ ကောင်းသောအကျင့်ဘက်၌ စိတ်အား ကြီး၍ ပိုင်ထိုက်တော်မူသော အမျိုးကို မိမိအဘို့ စင်ကြယ်စေခြင်းငှား၎င်း ကိုယ်ကို စွန့်ကြဲတော်မူသော (တိတု ၂း၁၄) ထိုသခင်ထံသို့ ကျွန်ရဲ့ စိတ်သဘောထားမွေးထားဖို့ရန် ငါတို့၏သခင်ကြီး ဆီတွင် ဆန္ဒရှိသော အရှုံးပေးခြင်းဖြင့် ငါတို့ ကိုယ် ငါတို့ပေးအပ်ဖို့သင်နှင့် ကျွန်ုပ်အား ဘုရားသခင်၏ ခေါ်တော်မူခြင်းဖြစ်သည်။
ဂရိဝေါဟာရ (ပိုင်ဆိုင်မူပြ Katoxe) စာသားတိုင်းအဓိပ္ပာယ်မှာ – “တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ အပိုင်း (သို့) တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မူ”ဟူ၍ ဖြစ်၏။
ဒီကနေ့၊ အခြေခံအားဖြင့် ငါတို့သည်ဘာဂုဏ်ပုဒ်ပဲရှိနေပါစေ ပြဿနာမဟုတ်ပေ။ သင်းအုပ်၊ ဘုန်းကြီး (အင်္ဂလန်ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီး) အသင်းတော်လူကြီး၊ ခရစ်ယောန်ဂိုဏ်းအုပ်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး၊ ဦးစီးမှူး၊ တမန်တော်၊ ပရောဖက်၊ ဧ၀ံဂေလိဆရာ (သို့) ကျောင်းဆရာစသည်ရုဏ်ပုဒ်ရှိနေပါစေ – အဓိကအရေးကြီးသောအရာမှာ (ဘုရား သခင်၏သားဖြစ်ခြင်း)၊ (ကောင်းကင်နိုင်ငံသား) ဟူသောရုဏ်ပုဒ်သာဖြစ်ပေသည်။ အဘယ်ကြောင့် နည်း။ အကြောင်း မူကားထိုအရာမှသော်၎င်း၊ ထိုရာထူးတစ်ခုတည်းဖြင့်သာ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်အခြားသော အလုပ်အားလုံးနှင့် ငါတို့စွဲကိုင်သော ဂုဏ်ပုဒ်များကိုငါတို့အားပေးထားခြင်းရှိ၏။
ကောင်းမွန်မှန်ကန်သောသီသြလောဂျီ- မှာငါယူဆောင်ချင်သောအရာ- ယူဆောင်လာဖို့ – သီသြလောဂျီ – အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းအားဖြင့်နှင့် ဘုရားတန်ခိုးသန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်အားဖြင့် ၎င်း၏လက်တွေ့ အသုံးချခြင်း “၂ပေ ၁း၃”တွင် ငါတို့အားပြောထား သည်မှာ “…..ဘုရားသခင်ကိုသိသောဥာဏ်အားဖြင် ငါတို့အားအသက်ရှင်ခြင်း၊ဘုရားဝတ်၌မွေ့လျော်ခြင်းနှင့်စပ်ဆိုင်သောအရာရှိသမျှတို့ကိုဘုရား တန်ခိုးတော် သည်ပေးသနားတော်မူပြီ။”ငါတို့ကိုဘုန်းတော်နှင့်ကောင်းသောအကျင့်သီလသို့ခေါ်တော်မူသောသီသြလော ဂျီ King James
သီသြလောဂျီ(theology)ဆိုတာ ဂရိဘာသာစကားမှလာ၍ theos (ဘုရား)နှင့် logos (စကားလုံး) – ရိုးရှင်းသော အဓိပ္ပာယ်မှာ “ဘုရားသခင်အကြောင်းအသိပညာ (သို့မဟုတ်) ဘုရားသခင်အကြောင်းလေ့လာ ခြင်းဖြစ်သည်။”
ဧ၀ံဂေလိတရားဟောခြင်းနှင့် အစောပိုင်းက ကျနော်ဖော်ပြထားပြီးသော ငါ၌ရှိသောအိမ်မက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခရစ်ယာန်နှင့် ခရစ်ယာန်မဟုတ်သောသူတို့တစ်ဦးစီအလိုက် စစ်မှန်သောဧ၀ံဂေလိတရားကိုကြားနားဖို့လို အပ်သည်ဟူသော အရာ သည် အချက်အလက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
၁။ ၎င်းက ငါတို့ဘယ်သူဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဘယ်ကလာကြောင်းသတိရစေသည်။
၂။ ၎င်းက ငါတို့၏ ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းကို မြင့်တင်သည်။
၃။ ၎င်းက ငါတို့၏အမူဆောင်ရွက်ခြင်းကို ခွန်အားဖြစ်စေသည်။
၄။ ၎င်းက ငါတို့၏ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသော စင်ကြယ်ခြင်းအရာကို သေချာမှုပေးသည်။
မကောင်းဖြစ်စေ” (သို့) ကြမ်းတမ်းစေလျှင်
အကယ်၍ငါတို့သည် ယဉ်ကျေးမှုအရပို၍လက်ခံနိုင်မှုရှိလာအောင် သတင်းကောင်းကို သန့်စင်ထား (မွမ်းမံထား)လျှင်
အကယ်၍ငါတို့သည် ဧ၀ံဂေလိတရားအထဲကိုယ်၌က အတင်းအကြပ်ပြုနေသော “ဗွေယူစရာ (အနှောင့်အယှက်) များကိုပိုပြီး လက်ခံနိုင်စရာဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ဖို့ ကြိုးစားကြလျှင်
ထိုကဲ့သို့ပြုနေသော်၊ ငါတို့သည်မိမိတို့၏ နှစ်လိုဖွယ်နှင့် သက်ထောင့်သက်သာဖြစ်သော ယုံကြည်မှုများကို ကုန်ခမ်းစေကြောင်းနှင့် ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်သည် ကယ်တင်ခြင်းပေးမဆောင်ဖို့ မစွမ်းဆောင်နိုင်ဖြစ် စေသဖြင့် မကြာခင်မှာပင်လျှင် ငါတို့သည် စိတ်ချောက်ခြားခြင်းတွေ့ရှိပါလိမ့်မည်။
လွန်ခဲ့သောအချိန်တုန်းက ကျမ်းစာဖတ်နေစဉ် “သူ၌ခြားနားသောစိတ်ဓာတ်ရှိ၏” (သို့) King James ကျမ်းစာတွင် သူ၌အခြားသောစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိ၏။ (တောလည်ရာ ၁၄း၂၄) ဟူသောစာသားများသည် အံ့အားသင်ဖွယ် ကျနော်ကိုဖမ်း စားထားသည်။ ဘယ်လောက်အရေးကြီးပြီး အခြေခံအုတ်မြစ်ဆိုင်ရာ အသိမှတ်ပြုခြင်းမျိုးအရင်က ဘယ်တုန်းကမှ မမြင်တွေ့ခဲ့ဖူးပေ။
၎င်းသည်ကျနော်ဒူးများထောက်စေပြီး၊ နိူးထမူအချိန်များလွမ်းခြုံလာကာ၊ သခင်ဘုရားနှင့်အတူလျှောက်လှမ်း ခြင်းခရီးကိုအစဉ်တစ်လျှောက်ထိရောက်မှုပေးသည့်ထိပင် အကျိုးသက်ရောက်စေပါသည်။ သင့်ကိုလည်း တစ်နည်းတစ်ဖုံဖြင့် ၎င်းအားဖြင့်ဖမ်းစားလိမ့်မည်လို့ ကျနော်မျှော်လင့်မိပါသည်။ သည့်အပြင်၎င်းသယ် ဆောင်လာသော အရာဖြင့် သင် ၀ိညာဉ်ထိကူးဆက်လိမ့်မည်ဟုလည်း မျှော်လင့်ပါ၏။
ငါတို့သည်ကျမ်းစာဇာတ်ကောင်တစ်ဦးဖြစ်သော ကာလက်အပေါ်ဗဟိုပြုနေကြပါသည်။ သို့သော်ထို့သို့မသွားခင်၊ ကျမ်းစာထဲတွင်ယုံကြည်ခြင်းရှိသော လူယောကျာ်းနှင့် လူမိန်းမများစွာရှိကြောင်း အရင်အသိပေးပြောကြပါရစေ။
ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကြားတွင် “သူသည်ငါ့ကိုသတ်သော်လည်း ငါသည်သူ့အားယုံကြည်ကိုးစားမည်” (ယောဘ ၁၃း၁၅) ဟူသောစကားကိုပြောစေနိင်သည်မှာ ဘုရားသခင်၏စောင့်ရှောက်မူရှိ ယုံကြည်ခြင်းသာဖြစ်သည်။
တောက်လောင်နေသောမီးလျှံဝ၌ရပ်ကာ ရှာဒရက်၊ မေရှက်၊ အဗေဒနေဂေါတို့အား “အကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ် သောဘုရားသခင်သည်မီးလောင်လျက်ရှိသောမီးဖိုထဲက အကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်လွှတ်နိုင်တော်မူ၏ ကိုယ်တော် ၏လက်မှလည်း ကယ်လွှတ်တော်မူလိမ့်မည်။” (ဒံယေလ ၃း၁၇) ဟူသော စကားကို ပြောစေနိုင်သည်မှာ ဘုရား သခင်၏ကွယ်ကာခြင်းရှိ ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒံယေလကို ခြင်္သေတွင်းထဲမှ အသက်ရှင်သန်ခွင့်ပေးတာလည်း ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ရှိ ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။“ဒံယေလကိုတွင်းထဲကထုတ်ယူ၍၊ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သောကြောင့် သူ၌ထိခိုိက် သောအနာတစ်ခုမျှ မရှိ”(ဒံယေလ ၆း၂၃)
သခင်ယေရှု၏ခြေတော်ကို မျက်ရည်နှင့်ဆေးပြီး ဆံပင်နှင့်သုတ်ပေးသည့်ဆိုးသွမ်းသော အမျိုးသမီးကို ကယ်တင်သောရာသည် ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ (လုကာ ၇း၅၀)
ဟေဗြဲသြ၀ါဒအခန်းကြီး ၁၁ ကိုအချိန်ပေးပြီး စူးစမ်းလေ့လာမည်ဆိုသော ပို၍များစွာတွေ့ရှိရပါသည်။
ယုံကြည်ခြင်းသည် အာဗေလအား ပို၍ကောင်းသောယဇ်ပူဇော်ခြင်းပေးစေနိုင်ခဲ့သည် (ဟေဗြဲ ၁၁း၎)
ယုံကြည်ခြင်းသည်ဧနောက်အား သေခြင်းတရားကို မမြည်းစမ်းပဲ ကောင်းကင်သို့ ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။ (ဟေဗြဲ ၁၁း၅)
ယုံကြည်ခြင်းသည်နောဧအားကြီးမားသော သဘောင်္တည်ဆောက်ကာ၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဟော ကြားစေခဲ့သည်။ (ဟေဗြဲ၁၁း၇)
ယုံကြည်ခြင်းသည် အာဗြံဟံအား ဘုရားသခင်ခေါ်တော်မူခြင်းနောက်ကိုလိုက်စေသည်။ (ဟေဗြဲ ၁၁း၈)
ယုံကြည်ခြင်းသည်ဣဇက်အား သူ့သားများကို ကောင်းကြီးပေးစေကာ၊ ထိုအရာသည် ယာကုပ်အား သူ့သားများကို ကောင်းကြီးပေးစေလို၍၊ ထိုအရာကပင် ယောသပ်သည် အနာဂတ်ကို မျှော်လင့်စေ ခဲ့သည်။ (ဟေဗြဲ ၁၁း ၉)
ယုံကြည်ခြင်းသည်စာရာအား ကလေးဖွားမြင်စေ၏။ (ဟေဗြဲ ၁၁း ၁၁)
ယုံကြည်ခြင်းသည် မောရှေအားခရစ်တော်ကို ပြစ်တင်ရှုတ်ချဖို့အတွက်အပြစ်၏ စည်းစိမ်ကိုငြင်း ပယ်ဖိုိ့ခေါ်တော်မူ၏(ဟေဗြဲ ၁၁း၂၃-၂၄)
ယုံကြည်ခြင်းသည် ရာခပ်အားသူလျှိုများကို လက်ခံစေ၏။ (ဟေဗြဲ ၁၁း၃၁)
အကျပ်အတည်းကာလတွင် ဂိဒေါင်၊ ဗာရက်၊ ရှံဆုန်၊ ယေဇသ၊ ဒါဝိဒ်၊ ရှေမွေလ၊ ပရောဖက်များနှင့် အခြားများစွာသော လူတို့ဆီကို လာသောအရာမှာ ယုံကြည်ခြင်းသာဖြစ်သည်။
ယုံကြည်ခြင်းသည်ထင်ရှားပေါ်လွင်လာသောအခါ အရေးပါသောတန်ခိုးပြသခြင်းရှိတတ်၏။ ဤဇာတ်ကောင်း အားလုံးသည်ဟေဗြဲ၁၂း၁ထဲတွင်ဤစကားလုံးများဖြင့်အနက်ဖွင့်ဆိုထားသည်။ “ထိုကြောင့်ဤ မျှလောက်များ စွာသော သက်သေအပေါင်းတို့သည် ငါတို့ကို ၀န်းရံလျက်ရှိကြသည်ဖြစ်၍……
သို့ဖြစ်၍၊မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုသိမှတ်၍၊ သတိရစေလိုသည်မှာ-ထိုသူတို့အားလုံးထဲ တွင် တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ “သူ ၌ခြားနားသော စိတ်ဓာတ်ရှိ၏” ဟူ၍ဖော်ပြခြင်းမရှိပေ။
ကာလက်ဆိုတာ မည်သူနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ယောရှုကို သိမှတ်၍သတိရကြပါ၏။ သို့သော်လည်း ကြိမ်ဖန်များတွင် သူ့ရဲ့ခရီးသွားဖော်ကာလက်က်ုတော့ မေ့လျော့တတ်ကြ၏။
ကာလက်နာမည်သည်ဟေဗြဲဘာသာစကားတွင်ခွေးဟုအဓိပ္ပာယ်ရှိတာစိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ကာလက်အမည် သည် ခွေးအဓိပ္ပာယ်ရှိဟုတွေးမှတ်ထားပြီးအဲဂုတ္တုပြည်တွင် ကျွန်ခံစဉ်သူ့အားပေးထားသော နာမည်ဖြစ်သည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေ၊ ထိုအချိန်ကာလမှာပင်သူသည်ခြားနားသောစိတ်ဓာတ်ရှိသူဖြစ်ပြီး သူ့ပုံစံသည် ခွေးပုံပေါက် သော်လည်းသူသည်ခြင်္သေ့တစ်ကောင်လိုအသက်ရှင်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ကျနော်ယုံကြည်မိပါ၏
ဒေသနာကျမ်း ၉း ၄ တွင် ပြောထားသည်မှာ “အသက်ရှင်သောလူစုအပေါင်းနှင့်ဆိုင်သောသူသည် မြှော်လင့် စရာရှိ၏ အသက်ရှင်သော ခွေးသည်သေသော ခြင်္သေထက်သာ၍ ကောင်းမြတ်၏။” NIV
စကားအဆက်စပ်အနေဖြင့် ကာလက်က်ုပထမဆုံး ငါတို့တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာ၊ ဣသရေလလူမျိုးများသည် ပါလစတိုင်ပြည် တောင်ဘက်နေဂက် (Neger) ကန္တရစမ်းရေရှိရာကာဍိ ဗာနီ(kadesh Barnera) တွင်စခန်း ချထား ကြသည်။
၎င်းသည်အဲဂုတ္တူပြည်မှ ထွက်ခွာအပြီး တစ်နှစ် (သို့) နှစ်နှစ်သာရှိသေးပြီး၊ လူစုတို့သည် ဘုရားသခင်ပြုသော အမူတော်မြတ်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
လူစုတို့သည်များစွာသော နိမိတ်လက္ခဏာများ မြင်တွေ့ကြ၏ –
ပင်လယ်နီပွင့်သွားခြင်း (ထွက် ၁၄း၂၁)
ကျောက်မှ စီးသောရေ (ထွက် ၁၇း၆ နှင့် တော ၂၀း ၁၁)
လူအုပ်ကြီးအားကျွေးမွေးဖို့ မန္နမုန့်နှင့် ငုံးသား (ထွက် ၁၆း၁၃-၁၄)
ကျူးကျော်သူ အာမလက်လူမျိုးများကို တိုက်၍ နိုင်သည်။ (ဓမ္မရာဇ၀င်ပထမ ၃၀း၁-၃၁)
မောရှေသည်သိနာတောင်ပေါ် ပညတ်တေ်ာ ၁၀ ပါးကို ရရှိ၍ ရွှေ့နဲ့ ပြုလုပ်ထားသော နွားရုပ်တုကို ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ (ထွက် ၂၀) – (ထွက် ၃၂း၇-၁ဝ)
သူတို့၏လူမျိုးဖြစ်ခြင်းအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်ကျသော လိုအပ်ချက်ဟူသမျှကို သူတို့၏ရှင်ဘုရင်ဖြစ်သော ဘုရားသခင်၏ လက်တော်အောက်တွင် တည်ဆောက်ပြီးဖြစ်၍ ယခုတွင်မူ ဂတိတော်နယ်မြေကို ၀င်စားဖို့ ချိန်ဖြစ်ပါ သည်။
တောလည်ရာ ၁၃း ၁-၃၃ ထဲတွင် ယောရှုနှင့်ကာလက်တို့၏ စွန့်စားခန်းအကြောင်း ငါတို့ဖတ်ရှုရပါသည်။ ဘုရားသခင် ၏အမိန့်တော်ဖြင့် မောရှေသည် ကတိတော်နယ်မြေဖြစ်သော ခါနန်ပြည်ကိုလေ့လာဖို့ သူလျှို ဆယ့်နှစ်ပါးကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဤလူအားလုံးတို့သည်အသီးသီးသောမိမိတို့ လူမျိုးမှခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့သည် ခါနန်ပြည်ကို စူးစမ်းလေ့လာဖို့သွား၍ထိုအရပ်ရှိ အသက်ရှင်ပုံ အခြေအနေတွေကို သတင်းယူလာဖို့ဖြစ်ကြသည်။
ကာလက်နှင့်ယောရှုတို့သည် သူတို့အုပ်စုထဲကဖြစ်ကြ၏။ ကာလက်နှင့်အခြားသောသူလျှိုများသည် ခါနန်ပြည်၏ မြောက်ဘက်ဆုံးအပိုင်းဆီကို မိုင်ပေါင်းတစ်ရာကျော် ကုန်းကြောင်းလျှောက်ရာက ပြန်လာကြ၏ ဆယ့်နှစ်ပါးစလုံး၏ ခြေများသည်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးနင်းချေကြ၏ လုပ်ငန်းအတွက် ရက်ပေါင်းလေးဆယ်အချိန်ကုန် ကြပြီးဆယ့်နှစ်ပါးစလုံးပြန်လာကြသောအခါသင်္ဘောသဖန်းသီးနှင့်စပျစ်တစ်ခိုင်သယ်လာကြရာအဘယ်မျှ လောက်ရှည်သည်မှာ လူနှစ်ဦးသည်မိမိတို့ကြားမှာထိုစပျစ်ခိုင်ကိုထား၍ထမ်းစဉ်နှင့် သယ်လာရသည်။ (တောလည်ရာ ၁၃း၂၃)
စူးစမ်းလေ့လာသူအများစုဖြစ်သော ဆယ့်ဦးတို့သည် ကတိတော်နယ်မြေနှင့် နေထိုင်သူများအကြောင်းကို စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာသတင်းပေးကြသဖြင့် ၎င်းသည်မျှော်လင့်နေကြသော လူစုများအတွက်စိတ်မသက်မသာမူ များတိုးမြင့်စေခဲ့ကာမျှော်လင့်ချက်ဆုံးပါးသွားစေပါသည်။ပေးပို့သောသတင်းကြောင့်ငိုကြွေးခြင်း၊ မြည်းတမ်း မူတွေ ဖြစ်စေပြီး၊လူစုများအကြားပုန်ကန်မူများထကြွခြင်းအကြောင်းဖန်စေပါသည်။
“ထိုအခါပရိတ်သတ် အပေါင်းတို့သည်အသံကို လွှင့်၍ မြည်တမ်းသဖြင့် တစ်ညလုံးငိုကြွေးကြ၏။” (တော လည်ရာ၁၄း၁)။ အမျိုးသမီးများသည် သူတို့၏ခင်ပွန်းစစ်ပွဲထဲတွင် အသတ်ခံရ၍သားသမီးများ ဖခင်မဲ့ဖြစ်မည့် အရေး ရှိုက်ငိုနေကြ၏။မနက်ရောက်လာတော့လူစုလူဝေးကြီးသည်ပုန်ကုန်ဖို့နှင့်ခေါင်းဆောင်သစ်ရွေးချယ်၍ အဲဂုတ္တူပြည်သို့ ပြန်သွားဖို့ စတင်လာကြ၏။
နယ်မြေသည်ဖော်ပြထားခြင်းရှိသကဲ့သို့“နို့နဲ့ပျားရည်စီးဆင်းပါ၏။”သို့သော်လည်းသူတို့မြင်ကြသောခိုင်ခန့် သော မြို့နံရံနှင့် လူကောင်ကြီးများမှာ” မူ ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဣသရေလကင်း ထောက်သမား များက ၎င်းတို့ နှင့် ယှဉ်ရင်ငါတို့သည် ကျိုင်းကောင်မျှသာဖြစ်၏ဟု ဆိုကြ၏။ သို့သော်လည်း ကာလက်က တော့ အရာများကို ခြားနားစွာတွေ့ မြင်ခဲ့သည်။
ကာလက်၌ဘုရားသခင်ပေးထားသော ခြားနားသောစိတ်ဓာတ်ဖြင့် သက်သေခံချက်မှာ – “ကာလက်ကလည်း ချက်ချင်း ချီသွား၍ ထိုပြည်ကိုိသိမ်းယူကြစို့၊ အောင်နိုင်ကောင်သည်ဟု မောရှေရှေ့မှာ လူများတို့ကို ငြိမ်းစေ၏။”(တော ၁၃း၃၀) ဟုကြွေးကြော်လေသတည်း။
ယောရှုနှင့်ကာလက်တို့သည် ကြီးမားသောယုံကြည်ခြင်းရှိသူဖြစ်ပြီး၊“ထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ကိုနစ်သက် လျှင်၊ နို့နဲ့ ပျားရည်စီးသော ထိုပြည်သို့ ငါတို့ကိုဆောင်သွင်း၍ အပိုင်းပေးတော်မူလိမ်မည်။ ထာဝရဘုရားကို မပုန်ကန်ကြပါနှင့်။ ထိုပြည်သူပြည်သားတို့ကိုမကြောက်ကြနှင့်။ သူတို့သည်ငါတို့စားစရာဘို့ဖြစ်ကြ၏။ သူတို့၌အမှီသဟဲမရှိ၊ ထာဝရဘုရားသည် ငါတို့ဘက်၌ရှိတော်မူ၏။ သို့ဖြစ်၍သူတို့ကိုမကြောက်ကြနှင့်” (တော ၁၄း ၈-၄) ဟူ၍ ပြောဆို ကာ ဣသရေလလူတို့အား ချက်ချင်းသွားကတိတော်ပြည်ကို သွားဖို့ တိုက်တွန်းကြ၏။
ဤနေရာမှာ ကျွန်ုပ်တို့သည်အချက်နှစ်ခုကို သိမှတ်စေချင်ပါသည်။ —
၁။ အပေါင်းဆန်သော စိတ်နေသဘောထား
၂။ သူတို့၏ စကားထဲတွင် ယေဟောဝါဘုရားကို ရှင်းရှင်းလေးဖော်ပြပြောဆိုကြ၏။
သူလျှိုဆယ်ဦးသည်ထာဝရဘုရားကို၊ သူတို့တွေ့မြင်တာကိုသာဖော်ပြကြကာပရိသတ်များကို ကြောက်လန့် စေခဲ့သည်။ ယောရှုနှင့် ကာလက်တို့ကလည်း အလားတူသော လူကောင်ကြီးများနှင့် ခိုင်ခန့်တဲ့ မြို့နံရံတွေကို မြင်ခဲ့ကြ၏။ ဒါပေမဲ့ သူတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းမှန်ပြောင်းဖြင့် မြင်ကြ၏။ ထာဝရဘုရားသည် ထိုလူတွေကို အောင်နိင်စေမည်ကို သူတို့နှစ်ဦးက မြင်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါ၏။
ဒါဝိဒ်နာမည်သည်လည်း ယုံကြည်ခြင်းသူရဲကောင်းကြီးတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပါသည်။ သူ့ဘေးပတ်ဝန်း ကျင် တွင်ရှိသော ရှောလု၏စစ်သည်တော်များသည် ကြောက်လန့်နေကြချိန်မှာ ဒါဝိဒ်သည် လူကောင်းကြီးကို ရင်ဆိုင်ကာကြွေးကြော်ခဲ့သည်မှာ – ဓမ္မရာဇ၀င်ပထမ ၁၇း ၁၀ ….. “တစ်ဖန်ဖိလိတ္တိလူက ဣသရေလ ဗိုလ်ခြေ တို့ကို ယနေ့ငါကြိမ်းပေ၏။….”
ဤနေရာတွင်DNA မျိုးရိုးဗေဇအရ နတ်ဆိုးမျိုးစပ်ထားသော မကောင်းဆိုးဝါးကြီးသည် ဣသရေလလူမျိုး၏ ထာဝရဘုရားအားညစ်ညမ်းစေဖို့အကြံ့အစည်ရှိ၏။ဒါဝိဒ်ပြောတာငါတို့ဘာတွေ့ရသလဲ။ “…..အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏ဗိုလ်ခြေတို့ကို ကြိမ်းရမည်အကြောင်းအရေဖျားလှီးခြင်းကို မခံသောထိုဖိလိတ္တိလူသည် အဘယ်သို့ သော သူဖြစ်သနည်း” (ဓမ္မရာဇ၀င် ပထမ ၁၇း၂၆)
သို့ဖြစ်၍ဂေါလျက်က ပျက်ရယ်ပြုလေ၏ – ရှောလုနှင့်အရေးကြီးတာက ထာဝရဘုရား၏စစ်သည်တော် ဒါဝိဒ်သည်မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ခြင်း၊ ယုံကြည်ခြင်းရှိခြင်း၊ သတ္တိနှင့်မိမိဝိညာဉ်သည်အထဲတွင်ထကြွကာ ဖော်ပြ လိုက်သော စကားမှာ ဓမ္မရာဇ၀င် ပထမ ၁၇း၄၅-၄၇ “ဒါဝိဒ်ကသင်သည် ထား၊ လှံ၊ ကိဒုန်ပါလျက် ငါထံသို့လာ၏။ ငါသည်သင်ကြိမ်းပေးသော ဣသရေလဗိုလ်ခြေတို့၏ ဘုရားသခင်၊ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေ အရှင်ထာဝရဘုရား၏ နာမတော်ပါလျက် သင်ရှိရာသို့လာ၏။ ထာဝရဘုရားသည် သင့်ကိုငါ့လက်၌ယနေ့ အပ်တော်မူသဖြင့် သင်ကိုငါသတ်၍ လည်ပင်းကို ဖြတ်မည်။ ဖိလိတ္တိဗိုလ်ခြေအသေကောင်များကို မိုယ်းကောင်း ကင်ငှက်နှင့် တောသားရဲတို့အားယနေ့ငါပေးမည်။ ဣသရေလအမျိုး၌ဘုရားသခင်ရှိတော် မူသည်ကို မြေကြီး သားအပေါင်းတို့သည် သိရကြလိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရားသည် ထား၊ လှံအားဖြင့် ကယ်တင် တော်မမူကြောင်းကို ဤပရိသတ်အပေါင်းတို့သည် သိရကြလိမ့်မည့်အကြောင်းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည် စစ်မူကိုပိုင်၍ငါတို့ လက်သို့အပ်နှံတော်မူမည်ဟု ဖိလိတ္တိလူအားဆို၏။”
ဒါဝိဒ်၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ငါတို့၏ဆက်စပ်သောယောရှုနှင့် ကာလက်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်းသည် ထာဝရဘုရား ၌သာဖြစ်၏။သူတို့၏စိတ်ဆန္နမှာလူတွေကိုခွန်အားပေးဖို့နှင့်ကျန်လူထုတို့သည်နို့နှင့်ပျားရည်ကို စားသောက် နေရ မည်အချိန်တွင် သဲကန္တရထဲတွင်နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်အစာရေ ဆာငတ်မွတ်၍၎င်း အသက်ဆုံး ရှုံးဖို့ထိ အဆုံးသတ်ရမည် ယုံကြည်ခြင်းကင်းမဲ့နေသည့်အချိန်တွင် (သူတို့နှစ်ဦး၏) ယုံကြည် ခြင်းသည် ခါနန်ပြည်ကို ၀င်ရောက်ရတဲ့ကြီးမားသော ဆုလဒ်ရိတ်သိမ်းစေခဲ့သည်။
သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကြောင့် ယောရှုနှင့်ကာလက်သည် သူတို့မိသားစုဝင်များနှင့် ကတိတော်ပြည်တွင် နေထိုင်ရမည့် ကတိတော်ကိုခံရကြ၏။ သူတို့ရရှိသောကတိတော်ပြည့်စုံဖို့ အချိန်ကြာကြာစောင့်ဆိုင်း ရသော်လည်း ဘုရားသခင် သည်ကတိတော်အတွက် သစ္စာအမြဲရှိပါသည်။ ကတိတော်နယ်မြေကို သူလျှို ဆယ့်နှစ်ဦးအစပြု လေ့လာစူးစမ်းချိ်န်မှစ၍ ၄၅နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပါသည်။ ယောရှု၏ဦးဆောင်မူအောက်၌ မျိုးဆက် သစ်ဣသရေလလူမျိုးများသည် ခါနန်ပြည်ကို အပြီးအပိုင်အောင်နိုင်သောအခါ ကာလက်က ယောရှုထံ ပြောဆိုထားသည်မှာ –
“ဤပြည်ကိုစူးစမ်းစေခြင်းငှာဘုရားသခင်၏ ကျွန်မောရှေသည် အကျွန်ုပ်ကိုကာဒေရှဗာနအရပ်မှ စေလွှတ် သောအခါ၊ အကျွန်ုပ်သည်အသက်လေးဆယ်ရှိပါ၏။ အကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စိတ်ထင်သည့်အတိုင်းပြန်ကြား လျှောက်ထားပါ၏။ အကျွန်ုပ်နှင့်အရှေ့သွားသောညီအစ်ကိုတို့သည် လူများစိတ်ပျက်စရာပြု သော် လည်း အကျွန်ုပ်သည် အကျွန်ုပ်၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားနောက်တော်သို့ လုံးလုံးလိုက်ပါ၏။ ဣသရေလ အမျိုးသည်တော၌ လှည့်လည်စဉ်အခါ၊ ထာဝရဘုရားသည် ထိုသို့မောရှေအားမိန့်တော်မူသော နေ့မှစ၍ ယခုတိုင်အောင်အမိန့်တော် ရှိသည့်အတိုင်းအနှစ်လေးဆယ် ငါးနှစ်ပတ်လုံးအကျွန်ုပ်အသက်ကိုရှင် စေတော် မူသဖြင့်၊ ယနေ့မှာအကျွန်ုပ်သည် အသက်ရှစ်ဆယ်ငါးနှစ်ရှိ ပါပြီး……သို့ရာတွင်မောရှေစေလွှတ် သောနေ့၌ ခွန်အားရှိသကဲ့သို့ ယနေ့၌ရှိပါ၏။ ထိုအခါ ထွက်ဝင်ခြင်းအမူ၊ စစ်တိုက်ခြင်းအမူကို ဆောင်ရွက်ခြင်းငှါ တက်စွမ်းနိုင်သကဲ့သို့ ယခုလည်း တတ်စွမ်းနိုင်ပါ၏ “ယောရှုမှတ်စာ ၁၄း၇-၈-၁၀-၁၁”
ကာလက်ထံမှ ငါတို့သင်ယူနိုင်သော သင်ခန်းစာများစွာရှိ၏။ အသီးသီးသောငါတို့၏ ခရီးစဉ်နှင့် အမူတော် မြတ်လုပ်ငန်းတွင် ငါတို့အားထောက်မပေးမည့် သင်ခန်းစာများရှိပေသည်။ ပို၍အရေးကြီးသည်မှာ ယေရှု ခရစ်နှင့်ငါတို့၏ ဆက်နွယ်မှုတွင် ဖေးမပေးလိမ့်မည်။
ငါတို့၏လမ်းခရီးစဉ်များ၊ အမူတော်မြတ်လုပ်ငန်းများ၌ ဆုလာဒ်များ၊ အောင်မြင်မူများနှင့် ကြီးထွားခြင်း တို့သည် ထိုငါတို့၏ ဆက်နွယ်မှ ဆင်းသက်လာသည်။
ကာလက်သည်သူ့အမွေတွေရဖို့ မှန်ကန်ခြင်းနှင့် သစ္စာတရား၌တည်မြဲဖို့ ရုန်းကန်ရပေမည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အား သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်၌နေရာတစ်ခု ကတိပေးသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆုလာဒ်၌လက်ခံရရှိဖို့ အစဉ်မပြတ် ကြိုးစား၍ ထိုက်တန်သူဖြစ်ရေးသစ္စာရှိရမည့်အကြောင်း သတိနေရပါမည်။ သည့်အပြင် မာကု ၁၁း၁၂-၁၄ တွင်ယေရှုက ငါတို့အား စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတိပေးထားသည်မှာ သဘောင်္သဖန်းပင်၌ဖြစ်သော ဖြစ်ရပ်အကြောင်းငါတို့ဖတ်ရပါသည်။ “နက်ဖြန်နေ့၌ဗေသနိရွာမှပြန်ကြစဉ်တွင်ဆာမွတ်တော်မူ၏အရွက်နှင့် ပြည့်စုံသောသင်္ဘောသဖန်းပင်ကိုအဝေးကမြင်လျှင်၊ သင်္ဘောသဖန်းသီးဆွတ်သောအချိန် ကာလမရောက် သေးသောကြောင့်၊ ထိုအပင်၌အသီးကို တွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မည်ဟု ကြွသွား၍ရောက်သောအခါ၊ အရွက်ကို သာတွေ့တော်မူသည်ရှိသော်၊ ယခုမှစ၍ အစဉ်မပြတ်သင်၏အသီးကို အဘယ်သူမျှ မစားစေနှင့်ဟု မိန့်တော် မူ၏ တပည့်တော်တို့သည်လည်း ကြားကြ၏။” ရိုးသားစွာဆိုရရင် ယေရှုသည် သင်္ဘောသဖန်းပင်ကို ကျိန်ခြင်းမှာလက်စားချေလိုပုံရှိပေသည်။ အထူးသဖြင့်ဤကိစ္စကို ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသည်မှာ “ထိုအချိန်ခါ သည် သင်္ဘောသဖန်းသီးချိန်ကာလမဟုတ်ပေ။” မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ယေရှုသည်မိမိလူတို့ အစဉ်အမြဲ အသီးသီးသောသူဖြစ်ကြဖို့ လိုအပ်သည့်အကြောင်းကို ညွှန်ပြပေးနေခြင်းဖြစ်၏။ ၂ တိ ၄း၂ တွင်ငါတို့ဖတ်ရ သည်မှာ – “နှုတ်ကပတ်တော်တရားကို ဟောပြောလော့၊ အချိန်ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ ကြိုးစား အားထုတ်လော့။ အပြစ်ကို ဘော်ပြလော့၊ ဆုံးမခြင်းကိုပြုလော့။ အလွန်ရှည်သော စိတ်နှင့် သြ၀ါဒမျိုးကိုပေး၍ တိုက်တွန်းသွေးဆောင်လော့။”
ကာလက်သည်အလွန်ရဲရင့်သောအရာကိုပြော၏ကျွန်တော်လည်းပြောဆိုသည်မှာမျိုးဆက်အားလုံး ရှေ့မှောက်၌ အတူသွားသော ဖော်ပြချက်သည် ယနေ့ငါတို့နှင့်အတူ ပါရှိသောကြောင့် ရဲရင့်ကြပါ။
ကာလက်သည်သူ့ရဲ့ရွံ့လျားနေသော ကြွေးကြော်မူကို ယောရှုမှတ်စာ ၁၄ တွင်တောင်းဆိုမှုတစ်ခုနှင့် စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ် ဖြင့် နိဂုံးချုပ်လိုက်ရာ ယင်းသည် ၈၅ နှစ်အရွယ်လူအိုတစ်ယောက်ပြောသော စကားဖြစ် သော်လည်း ကျွန်ုပ်၏နှလုံးသား ကို တုန်ခါစေပါသည်။ ကာလက်ကသူ့ခရီးစဉ်မပြီးဆုံးသေးမှန်းသိခဲ့၏။ သူ့အသက်တာထဲ၌ ဘုရားသခင်ပြုသော အမူတော်များကို မြင်တွေ့ခြင်းအရာ၌ ဘုရားသခင်အတွက် စွန့်စား လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာများစွာရှိသေးကြောင်းသိမှတ်ခဲ့၏။ သူပိုင်ဆိုင်သည့်ပြည်တွင် (the Anakims) လူမျိုးလူ ကောင်ကြီးများရှိကြ၏။ ထိုသူတို့သည် ပြည်တော်တွင်ရှိနဆဲဖြစ်၏။ သူတို့သည် ကတိတော်ပြည်တွင်နေ ထိုင်ကြကာ၊ အနိုင်ယူခြင်းခံရပေမည်။
တဖန်တစ်ခြားအနေဖြင့် – ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေုခရီးစဉ်ထဲတွင် လူကောင်ကြီးများကို ရင်ဆိုင်နေရကောင်း ရင်ဆိုင်နေလမ့်မည်ဖြစ်ပြီး ယခုပင်လျှင် ကတိတော်များရှိပါ၏ ကျွန်ုပ်အသက်တာ၌၎င်းလူကောင်ကြီးများတွင် နေထိုင်ကျက်စားနေနိုင်ပေသည်၊ သို့သော်အကျိုးရလာဒ်အနေဖြင့် ငါတို့သည်၎င်းတို့ကိုအနိုင်ယူဖို့ဆိုရင် ကာလက်က “ဤကောင်ကိုအကျွန်ုပါအားပေးပါ” (ယောရှုမှတ်စာ ၁၄း၁၂) ဟူ၍မြတ်ဆိုသလို ကျွန်ုပ်တို့လည်း သှူုလိုဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပေသည်။
ဘုရားသခင်သည် ငါတို့အားယနေ့ဤသို့ပြောနေသည်ဟု အကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏။ ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့မှာ ကြီးမား သော စိန်ခေါ်မူများစွာရှိ၏။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကို ကျနော်ပြောပါတယ်၊ ငါတို့သိမ်းပိုိက်နိုင်ရမည် အဘယ့် ကြောင့်ဆိုသော် ငါတို့သည် ထာဝရဘုရားနှင့်လုပ်ဆောင်နေသောသူများဖြစ်ကြ၏။
စိတ်လှုပ်ရှားစရာမျှော်လင့်ချက်များကိုမြင်နိုင်ကာ၊ စိတ်နှလုံးနှိမ့်ချစွာဖြင့် သခင်ဘုရားထံ “ဤတောင်ကို အကျွန်ုပ်အား ပေးလော့” ဤစိန်ခေါ်မူများကို အကျွန်ုပ်အားပေးပါဟု ပြောဆိုနိုင်သော ခံစားချက်မျိုးယနေ့ သင်၌ရှိမည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံ ကြည်ပါတယ်။
ကျနော်ဤသင်ခန်းစာကို ပြင်ဆင်နေတုန်းဤကာလက်အကြောင်းလေ့လာသင်ယူမူတွင် ပါဝင်လာကြမည့်သူ အားလုံး အတွက် သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်ကာ ပရောဖက်ပြုသော စကားကို ကျနော်အားပေးခဲ့ပါသည်။
ဘုရားသခင်၏ဆန္နသည် သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်အားဖြင့် လန်းဆန်းလတ်ဆတ်သောအချိန်များကို သင့်အား ပေး၍ အထူးသဖြင့် ယေရှုခရစ်တော်၊ ခမည်းတော်နှင့် သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်နှင့် ဆက်နွယ်ရာ တွင် လန်းဆန်းမှုရှိ ရန်ဖြစ်သည်။ သူသည်ရှာဖွေမတွေ့ရှိသေးသောအရာများ၊ မတွေ့နိုင်သေးသော သူ့ရဲ့စရိုက်အကျင့်နှင့်ထူးခြားသော ပင်ကိုယ်အရည်အသွေးများကိုလေ့လာတွေ့ရှိဖို့ ဆန္ဒရှိပေသည်။
စကားတော်သည်မှန်ပေ၏။တဖန်ပြန်အသက်ရှင်ဖို့သာမကငါ့သားတော်၏အသွေးအားဖြင့်ရွေးဝယ်ထား သော ငါ့လူမျိုးတို့သည်“အသက်ထက်အသက်”နှင့် သင့်တို့အဖိုးရရှိထားသောထိုအသက်တာ၏ “ကြွယ်ဝစုံ လင်သောဖွင့်ပြချက်” ကို၎င်း၏အောင်မြင်ခြင်းများ၊ ကျေးဇူးတော်၊ ဆုကျေးဇူးများနှင့်ငါ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဖွင့်ပြခြင်းများနှင့်အတူ သိ ရှိမည်အကြောင်းတည်း။
လယ်ပြင်မှာ စပါးများမှည့်၍ရိတ်သိမ်းချိန်တန်ပြီဟူသော သစ္စာစကားသည် ကြေငြာထားခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍ ကာရာနီသို့ ခရစ်တော်လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် (ယင်းသည်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေခြင်းရှိဆဲ)နှင့် ဘုရားသခင်၏ ဆန္နမှာများစွာ ရိတ်သိမ်းရေးဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားအချိန်သည်ပြီးပြည့်စုံမှုရှိ၍ ကျမ်းစာပြောထားသည်ကား လေသည်မိမိသွားလိုရာ တိုက်တတ်၏။” သို့ဖြစ်ပါ၍ သန့်ရှင်းသောဝ်ညာဉ်သည် လေကဲ့သို့ တိုက်ခတ်တတ် ၏။
သူ့ဆန္နမှာ ပျောက်ဆုံးသောသူတို့ရှိရာကို လန်းဆန်းလတ်ဆတ်သော ဖွင့်ပြချက်များယူဆောင်ပေးဖို့ဖြစ်၏။ ထို့သို့ သင်၌ဆန္နရှိလျှင်သူ (ဘုရားသခင်) ယူဆောင်လာမည့် ဖွင့်ပြချက်ကိုသင်သည် သယ်ဆောင်ရလိမ့် မည်။ လေမတိုက် သောဂျူံလယ်ပြင်တွင် ဂျူံပင်များသည်ထောင်၍ တည်ငြိမ်၏ ထို့နောက်လေတိုက်သောအခါ လေရှိကြောင်း သိမှတ်ရတတ်၏ ၀ိညာဉ်တော်လေသည်လည်း အလားတူပင် ဖြစ်၏။
၀ိညာဉ်တော်လေတိုက်သည့်အတိုင်းသီးနှံများ ယိမ်းယိုင်၍ရွေ့လျားသည်ကို သင်မြင်ရလိမ့်မည်။ ထိရောက် သေရိတ်သိမ်းခြင်းကာလ ရောက်လုနေပြီးပြီးမြောက်ခြင်း ရှိလိမ့်မည်။
ရိတ်သိမ်းရာတွင် ထုတ်ကုန်အမျိုးစားများစွာရှိလိမ့်မည်၊ အချို့မှာ သန်မာ၏အချို့မှာ ပျက်စီး၏၊ အချို့မှာ အနာအဆာရှိ၏၊ သို့သောအားလုံးသည် အားနည်းမူရှိကြ၏။ ဤတွင်ဘုရားသခင်သည် အားနည်းသူများတွက် ကာကွယ်ပေးသူဖြစ်ပြီး သူသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် သူ့ကိုယ်ခန္စာကို အားဖြည့်စေကာ၊ သီးနှံ (ယုံကြည်သူသစ်)များကို ကျွေးမွေးပေးသည်။ သင့်ကိုယ်တိုင်ဤအရာကို စမ်းစစ်ကြည့်ပါ၊ အကယ်၍၎င်းသည် သင့်စိတ်ဝိညာဉ်ထဲသို့ တစ်စုံတစ်ရာစကားပြောခဲ့သော်၎င်းသည် စိမ့်ဝင်ပြီးအဆပေါင်း ၁၀၀ မကအသီး သီးပါစေ။
ကာလ၏အသက်တာနှင့် စရိုက်ကို စမ်းစစ်ခြင်းဖြင့် သင်ယူမည့်သင်ခန်းစာများ
ကာလက်၏အသက်တာနှင့်စရိုက်ကို စမ်းစစ်ခြင်းဖြင့် သင်ယူရန်သင်ခန်းစာများစွာရှိ၏ အစပြုဖို့ရန် ယခု တွင်၎င်းတို့ထဲ က ၄ ချက်ကို ကြည့်ရှုကြပါစို့။
“ပြောင်းလဲရမည်ချိန်” ဟူ၍ ဘုရားသခင်သော “အသစ်သောအစပြုခြင်း” အချိန်အဖြစ် ဤအချိန်လေး ကိုကျွန်ုပ်တို့ အား လုံးမြင်စေချင်ပါတယ်။
ယောရှုမှတ်စာ ၁၄း၆-၁၅ ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြပါစို့။….”သို့ရာတွင်မောရှေစေလွတ်သော နေ့၌ခွန်အားရှိ သကဲ့သို့ယနေ့၌ရှိပါ၏ထိုအခါထွက်ဝင်ခြင်းအမူစစ်တိုက်ခြင်းအမူကိုဆောင်ရွက်ခြင်းငှါ တတ်စွမ်းနိုင်သကဲ့သို့ ယခုလည်းတတ်စွမ်းနိုင်ပါ၏။ သို့ဖြစ်၍ထိုနေ့၌ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသော ဤတောင်ကို အကျွန်ုပ်အား ပေးပါ…..” (ယောရှုမှတ်စာ ၁၄း၁၁-၁၂)
ထာဝရဘုရားအတွက်ပြည်စုံသော စိတ်ပြင်းပြခြင်း နှလုံးသားနှင့် ပြင်ဆင်မှုတည်စေပါ
ကာလက်သည်စိတ်နှလုံးအကြွေင်းမဲဖြင့် ထာဝရဘုရားနောက်လိုက်သည့်အကြောင်းကို ကျမ်းစာထဲတွင်အခါ ၆ ကြိမ်ထက်မနည်း ကိုးကားဖော်ပြထားပါသည်။
သူ့အပေါင်းအဖော်တွေက လူကောင်ကြီးများ၊ ပြဿနာများ၊ ဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ထောင်ချောက်များ လို့မြင်တွေ့တဲ့အချိန်မှာ ကာလက်မှာမူ ထာဝရဘုရား၏ ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့အခွင့်ထူးလို့ မြင်တွေ့ခဲ့သည်။ ကာလက်သည် ဘုရားသခင်အားသံသယမရှိဘဲ လုံးဝယုံကြည်ကိုးစားခဲ့သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ဆီသို့ ရောက်လာသော စိန်ခေါ်မှုမှာ – ကျွန်ုပ်တို့သည် ထာဝရဘုရားအား သံသယမရှိဘဲ လုံးဝယုံကြည်ကိုးစားကြပါသလား။ သေချာအချိန်ယူ စဉ်းစားရန်လိုအပ်သောအကြောင်းများရှိသောကြောင့် ထိုအရာကို ဖြေဆိုဖို့မမြန်ဆန်မလောပါနဲ့။
ချစ်စိတ်ပြင်းပြမှုနှင့် စိတ်အားထက်သန်မှုဖြင့် သခင်ဘုရားကိုအပြည့်အ၀ကိုးစားဖို့နှင့် နောက်တော် လိုက်ဖို့ ရန်….
ဤအရာကို စွမ်းဆောင်ဖို့သန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် အစဉ်မြဲပြည့်ဝဖို့လိုအပ်ပေသည်။ အစောပိုင်းမှာ ငါတို့ရှေ့ တွင်သွားနှင့်ပြီးသော ယုံကြည်ခြင်းသူရဲကောင်းများအကြောင်း ကျနော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ — အာဗြံဟံ၊ ဣဇက်၊ ယာကုပ်၊ ဒါဝိဒ်စသည်…. ။ ကောင်းပါတယ်၊ ကျနော်ပြောပြပါရစေ။ ငါတို့သည်အာဗြဟံကဲ့သုိ့ ဖြစ်ဖို့ခေါ်ခြင်းမခံရပေ။ ဒါဝိဒ်ကဲ့သို့စောင်းတီးဖို့ခေါ်ခြင်းမခံရကြပေ (သို့) ရှင်ပေါလုကဲ့သို့ ၀ိညာဉ်ပိုင်ဆိုင်ရာ အမြင်နှင့် ဖွင့်ပြချက်များ ထပ်တူရရှိဖို့ ခေါ်ခြင်းမခံရကြပေ။ ထို့သို့မဟုတ်ပါ။ အာဗြံဟံ၊ ဒါဝိဒ်၊ တမန်တော်နှင့် ရှင်ပေါလုတို့နဲ့မတူသောကျွန်ုပ်တို့သည် ရှိနေကြ၏ ယနေ့သည်ငါတို့၏အချိန်ဖြစ်သဖြင့် ဤအချိန်တွင် ငါတို့၏ ကံကြမ္မာများပုံဖော်ခြင်းရှိနေ၏။
ကောင်းကင်အဖို့အလိုငှါမဟုတ်၊ ငါတို့အား ဘုရားသခင်အခွင့်ရေးပေးထားသော လူတွေဆီသို့အမူတော် ဆောင်ဖို့ ငါတို့၏ အမူတော်မြတ်လုပ်ငန်းအဖို့အလိုငှါဖြစ်၏ ဂိဒေါင်နှင့်ဟေရှာယကဲ့သို့ သူရဲ့ကောင်းကြီးများ ဖြစ်ရ မည့်အချိန်ရှိ ရမည်ဟု ယုံကြည်ပါ။
ဤမျိုးဆက်လူသားများ၌ – ယခုပင်လျှင်
ယခုပင် သင်နှလုံးသားထဲမှာပြောကောင်းပြောမယ် – မှောင်မိုက်ကပဲအမြဲအနိုင်ယူပုံရှိ ယခုပင် သင်နှလုံးသားထဲမှာ ပြောကောင်းပြောမယ် – လောကသည် တစ်စစီပဲ့နေသည်။ ယခုပင် သင်နှလုံးသားထဲမှာ ပြောကောင်းပြာမယ် – ငါသည်အရာများကို အဖြေရှာမရပါ။ ယခုပင် သင်နှလုံးသားထဲမှာ ပြောကောင်းပြာမယ် – ငါ့အတွင်းပိုင်းမှာ အမြဲတမ်းတိုက်ပွဲရှိ၏။ ယခုပင်သင်နှလုံးသားထဲမှာပြောကောင်းပြာမယ်-ငါ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိမုန်တိုင်းသည်ငါ့အားတုန်လှုပ်စေတယ်။ ယခုပင် သင်နှလုံးသားထဲမှာ ပြောကောင်းပြာမယ် – ငါတစ်ယောက်သာ နာကျင်ခံစားနေတယ်။ ယခုပင် သင်နှလုံးသားထဲမှာ ပြောကောင်းပြာမယ် – ငါခံစားမူအားလုံးက သံသယတွေနဲ့သာ။
ကောင်းပြီ၊ ဤသို့ယခုဖြစ်နေလျှင်၊ ကျနော်ပြောပြပါရစေ – သူသည် ထိန်းချုပ်သူဖြစ်၏။ ဤနောက်ထပ် ပြောဖို့လိုပါ သလား။ – သူသည်ထိန်းချုပ်သူဖြစ်၏။ သေချာတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မြူနှင်းထူသော နေရာတွင် နေထိုင်နေကြ တာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်၊ သူ့အားမြင်လို့မရသော အချိန်ရှိချင်ရှိမယ်၊ ဒါပေမဲ့ ၎င်းသည်သူ သည် ငါတို့နှင့်အတူရှိခြင်း နှင့် ထိန်းချုပ်သူဖြစ်ခြင်း အကြောင်းကို ပြောင်းလဲမသွားချေ။
ယနေ့သူသည်သင်နှင့် ကျွန်ုပ်ကိုပြောနေသည်မှာ – ချစ်စိတ်ပြင်းပြမှုနှင့် ထိန်းညှိထားသောနှလုံးသားတစ်ခုဖြင့် သူ့ရဲ့ ဘုန်းတော်ထင်ရှားပြသခြင်းကို မြင်ရခြင်းငှါ ဘုရားသခင်၏သားအပေါ်ကို မော့ကြည့်လော့ ဟူ၍ဖြစ်၏။ ခမည်းတော်၏ဘုန်းတော်ဆိုတာဘာလဲ။ ၎င်းသည်သားတော်ယေရှု၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်း၌ထင်ရှားပြသပြီးဖြစ် သည်။
“ထို့ကြောင့်ငါချစ်သောညီအစိကိုတို့၊ သင်တို့သည်ဘုရားသခင်၏ အမူတော်ကို ဆောင်ရွက်၍ အကျိုးကြီး သည်ကို သိမှတ်သဖြင့် တည်ကြည်သော စိတ်နှင့်ပြည့်စုံ၍မရွေ့မလျော့၊ မတိမ်မယိမ်းဘဲလျက် ဘုရားသခင်၏ အမူတော်ကို ကြိုးစားအားထုတ်ကြလော့။” (၁ကော ၁၅း၅၈) NIV
အဖဘုရားသခင်ယနေ့ကျွန်ုပ်ကိုယ် ကျွန်ုပ်သစ္စာရှိခြင်းသို့ ဆက်ကပ်အပ်နှံပါ၏။ ယနေ့ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်အား အသက်ပေးသနားတော်မူ၏။ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်အားရှိစေလို၍ အသုံးပြုစေလိုသော ဆုကျေးဇူးကိုအကျွန်ုပ် အားပေးသနားပြီ။ ကိုယ်တော့်ကို အစေခံဖို့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ကို ခေါ်တော်မူ၏ ထိုအရာအားလုံးကို ကိုယ်တော်ထံကျွန်ုပ်ပေးအပ်ပါ၏ အာမင် – A. W. Tozer.
ချစ်စိတ်ပြင်းပြခြင်းသည်တစ်မျိုးဖြစ်၍ ပြင်ဆင်ခြင်းသည် အခြားတစ်မျိုးဖြစ်သည်
အကယ်၍သင်သည် ကျွန်ုပ်လိုမျိုးဖြစ်လျှင်မောင်းနှင်ခံလူသားဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျနော်သည် ကိုယ့်ကို ကိုယ် သီးမခံသောသူဖြစ်ရာအသက်အရွယ်ရလာသည်နှင့်အမျှပို၍စိတ်မရှည်ဖြစ်လာပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်သူတစ်ပါး အတွက်ဖြစ်လာပါ တော့တယ်။ ဤထင်ရှားသောအမူအကျင်းအားလုံးသည် မကောင်းသလို၊ ဆွဲဆောင်မှု လည်းမရှိချေ။ ဒါပေမဲ့အနည်းဆုံး တော့ ငါ၎င်းတို့ကို သိမှတ်မိပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်အားပုံသွင်း၍ပြင်ဆင်ပေးနေဆဲဖြစ်ကြောင်းအကျွန်ုပ်ရှေ့မှာရှိသောလုပ်ငန်းများနှင့် အမှုတော်မြတ်နှစ် ကာလများအတွက်ဖြစ်၏။
ပုံဥပမာပေးပါရစေ။ အခြားသောတိုင်းနိုင်ငံတွေလိုဖြစ်ဖို့ ဣသရေလလူမျိုးများက ထာဝရဘုရားထံရှင်ဘုရင် တောင်းဆို ကြသော ကာလကိုပြန်ကြည့်ပါ။ ဓမ္မရာဇ၀င်ပထမ ၈း၅….”လူမျိုးအပေါင်းတို့၏ ထုံးစံရှိသည့်အတိုင်း အကျွန်ုပ်တို့ကို အုပ်စိုးရသော ရှင်ဘုရင်ကို ချီးမြှောက်ပါလော့ ဟုလျှောက်ကြလေ၏။” တစ်ခါတစ်ရံဘုရား သခင်သည် သူ့ကိုယ်စားထို သူတို့ကို အုပ်စိုးဖို့ ရှင်ဘုရင်ကို ဘယ်တော့မှ အလိုမရှိဟု ငါတို့ထင်တတ်ကြ၏။ မည်သို့ဆ်ိုစေ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃၅း၁၁ တွင် ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရသည်မှာ “တဖန်ဘုရားသခင်က ငါသည်အနန္တ တန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်ဖြစ်၏ တိုးပွားများပြားလော့။ လူတစ်မျိုးမက အမျိုးမျိုးတို့သည် သင်၌ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ ရှင်ဘုရင်တို့သည် သင်၏အမျိုးအနွယ်၌ ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ KLV ၎င်း(ရှင်ဘုရင်)သည် အမြဲတမ်းမျှော်လင့် ခြင်းရှိကြောင်း ငါတို့တွေ့မြင်ရသည်။
သို့သော်လည်း ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကို သိမှတ်စေချင်တာက ရှင်ဘုရင်ချီးမြှောက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ ဘုရား သခင်၏ခွဲခန့်ထားသော ပုဂ္ဂိုလ်က မည်သူဖြစ်၍လုပ်ဆောင်ရမည့် ပြင်ဆင်မှုတွင်က ဘာတွေလဲဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်လိုချင်သော ရှင်ဘုရင်များသည် ကောင်းကင်တန်ဖိုးအရ အုပ်ချုပ်ရမည်သူဖြစ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်ဘုန်းထင်ရှားဖို့ နှင့် အကျိုးမြတ်ရရှိရေးအတွက်မဟုတ်ပေ။ ရှင်ဘုရင်ချီးမြှောက်ဖို့ လိုအပ်သော်လည်း မဲပေးရွေးချယ်တာမျိုး မဟုတ် ပေ။ ရှောလုသည် ခန့်အပ်ခဲ့သော်လည်း ရည်ရွယ်ထားသူမဟုတ်ပေ။
ရှောလုရဲ့စရိုက်သည်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ခြင်း DNA ပြည့်မှီခြင်းမရှိနိုင်ခဲ့ပေ။ ဘာကြောင့်လဲ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် သူသည် သန့်စင်စေခြင်း မခံရလို့ဖြစ်၏။
၎င်းနှင့်ဆန့်ကျင်၍ဒါဝိဒ်ကို ငါတို့တွေ့ရသည်။ – တစ်ချက်သူသည်ဘုရားသခင်၏ စိတ်နှလုံးတော်ကို တိုတိ သောသူဖြစ်၏နှစ်ချက်။ ရှင်ဘုရင်ဆိုင်ရာအာဏာစက်၌ အသက်ရှင်ရေးပြင်ဆင်ဖို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းနှင့် သင်တန်းပေးခြင်းခံရသည်။ ကန္တရထဲ၌စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းများနှင့်သူ့ရဲ့ဘုရားသခင်၌ဆက်ကပ် အပ်နှံခြင်းများက သူသည်ဘုရားသခင်၏ စိတ်နှလုံးတော်ကို တိုတိသောသူဟူသောနေရာတစ်ခုသို့ ပို့ဆောင် ပေးပါသည်။ သူသည် ထိုပုံစံဖြင့် မွေးလာတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
၎င်း၏အစဉ်အမြဲလျှိုဝှက်ပြင်ဆင်ခြင်းနေရာသည် အဆုံးသတ်အောင်မြင်ခြင်းသော့ချက်ဖြစ်ပေသည်။ ခြင်္သေနှင့် ၀က်ဝံတို့သည် သိုးများကို တိုက်ခိုက်ကြသောအခါ ဒါဝိဒ်အားဖြင့် အသတ်ခံရကြတာ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး မှတ်သားကြမည်အကြောင်း ကျနော်သေချာသိပါတယ်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်အနေဖြင့်ဤအရာများ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ ချိန်တွင် ဘယ်သူကမျှ စောင့်ကြည့်နေတာ မျိုးမရှိပါဘူး။ ထိုအရာက ဘာကိုလုပ်ဆောင်ပါသလဲ။ ဂေါလျက်ကြီးကို သတ်ဖြတ်တဲ့အချိန်က ၎င်း(သူ့ရဲ့)ခြင်္သေနှင့်ဝက်ဝံများသတ်ခြင်းအတွေ့အကြုံက လူမျိုးနှစ်ခု ရှေ့မှောက်ကြားမှာ သွားရောက်ဖို့ အရည်အသွေး ပြည့်မှီစေပါသည်။
ယင်းသည်ဘုရင်တကာတို့၏ ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တော်မူသော ထာဝရယေရှုသခင်ကို “ဒါဝိဒ်၏သားတော်” ဟုသိမှတ်ရ အောင် သူ့ရဲ့သင်တန်းအောင်ခြင်းဖြင့် ရရှိသော အထူးရာထူးဖြစ်ပေသည်။
၂။ အပေါင်းဆန်သော စိတ်သဘောထားနှင့် ဘုရား၌ဆက်ကပ်ခြင်းတည်မြဲစေပါ။
သမိုင်းတစ်ခုသည်တစ်စုံတစ်ဦးက မိမိတို့ကိုကျရှုံး (သို့) သစ္စာဖောက်လို့ ခါးသီးမှုခံစားသောကြောင့် မိမိတို့၏ လမ်းများပျောက်ဆုံးသောသူများ၏ ဥပမာများနှင့်ထင်ကျန်တတ်၏ ကာလက်ကကျွန်ုပ်တို့အား “စာတန်ကို မိမိအထဲ၌ နေရာမပေးနှင့် စာတန်ရပ်တည်မည်နေရာမရှိစေနှင့်” လို့ ပြောပြမယ်လို့ကျနော်ယုံ ကြည်ပါတယ်။
ဧဖက် ၄း၂၇ တွင် ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရသည်မှာ…. “..မာရ်နတ်ကို အခွင့်မပေးကြနှင့်” ဂရိဘာသာစကား၏ မူရင်း အဓိပ္ပာယ် မှာ – နေရာ၊ ဒေသ၊ ထိုင်မည့်နေရာ၊ နှင့် အခွင့်အရေးဟူ၍ဖြစ်သည်။ မာရ်နတ်ကို ထိုအရာများမပေး နှင့်ဟုဆိုလိုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကိုဝါးမျိုဖို့ စိတ်ပျက်ခြင်းနှင့် ခါးသီးခြင်းများအခွင့်ပေးသောအခါ စာတန်သည် ကျွန်ုပ်တို့ အသက်တာ ထဲရပ်တည်ဖို့နေရာရသွားပါလိမ့်မည်။ “ခါးသီးစွာသောပင်မြစ် မပေါက်စေခြင်းငှါသတိပြုကြလော့။ ဆူးပင်မျိုး စေ့တစ်ခု (သို့) နှစ်ခုသည်ဥယျာဉ်တစ်ခုလုံးကို ချိန်တိုအတွင်း ပျက်စီးစေတတ်၏” (ဟေဗြဲ ၁၂း၁၅) သတင်း စကား
ယောရှုနှင့် ကာလက်သည် ခါးသီးခြင်း၊ ၀မ်းနည်းပူးဆွေးခြင်းခံစားသူများထားသော ဥယျာဉ်ကဲ့သို့သော နှလုံး သားရှိ သော်လည်း ပေါင်းပင်များနှင့် ပြည့်နှက်နေသော လူမျိုးတွေဖြင့် ၀န်းရံခြင်းခံရကြ၏။
ခေါင်းဆောင်များအပါအ၀င် လူများစွာတို့သည် ဘုရားသခင်ဘက်ဆီကို ဒေါသ/ စိတ်ဆိုးတာမျိုး ကြုံတွေ့ တတ်ပါ သည်။ ၎င်းသည်ခရစ်ယာန်မဟုတ်သော သူတွေကိုသာ ဘောင်ခတ်ထားသည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင်ကို နက်ရှိုင်းစွာ ချစ် ၍လေးစားကြည်ညိုသော ခရစ်ယာန်များလည်း စိတ်ဆိုးတတ်ပါသည်။ လူသားများဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ ကိုယ်ချစ်ရသောသူများအပါအ၀င်အခြားသော သူများအပေါ်အမြတ်ဒေါသထွက်တတ်သလို ဘုရားသခင်အပေါ်လည်း စိတ်ဆိုးတတ်ကြပါ၏။
သေခြင်းတရားများ၊ ဖျားနားခြင်းများ၊ မတော်တဆဖြစ်မှုများ (သို့) သဘာဝဘေးဒဏ်များကဲ့သို့သော အရာများသည်အမြတ်ဒေါသ/ စိတ်ဆိုးမှုတွေလှုံ့ဆော်ပေးတတ်ပါ၏ သို့သေ်ာငြားလည်း ၎င်းသည်စိတ်ထိ ခိုက်နာကြင်စေသော အခြေအနေသို့ ရိုးရိုးလေးဖြင့် ကန့်သတ်ထားခြင်းရှိသည်မဟုတ်၊ ၎င်းသည်လူတို့က ကိုယ်ပိုင်စိတ်ပျက်ခြင်းများနှင့် ကျရှုံးခြင်းများ တွေ့ကြုံလာသောအခါ ပေါ်လာတတ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပေါင်းပင်များကိုရှင်းလင်းစွာဖယ်ရှားဖို့အမြန်လိုအပ်ပါသည်။ သို့မဟုတ်လျှင် အသီးများသီး နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ရှည်လျားလှသော တန်ဆာပလာနှင့် နိုင်နှင်းခြင်း/ ရှင်းလင်းခြင်း အန္တရာယ်ကိုငါတို့ ရှောင်ရှားဖို့ လိုအပ်၏ ထိုသို့ပြုလျှင်၎င်း၏တသားတည်းရှိ (အပင်ကောင်း)သည်အရာများကို တဖြည်း ဖြည်းပို၍ ကျူးမိသဖြင့် အကျိုးရလဒ်မှာ ၎င်းအားအနိုင်ယူဖို့ ငါတို့၏ရည်မှန်းချက်များပို၍ လျော့နည်းလာစေ လိမ့်မည်။ သုတ္တံ ၆း၁-၁၁ ထဲတွင် ဖတ်ရှုရသည်မှာ “ခဏ အိပ်လျက်၊ ခဏငိုက်မှီးလျက်၊ အိပ်ပျော်အံ့သော ငှါလက်ချင်းပိုက်၍ နေစဉ်တွင် ဆင်းရဲခြင်း (မြေသြဇာမရှိသောဥယျာ်ဉ်) (ကျွန်ုပ်ထည့်သွင်းခြင်း) သည် ခရီးသွား သောသူကဲ့သို့၎င်း၊ ဥစ္စာဖြုန်းတီးခြင်းသည် သူရဲကဲ့သို့ ၎င်း ရောက်လာ လိမ့်မည်။
အချို့သောလူတွေ၏ ရှုမြင်ပုံမှာဘုရားသခင်သည် ဖြစ်ပျက်သမျှအလုံးစုံ၏ နောက်ဆုံးတာဝန်ရှိသူဖြစ်ဟု မြင်တတ်၏။ (သို့ဖြစ်ပါ၍ သူတို့သည် မှန်ကြပါ၏) ဘုရားသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်ကို ရက်စက်၍ဂရုမစိုက်ပေး သလို သူတို့မြင်ကြ သောအခါ စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ကြ၏။ ဘုရားသခင်သည် သူတို့ကိုစွန့်ပစ်၍ သစ္စာ ပျက်သည် (သို့) နှိပ်စက်သည်ဟု ထင်တတ်ကြသည်။ ဒါပေမဲ့ ထို့သို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ ဘုရားသခင်၏တန်ခိုး ရှင်ဖြစ်ခြင်းကို အနက်ဖွင့်ဆိုချက်မှားယွင်းကြ သောကြောင့်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ငါတို့သည်ဘာမျှ မထိုက် တန်ကြပေ။ သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်သည် ငါတို့အား ခရစ်တော်၌အရာခပ်သိမ်း ပေးသနား တော်မူပြီး တရားမှုထိုက်တန်သော ငါတုိ့နေရာတွင် ဂရုဏာကို ငါတို့အား ပေး သနားတော်မူ၏။
“ပေါင်းပင်များလည်းပန်းများဖြစ်၏သင်တစ်ချိန်သိရလိမ်မည်” ဟူ၍ပြောသူမှာ A.A. Milne
ငါတို့၏ပြဿနာများအကြားငါတို့ရှိနေချိန်တွင် ငါတို့၏နှလုံးသားများသည် ပေါင်းပင်များရှိသော ဥယျာဉ်လို မျိုးဖြစ်လာပါသည်။ ဒီလိုမျိုးချိန်မှာ – ပေါင်းပင်များလည်း ပန်းများဖြစ်ကြောင်း သတိရကြပါစို့ – ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အား ၎င်းတို့ကို မြင်စေချင်သလိုမျိုးဖြင့် ၎င်းတို့ကို ရိုးရိုးလေးမြင်ရပါမည်။
“ကိုယ်တော်ရဲ့ဥယျာဉ်ကု အကျွန်ုပ်အားပြလော့။ သို့ပြုလျှင်ကိုယ်တော်ဘယ်သူဖြစ်သည်ကိုအကျွန်ုပ် ပြောပြပါ မည်” ဟူသောစကားကို ပြောသောသူများ – Alfred Austin ဖြစ်ပါသည်။ အကျွန်ုပ်တို့အား ကျမ်းစာပြော ထားသည်မှာ “……စိတ်နှလုံးအပြည့်ရှိသည့်အတိုင်းနှုတ်မြတ်တတ်၏”(မဿဲ၁၂း၃၄)
ကာလက်သည်သူ့အသက် ၈၅ နှစ်အရွယ်ထိ အပေါင်းဆန်သော စိတ်သဘောထားရှိ၍ သခင်ဘုရား၌ ဆည်း ကပ်၏။
၃။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အမွေအပေါ် ကြွေးကြော်ခြင်း တည်မြဲစေပါ။
ဟေဗြဲ၁၀း၂၃တွင်သတင်းစကားက်ိုဤသို့ငါတို့ဖတ်ရသည်။“မြှော်လင့်သောအကြောင်းကို ၀န်ခံ၍မယိမ်းမရွေ့ လျော့ဘဲတည်ကြည်ကြကုန်အံ့၊အကြောင်းမူကား ဂတိထားတော်မူသောသူသည် သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံ တော်မူ၏။” ငါတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းသူရဲကောင်းကြီး ကာလက်သည် မောရှေကသူအား နယ်မြေအမွေ တစ်ခု ကတိပေးထား ကြောင့် သတိရစေ ဖို့ ဘယ်တစ်စုံတစ်ဦးကိုမျှစောင့်ဆိုင်း မနေခဲ့ပေ။ အလားတူပင် ကျွန်ုပ်သည် ခရစ်တော် ယေရှုထဲ၌ ကြီးမြတ်သော အမွေတစ်ခုရှိကြပါ၏။ကာလက်သည် မိမိ၏အမွေကို ကြွေးကြော်ဖို့ သိမှတ်ထား ကြောင်း အောက်မေ့ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ မှတ်သားမိကြသော်လည်း၊ သူ့အားပေးထားသော ကတိကို ပိုင်ဆိုင်ရ ဖို့ သူသည်နယ်မြေကို ရှင်းလင်းဖို့နှင့် သိမ်းပိုက် ရဖို့အလုပ်ကြိုးစားရပါ၏။
ကာလက်သည်အမွေတစ်ခုကတိပေးခံရသောအခါ သူ့စိတ်ဓာတ်က ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ။ ၎င်းသည်ငါ့အဖို့ (ငါသည်လက်ခံရရှိပြီး) ဖြစ်သည် ဟူသော စိတ်ရှိ၏။ သူဘ၀သည်တိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့ ရှင်သန်ခဲ့ရ၏။ သူ့အတွက်တော့ ၎င်းသည်သူ့ရဲ့ မျက်မှောက်ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။ အမွေတော်သည်သူအတွေးရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှ ရှိ၏။ သူ့ယုံကြည်ခြင်းခရီးစဉ်၏ ဦးတည်ချက် နှင့် ရွေ့လျားမှုသည် ၎င်းထဲ၌ ရှင်သန်နေသည်။ (၎င်းဘက်ဆီသို့ ရှင်သန်နေခြင်းမဟုတ်)
၎င်းနှင့်ပတ်သက်၍ခဏအချိန်ယူစဉ်းစားကြည့်ပါ – “အမွေဆိုတာ ဘာများလဲ” ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ ထံချန်ထား သော တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်၏၎င်းသည် ခက်ခဲစွာရရှိသည်အရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်၊ တိုက်ခိုက်ပြီရတာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ ဒါမှမဟုတ်တစ်ခြားသူများသည် အမွေထောက်ပံ့ပေးချင်လို့ ဆင်းရဲဒုက္ခခံရတာလည်း ရှိကောင်းဖြစ်နိုင်ပေသည်။ – သို့ သော်၎င်း(အမွေ)သည် ကျွန်ုပ်တို့ထံချန်ထားခြင်း ရှိသည်။ ထို့သို့ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကို လုပ်ဆောင်၍ ရတာဖြစ်ပါသလား။ မဟုတ်ရပေ။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်နှင့် ငါတို့မျိုးဆက်သည် အရင်သွားနှင့်ပြီးသော သူများ၏မျက်နှာကြက်များ (လုပ်ဆောင်ပြီးသား) အပေါ် လျှောက်လှမ်းနေကြ၏။ အခြားထပ်ဆောက်ဖို့ မလိုအပ်ပေ။ ယင်းသည် ငါတို့ အတွက်ယနေ့ ခြားနားချက်ဖြစ်သည်။
၁၆ စက်တင်ဘာ ၁၉၂၆ – ၂ ဧပြီ ၂၀၁၅ (၈၈ နှစ်) – အလင်းကျောက်ဖြင့် ဆောက်လုပ်သော ဘုရားရှိခိုးကျောင်း နှင့် အစွမ်းရှိသောအချိန်ကာလ
Dr. Robert Schuller ကကာလက်သည်“ဖြစ်နိုင်ခြေစဉ်းစားသူ”ဟုအမည်ပေးခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ သူသည်မိမိ ကိုယ်ကို အနာဂတ်ထဲလျှောက်လှမ်းနေသူဖြစ်မှန်တွေ့မြင်ကာ၊ သူတစ်ဦးတည်းမဟုတ်၊ သူ့ဘုရား သခင်၏ အားကြီးသော လက်ရုံးတော်ပေါ်မှီထားသူဖြစ်၏။
တစ်ခါတစ်လေကျွန်ုပ်တို့၏ ခရစ်ယာန်အသက်တာအစောပိုင်းကအောင်နိုင်ခဲ့သော ၀ိညာဉ်တိုက်ပွဲများ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ၀ထဲတွင်ကျရှုံးတတ်ပြကြသိကြပါ၏။ ဘာကြောင့်လဲ–အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အပြီးပိုင်မသိမ်း ပိုက်လိုက်ခြင်းနှင့် ၎င်းအားတဖန်ပြန်အနိုင်တိုက်ဖို့ မလုပ်ဆောင်မိတတ်ကြသောကြောင့်ဖြစ်၏။ မြေပြင်ကို အပြီးပိုင်မသိမ်းပိုက်မချင်းတိုက်ပွဲဟာ ရှိနေဆဲဖြစ်၏။ ထို့နောက်၎င်းကိုသတိရှိရှိ ဆက်လက်ကာကွယ် စောင့် ရှောက်ရပါမည်။
ကမ္ဘာ ၂း၁၅ တွင် ထာဝရဘုရားက အာဒံကိုဘာပြောခဲ့ပါသနည်း။ – “ထိုအခါထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည် လူကိုယူ၍ ဧဒင်ဥယျာဉ်ကို ပြုစုစောင့်နေစေခြင်းငှါထားတော်မှု၏။” NIV – ပြုစုစောင့်ရှောက်သည် ဟူသော စကားလုံးသည်ကြိယာတစ်ခုဖြစ် – ၎င်းသည် လုပ်ဆောင်ခြင်း (သို့)လှုပ်ရှားမှု ပြသော စကားလုံးဖြစ်သည်။ မူရင်ဟေဗြဲစကားလုံးရဲ့ အဓိပ္ပာယ်မှာ – ထိန်းသိမ်းသည် စောင့်ကြည့်သည် စောင့်ထိန်းသည်ဟူ၍ ဖြစ်၏။ ထိုအကြောင်းက ကနဦးနေ့ရက်ကာလတွေ မှာတောင် ချောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်မည် အန္တရာယ်ရှိကြောင်း ညွှန်ပြနေသည်။
အာဒံနှင့် ဧ၀သည် အပြစ်ကင်းစင်သူတွေဖြစ် (ဖြောင့်မတ်သူတော့ မဟုတ်)သဖြင့် ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်ရန် ရွေးချယ်မူတစ်ခုပြုလုပ်ရန် စမ်းသပ်ခြင်း ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ကြပေ၏။ ထာဝရဘုရားသခင်ကို နာခံ၍ အပြစ်ကင်း စင်ခြင်းမှ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ ပြောင်းရွေ့ကာဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့် ထာဝရအသက်ရှင်မှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် နာမခံ ဘဲ အပြစ်ကင်းစင်သော ဘ၀မှမဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ ကူပြောင်းကာ သေရမှာလား။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးသိပြီး ဖြစ်ပါ၏။ သို့သော် သူတို့နေထိုင်ရာဥယျာဉ်ကို စောင့်ထိန်းဖို့ သတိပေးခံရကြ၏။
အလားတူပင်၊ ငါတို့၏အမွေအပေါ်ကြွေးကြော်မူတည်မြဲစေနိုင်ရန်ငါတို့၏နှလုံးသားဥယျာဉ်တော်ကြီးကို ထိန်း သိမ်းကာကွယ်၍ စောင့်ရှောက်ရပါမည်။
ရန်သူများ၏အကြီးမားဆုံးဆန္ဒမှာ ငါတို့၏အမွေဆုံးရှုံးစေဖို့ဖြစ်သောကြောင့် အမှားလုံးဝမခံစေနှင့် – “သူခိုးသည် ခိုးခြင်း၊ သတ်ခြင်း၊ ဖျက်စီးခြင်းငှါလာတတ်၏။ ငါမူကား သိုးတို့သည် အသက်လွတ်ရုံမျှမက အထူးသဖြင့်အသက်ဖြင့်ပြည်စုံစေခြင်းငှါလာသတည်း” (ယောဟန် ၁၀း၁၀)။ ငါတို့သည် သူ့(ရန်သူ) အား အခွင့်ပေးမည်လော့။ အဘယ်နည်းနဲ့မှမပေးဟူသောငါတို့နှလုံးထဲကပြန်လည်တုန့်ပြန်သောေ ကြွးကြော်ခြင်း ရှိကြောင်းကျနော်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကာလရှည်အမွေများနှင့် ကာလတိုအမွေများ ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိ၏။ ဤနှစ်မျိုးစလုံး၌ ဘုံပိုင်းခြေတစ်ခုရှိ၏ ၎င်းမှာ ဆာလောင်မှု ပိုင်းဖြစ်ပါသည်။
ဆာလောင်မှုသည်တန်ခိုးစုဘဏ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အမွေပိုင်ဆိုင်ခြင်း၏ စွမ်းဆောင်မှုနောက်ကွယ်က မောင်းနှင်ပေး သောအင်အားလည်းဖြစ်၏။
ဆယ့်နှစ်နှစ်သွေးသွန်ဝေဒနာခံသော အမျိုးသမီးသည် ယေရှုအနားကပ်နိုင်ဖို့ လူအုပ်ကြီးကြား တိုး သဖြင့် ကိုယ်တော်၏ ၀တ်ရုံတော်အစွန်းကို ထိရာ၊ ကျန်းမာခြင်းရ၏။ – သို့ဖြစ်၍ ယေရှုချီးမွမ်းသော စကား လုကာ ၈း၄၃-၄၈၊ မဿဲ ၉း၂၀-၂၂၊ မာကု ၅း၂၄-၃၄။
မိမိသမီးကျန်းမာစေခြင်းငှါ ခါနန်အမျိုးသမီးသည် ယေရှုအား အသနားခံလေ၏။ သူမသည် တိုင်းတပါး သူဖြစ်၍ ဂျူးလူမျိုးမဟုတ်သော်လည်း သူမ၏ယုံကြည်ခြင်းအတွက် ယေရှုရဲ့အထင်ကြီး ခြင်းကြောင့် တောင်းဆိုချက်ရရှိ ခဲ့ပါသည်။ (မဿဲ ၁၅း၂၁-၂၈၊ မာကု ၇း၂၄-၃၀)
ဆိုးသွမ်းသောအမျိုးသမီးသည် ဖာရိရှဲများပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ခြင်း ခံရသော်လည်း ဖာရိရှဲအိမ်၌ ယေရှုအား
ကျေးဇူးတရားသိခြင်းနှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပြည့်နှင့် ဆီနှင့် လိမ်းပေးရာ ယေရှုထံမှအပြစ်လွှတ်ခြင်းနှင့် ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ (လုကာ ၇း၃၆-၅၀)
ဗေဒနိရွာက မာရိသည်ချစ်မေတ္တာ၏ လှုံဆော်မှုဖြင့်၊ တပည့်တော်များ၏ ဆုံးမအော်ငုတ်ခြင်းရှိသော် လည်း အလွန်အဖိုးကြီးသောရေမွှေးဖြင့်ယေရှုအားဘိက်သိက်ပေးလေ၏။ ယေရှုကလည်းသူမ အကြောင်းကို ဧ၀ံဂေလိဟောကြားရာနေရာတိုင်းတွင် ပြောကြားခြင်းရှိရေးကတိပေးခဲ့လေ၏။
(ယော ၁၂း၁-၈၊ မဿဲ ၂၆း၆-၂၃၊ မာကု ၁၄း၃-၉)
မတရားသောတရားသူကြီးအား သူမ၏တရားခြင်းအမှုမရမချင်းမရပ်မနား နှောင့်ယှက်နေသည့် ဇွဲမလျှော့သော မုဆိုးမအကြောင်းကို ယေရှုကပုံဥပမာထဲတွင် အထင်ကရထည့်သွင်း ပြောဆိုထား သည်။ (လုကာ ၁၈း၁-၅)
ဤဥပမာအားလုံးတို့သည်အချိန်တို အကျိုးခံစားသာဖြစ်၍ သူတို့နှင့်အတူ ဇတ်မြှပ်ကုန်ကြပါ၏ သို့သော် လည်း ကာလရှည် ၀ိညာဉ်ရေးအမွေသည်ထာဝရတည်၏။ ဘာကြောင့်၎င်းတို့ကြားခြားနားရတာလဲ။ ကောင်းပြီ – ဒါကလွယ်လွယ်လေးပါ။ – ပြင်ဆင်ခြင်းများဖြစ်သော ငါတို့ဖြတ်သန်းလာသမျှသော အကျင့် စရိက်များသည် အပြင်းအထန်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းကို ကျော်လွှား၍ အထဲ၌ ထာဝရကောင်းကြီးမင်္ဂလာများ ထည့်ထားလို့ ရအောင် သင့်လျော်သည့်ဘူးခွံဖြစ်နိုင်ရေး ငါတို့အား အတွေ့အကြုံခံစားစေသည်။
အစောပိုင်းက ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သောရှောလုသည်သူ့အား ဘုရားသခင်ပေးထားသော ပိ်ုင်ဆိုင်မှု (ဘုရင်ရာထူး၊ ဘိက်သိက်ခြင်း) ရရှိသော်လည်း၊ သူ့ရဲ့အကျင့်စရိုက်က နေရာချပေးထားသောအရာကို အထဲထည့်နိုင်ရေး ဘူးခွံမဖြစ်စေနိုင်ခဲ့ပေ။
အကျွန်ုပ်တို့လက်ခံရရှိသော အကြီးမားဆုံးအမွေနှင့် အခြားသောအရာအားလုံးကို လွမ်းမိုးသောအရာမှာ – ၁ ပေ ၁း၈-၉ “……ထိုသခင်ကိုသင်တို့သည် မမြင်ဘူးသော်လည်း ဘုန်းအသရေနှင့် စပ်ဆိုင်သော် ပြော၍မမှိနိုင် သော ရွှင်လန်းခြင်းစိတ်နှင့် ၀မ်းမြှောက်ကြသည်ဖြစ်၍ စိတ်ဝိညာဉ်ကို ကယ်တင်ခြင်းတည်းဟူသော ယုံကြည် ခြင်း၏အကျိုးကို ခံရကြ၏။”
၄။ ကာကွယ်ခုခံခြင်း မဟုတ်ပဲ တိုက်ခိုက်ခြင်း၌ ရပ်တည်ပါ
Okay! ယခုတွင်မူကာလက်သည် ၈၅ နှစ်ရှိပါပြီ၊ ဤအကြောင်းဖတ်တဲ့သူတွေထဲမှာ ထိုအသက်အရွယ်ရှိသူ (သို့) ထိုထက်ပိုကြီးသူ တစ်စုံတစ်ယောက်ရှိပါသလား။
ကာလက်သည်အိုမင်းလာပြီဖြစ်သောကြောင့် အခြားသူတွေကတော့ သူသည်သူ့နယ်မြေသေးလေးနဲ့ပဲ တင်း တိမ်ရောင်ရဲ၍ အေးဆေးအနားယူသင့်ပါသည်ဟုထင်မိနေခဲ့ပေသည်။ ဖော်ပြပါအကြောင်းကိုကျနော် တစ်ကြိမ်ဖတ်မိခဲ့ပါ၏ – သူတို့အနားယူချိန်အများစုချိန်တွင်၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများသည် သေခြင်းတံခါးဝမှာရှိ မနေကြပေ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီတံခါးဝက အခြားအဆောက်အအုံများတွင် မကြာမှီရှိတတ်၏။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ သူသည်ယောရှုထံသို့ “`ဤတောင်ကို အကျွန်ုပ်အားပေးလော့” ဟုတောင်းဆို၏။
“ယခုတွင်ပင် ကိုယ်ပိုင်တောင်များကိုရင်ဆိုင်နေရ၍ ၎င်းကအနာဂတ်ကို ကြောက်ရွံ့စေခြင်း ခံစားရသော လူများများရှိနိူုင်ပါသည်။ ထိုတောင်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ (ကျော်လွန်၍ ရပ်နေရခြင်းမှာ သူတို့၏စိတ်ပြင်းပြ ခင်းများ၊ အိပ်မက်များနှင့် မျှော်လင့်ချက်များပြည့်စုံခြင်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါရစေ “ငါတို့၏ အမွေအဖြစ်ပိုင်ဆိုင်ရဖို့ ငါတို့အားဘုရားလိုချင်သော တောင်ရှိပါသလား။
တောင်ကြီးသည်လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားထဲတွင်ဘုရားသခင်ပေးထားသော ၀န်ထုပ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။
ဘုရားသခင်သည် ငါတို့၏အမွေ(သို့)တောင်ကြီးကိုငါတို့အားဖော်ပြပေးသောအခါ၊ ၎င်းအချိန်သည် တောင်ကြီး၏ အရွယ်အစား (သို့) လမ်းခရီးရှိ အဟန့်အတားများ (သို့) လူတောင်ကြီးများကို ကြည့်နေ ရမည့်အချိန်မဟုတ်ချေ။ သည့်အစားငါတို့ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးနှင့်အစွမ်းကိုကြည့်ရမည့်အချိန်သာ ဖြစ်သည်။
ခါနန်ပြည်ကိုစူးစမ်းလေ့လာ၍ ပြန်လာကြသော သူလျှို ၁၂ ဦးအနက် ၁၀ ဦးက ကြေငြာကြသည်မှာ – “သို့ရာတွင် ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည် အားကြီးပါ၏ ထိုမျှမကအာနက အမျိုးသားတို့ကိုလည်း မြင်ရပါ၏။ …..သူတို့ရှေ့မှာ ငါတို့သည် ကိုယ်အထင်အတိုင်းနှံကောင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏” (တော ၁၃း၂၈၊ ၃၃)။ သတင်းပေးပို့ချက်သည် ကင်ဆာရောဂါသဖွယ် ကြောက်ရွံ့ခြင်း ဖြစ်စေပြီး၊ လူစုများ၏ စိတ်ကူးယဉ်မူကို ဖမ်းစားစေခဲ့ပါသည်။ ၎င်း(သတင်းကြောင့် ကြောက်ရွံ့ခြင်း) သည်းအသားပိုသဖွယ်ကြီးထွားလာကာ နောက် နေ့ထိ ထို့သို့ဖြစ်ဆဲပင်။
နှံကောင်/ ကျိုင်းကောင်ပုံကို တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြရအောင်။
အကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကို မေးပါရစေ – ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ကာလက်လား နှံကောင်လား
သင်နှင့်ကျွန်ုပ်သည် သခင်ဘုရား၏တပည့်တော်ဖြစ်၏ – ထိုအရာသည်အချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထာဝရဘုရား သည် သန်မာပြီး ရဲရင်ဖို့သင်တန်းတက်ထားကာ “ငါတို့သေချာလုပ်နိုင်ပါတယ်’’ ဟူ၍ကြေငြာတတ်သည် စစ်သူရဲတပည့်များကို ရှာဖွေနေပါသည်။ တဖန်ထိုအရာသည် အချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဖြစ်ပျက်ပုံများနောက်သို့လိုက်သော တပည့်တော်များသည် “နှံကောင်စိတ်ဓာတ်ရှိသူ” ဖြစ်ကြကြောင်း ငါတို့အား သတိပေးနေပါတယ်။ ထိုသို့ မှတ်ယူနိုင်ပေသည်။ ယနေ့ခရစ်ယာန်များသည် ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့် သံသယများဖြင့် ၀န်းရံတတ်ပါ၏ ဘုရားသခင်၏အစေခံများအနေဖြင့် ပျောက်ဆုံးသောသူများထံ ဧ၀ံဂေလိ တရားဟောပြောသောအခါ (သို့) ငါတို့အား လုပ်ဆောင်ရန်ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသောအရာများ နာခံဖို့ ကြိုးစားသောအခါ၊ ငါတို့တတွေသည်သတိမထားဖြစ်လျှင်၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်“နှံကောင်စိတ်ဓာတ်”ပမာအသက် ရှင်တတ်ကြ၏။
တပည့်တော်များသည် တစ်စုံတစ်ခုလုပ်ဆောင်ရန် ကျရှုံးခဲ့လို့ ယေရှုက ဆုံးမခဲ့တာ အနည်းဆုံး သုံးကြိမ်ထိ အကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရပါသည်။ သူတို့သည် အောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်မည့်အကြောင်း ကိုယ်တော်သည် မျှော် လင့်၍ တန်ခိုးအာဏာလည်းပေးခဲ့၏။
၁။ မဿဲ ၁၇ တွင် တပည့်တော်တို့သည် ၀က်ရှုးအနာစွဲခြင်း ဝေဒနာခံစားရာမှ မကျန်းမာစေကြသောကြောင့် ထိုသူတို့ကို ယေရှုက “ယုံကြည်ခြင်းမရှိ၊ ဖောက်ပြန်သောအမျိုး” ဟု ခေါ်ခဲ့သည်။
၂။ မဿဲ ၈ တွင် လှေထဲ၌ရှိနေကြသော တပည့်တော်များက ရေနစ်နေခြင်းမှ သူတို့အားကယ်တင်ရန် ကိုယ်တော်အား အော်ခေါ်ကြသောအခါ ကိုယ်တော်က “ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းသောသူတို့၊ အဘယ့်ကြောင့် ကြောက်တတ်သနည်း” ဟုပြစ်တင်လေသည်။ တပည့်တော်တို့သည် လေနှင့်လှိုင်းလုံးများကို ဆုံးမအမိန့် ပေးဖို့ ယေရှုမျှော်လင့်ခဲ့သည်။
၃။ မဿဲ ၁၄ တွင် ပေတရုသည် လှေပေါ်ကဆင်းပြီးမကြာမှီမှာပဲ ရေထဲနစ်သွားသောအခါ ယေရှုက “ယုံကြည် ခြင်းအားနည်းသောသူ၊ အဘယ်ကြောင့် ယုံမှားသောစိတ်ဝင်သနည်း” ဟုဆိုကာပြစ်တင်ခဲ့သည်။ ပေတရုသည် သူ့ထံသို့ ရေမနစ်ဘဲ လှမ်းလာဖို့ယေရှုလိုချင်၏။
ကျနော်ဝေဖန်နေတာ မဟုတ်ဘူး၊ လုံးဝမဟုတ်ပါ၊ အလားတူသောအခြေအနေမျိုးများ ကျနော်ဆီရောက်လာ လျှင် ကျနော်ဘာလုပ်မိမယ်ဆိုတာ မသိပါဘူး။ မည့်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဤဖြစ်ရပ်များထဲရှိကြသော တပည့်တော် များက သူတို့သည် သူလျှို ၁၀ ဦးကဲ့သို့ “နှံကောင်စိတ်ဓာတ်” ရှိကြကြောင်း ငါတို့အား သတိပေးနေသည်။
လုံးလုံးလျားလျားဆန့်ကျင်ဘက်ဖြင့် တမန်တော်ဝတ္တုထဲရှိ ဧ၀ဂေလိပြောကြာဖို့စေလွှတ်ခံသော တပည့်တော် များသည်ယေရှုခရစ်တော်အတွက်ကမ္ဘာကြီးကိုမှောက်လှန်ပစ်ကြ၏။
ခြားနားချက်က ဘာလဲ။ြ့ပီးတော့ သူလျှို ၁၀ ဦးနှင့် ကာလက်အကြောင်းက ခြားနားချက်ကဘာလဲ။ သူတို့သည် ခြားနားသော စိတ်ဓာတ်ရှိကြ၏။
ကာလက်အကြောင်းတွင်သူသည်ယေဟောဝါဘုရားကို ဗဟိုပြုသောစိတ်သဘောထားရှိ၏။ တမန်တော်ဝတ္တု ထဲရှိ တပည့်တော်များသည် သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်၌ ဗတ္တိဇံခံကြ၏။ ပင်တေကုတ္တေနေ့အပြီးတွင်ခြား နားမှုက နေ့ချင်းညချင်းဖြစ်ပေါ်လာ၏။ သူတို့သည် ရဲရင့်လာတယ်၊ တန်ခိုးကြီးမားလာတယ်၊ ယေရှုခရစ် တော်နာမကိုဟောပြောရာတွင် အသီးအပွင့်များစွာ တွေ့လာကြသည်။ တစ်ချိန်ပြီး တစ်ချိန်သူတို့သည် ဖျားနား သူများကို အမှုတော်ဆောင်ခြင်းနှင့် ပျောက်ဆုံးသူများအား ခရစ်တော်ထံ ခေါ်ဆောင်လာခြင်းအမှုတို့တွင် ပိုပို ပြီးသတ္တိရှိလာတာ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပါသည်။
ပင်တေကုတ္တေနေ့သည် သူုတို့ဘ၀ကို ကြောက်ရွံ့၍စိုးရိမ်တတ်ခြင်းမှ သတ္တိရှိ၍တန်ခိုးကြီးသော ယေရှုခရစ် တော်၏ သက်သေများအဖြစ်ကူးပေးခဲ့သည်။ ထို့နေ့၌ပင်ပေတရုသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်း ကင်းစွာတောင်ချီ သောလူအုပ်ရှေ့တွင် မတ်တပ်ရပ်ပြီး တရားဟောရာ ထိုသူတို့ကိုယေရှုခရစ်တော်ထံတော်ပါးသို့ ဦးဆောင် ပေးခဲ့သည်။
ထိုမျှမကနိမိတ်လက္ခဏာများ၊ အထူးသဖြင့်ဖျားနာသူများ ကျန်းမာစေခြင်းနှင့် နတ်ဆိုးနှင်ထုတ်ခြင်းတို့သည် ဧ၀ံဂေလိဝေငှခြင်းကြောင့် နားထောင်သူများထံသို့ ဧ၀ံဂေလိ၏သစ္စာတရားသက်သေများအဖြစ် တမန်တော် ၀တ္တု ထဲတွင်မထူးဆန်းတော့သော သာမညအရာဖြစ်လာပါတော့သည်။ (ယော ၁၄း၁၁-၁၂)
ဒီနေ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါရစေ – နှလုံးသားထဲက ဖြေပေးပါ။
ငါတို့သည်ဘယ်ချိန်က လူနာတွက်နောက်ဆုံးဆုတောင်းပေးခဲ့ပြီ၊ ဘုရားသခင်ကျန်းမာစေကာဘယ်ချိန် နောက်ဆုံးမြင်တွေ့ခဲ့ပါသလဲ။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တန်ခိုးထဲတွင်ငါတို့နောက်ဆုံးရှိတဲ့အချိန်ကဘယ်တုန်းကလဲ – နတ်ဆိုး နှင်ထုတ် ခြင်း။
ယနေ့ဘုရားသခင်သည် ကာလက်လို “ခြားနားသောစိတ်ဓာတ်” ရှိတဲ့တပည့်တော်များကို ကြောက်တတ်ပြီး၊ တုံ့ဆိုင်းနေသောသူများထဲမှ သခင်ဘုရား၏အမိန့်တော်မြတ်ကို နာခံဖို့ချီးမြှောက်နေပါတယ်။ သူတို့ တတွေ က“၎င်းကိုသူတို့သေချာစွမ်းဆောင်နိုင်ပါသည်’’ ဟုကြေငြာကြ၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရား သခင်သည် ၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ဖို့မိန့်တော်မူပြီးအလုပ်ကို ပြီးဖြစ်စေရေးတန်ခိုးနှင့်အာဏာကို ပေးအပ်ခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်၏။
ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်း ဟောပြောဖို့ ဧ၀ံဂေလိကိုဆန့်ကျင်သောနေရာဒေသ၊ တိုင်းနိုင်ငံများ ထဲသို့သတ္တိနှင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိရဲရင့်စွာ ရှေ့သို့ခြေလှမ်းသွားကြရာမှာ မူဆလင်၊ ဟိန္ဒူနှင့် ရုပ်တုကိုး ကွယ်သူ များဟူ၍ ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြပေ။ ပေတရုကလည်း “ငါ၌ရွှေငွေမရှိ၊ ရှိသည့်အရာကို သင့်အားပေးမည်။ နာဇရက် မြို့သား ယေရှုခရစ်၏ နာမတော်အားဖြင့်ထ၍ လှမ်းသွားလော့” ဟုဆို၏ (တမန် ၃း၆)။ ပေတရုမှာ ခြေမစွမ်း သောသူတောင်းစားအားငွေပေးစရာမရှိခဲ့ပေ။ သို့သေ်ာသူ့မှာဘာရှိခဲ့သလဲ။ သူ့မှာခြေမ စွမ်းသော တောင်းစား သူကိုထစေ၍ လှမ်းသွားခွင့်အမိန့်ပေးနိူ်င်သောအခွင့် ရှိပါ၏။ သူသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ထံမှ ရရှိသော တန်ခိုးအာဏာရှိ၏။ လုကာ ၉း၁ တွင် ယေရှုကတပည့်တော် ၁၂ ပါးကို အတူတကွခေါ်တော်အခါ ထိုသူတို့အား နတ်ဆိုးများနှင်ထုတ်ခွင့်၊ ရောဂါများကျန်းမာစေသောအခွင့် တန်ခိုးအာဏာများပေးအပ်ခဲ့ကာ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်အကြောင်း ဟောပြောဖို့နှင့် ဖျားနာသူများအနာငြိမ်းစေဖို့ စေလွှတ်ခဲ့သည်။
တစ်စုံတစ်ဦးသည်အာဏာပေးအပ်ခြင်းခံရမှသာ သူ/သူမသည်တစ်ခြားသူတို့အား အမိန့်ပေးခွင့်ရှိပါသည်။ တပည့်တော်များသည် ဧ၀ံဂေလိတရားအတွက် အလိုငှါ အနာရောဂါနှင့် နတ်ဆိုးများအပေါ် ဤအာဏာကို ပေး အပ်ခြင်းခံကြ၏။ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို ကြွေးကြော်ဖို့အတွက် တပည့်တော်များဆီးပေးထားသော တန်ခိုးနှင့် အာဏာများသည် ယနေ့တွင်ပင် ငါတို့အား ဖြစ်နိုင်နေဆဲပင်ဖြစ်သည်။
သူလျှိုများသည်ဟေဘရွန် (Hebron) မြို့ကို အထင်ကြီးကြ၏။ ၎င်းမြို့သည်တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိသော တံတိုင်းခိုင်မာသောမြို့ဖြစ်၍၊ ပေ ၃၀၀၀ ခန့်မြင့်သော တောင်တန်းသွယ်ပြီး အနားတွင်တည်ရှိ၏။ ဟေဘရွန်မြို့သည် အီဂျစ်ပြည်ရှိ ဇိုအန် (zoan)- ၎င်းတည်နေရာသည် ဘီစီ ၁၇၀၀ ခန့်တွင်တည်ဆောက် ထားသည်) ထက်ခုနှစ်နှစ်စော၍ တည်ဆောက်ထားခြင်းရှိ၏။ သူလျှိုများသည် မြင်ရသောအရာကြောင့် တုန်လှုပ်ကြ၏။ အကြောင်းမူကား ဤခိုင်ခန့်သောမြို့ကြီးထဲတွင် အာနက်မှ ဆင်းသက်လာသော Anakes (သို့) Anakim လူမျိုးများဖြစ်သော လူကောင်ကြီးများနေထိုင်ကြ၏။ (“im” သည်ဟေဗြဲဘာသာအရ အများ ကိန်းကို ပြသသည်။)
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သူတို့၏ပြင်းထန်သော ပြောဆိုချက်မှာ –
တောလည်ရာ ၁၃း၂၈-၃၃ “….ပြည်သူပြည်သားတို့သည် အားကြီးပါ၏ ခိုင်ခန့်သောမြို့ကြီးနှင့် နေကြပါ၏ ထိုမျှမက အာနကအမျိုးသားတို့ကိုလည်း မြင်ရပါ၏ အာမလက်အမျိုးသားတို့သည် တောင်ဘက်၌၎င်း၊ ဟိတ္တိလူ၊ ယေမုသိလူ၊ အာဗောရိလူတို့သည် ကောက်ရိုးပေါ်၌၎င်း၊ ခါနန်လူတို့သည် ပင်လယ်နား၊ ယော်ဒန် မြစ်နား၌၎င်းနေကြသည်ဟု လျှောက်ကြ၏။ ထိုပြည်သားတို့ကို ငါတို့မတိုက်နိုင် သူတို့သည်ငါတို့ထက် အားကြီးကြသည်ဟူ၍၎င်း၊ ငါတို့သွား၍စူးစမ်းသောပြည်သည် မိမိသားတို့ကို ဖျက်ဆီးတတ်၏…. သူတို့ ရှေ့မှာ ငါတို့သည် ကိုယ်ထင်အတိုင်း နှံကောင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။”
သူတို့ပြောသောစကားထဲတွင် မမှန်တာမရှိသလို မှားယွင်းတာလည်းတစ်ခုမှမပါခဲ့ပါ။ သို့သော်သူတို့ပြော သောစကားမှာယုံကြည်ခြင်းကင်းမဲ့ရာကျပြီး အရင်ကထာဝရဘုရားပြုတော်မူပြီးသော အမူအရာများကို အသိ မှတ်မပြုရာကျပေသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက် နှိုင်းယှဉ်ချက်အနေဖြင့် ယောရှုနှင့်ကာလက်ထံမှ ထွက်ပေါ်လာသော အမြတ်ဒေါသစကားသံကို ကြားနာကြည့်ပါ။ “ကာလက်ကလည်း ချက်ချင်းချီသွား၍ ထိုပြည်ကို သိမ်းယူကြစို့၊ အောင်နိုင်ကောင်းသည်ဟုဆို၍ မောရှေရှေ့မှာ လူများကိုငြိမ်းစေ၏” (တောလည်ရာ ၁၃း၁၀)
နောက်တစ်နေ့တွင်မယုံကြည်မှုနှင့် ကြောက်ရွံ့ခြင်းက လူတွေကို ကျွန်ပြနေသေးပါသဖြင့် ယောရှုနှင့်ကာလက် တို့သည် စုဝေးနေကြသော ဣသရေလလူအုပ်ကြီးကို မိမိတို့ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ထိန်းချုပ်ဖို့ ကြိုးစားရာတွင် ပြောလိုက်ကြသည်မှာ ငါတို့လျှောက်သွား၍စူးစမ်းသောပြည်သည် အလွန်ကောင်းသောပြည် ဖြစ်ပါ၏။ ထာဝရ ဘုရားသည် ငါတို့ကိုနှစ်သက်လျှင် နို့နဲ့ ပျားရည်စီးသော ထိုပြည်သို့ ငါတို့ကိုဆောင်သွား၍ အပိုင်ပေးတော် မူလိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရားကို မပုန်ကန်ကြပါနှင့်။ ထိုပြည်သူပြည်သားတို့ကို မကြောက်ကြနှင့်၊ သူတို့သည် ငါတို့စားစရာဘို့ဖြစ်ကြ၏။ သူတို့၌အမှီသဟဲမရှိ၊ ထာဝရဘုရားသည် ငါတို့ဘက်၌ရှိတော်မူ၏ သို့ဖြစ်၍ သူ တို့ကို မကြောက်ကြနှင့်ဟု ပြောဆိုကြ၏” (တောလည်ရာ ၁၄း၇-၉)။
ထာဝရဘုရားသည်မယုံကြည်ခြင်းကို မုန်းတီး၏အကြောင်းမှာ ၎င်း၏အမြစ်သည် ကိုယ်တော့်၏ အစွမ်းနှင့် အနန္တတန်ခိုးကို ငြင်းပယ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မာန်မာန၌ အုတ်မြစ်ချထား၍ ကိုယ်တော့်ရဲ့ ခွန်အားနှင့် တန်ခိုးမဟုတ်ပဲ မိမိကိုယ်ကိုသာ မြင်နိုင်စေတတ်၏။
ဤကိစ္စတွင် ထာဝရဘုရားသည်အမျက်ဒေါသထွက်၍ ယောရှုနှင့် ကာလက်ကလွဲ၍ ဤမျိုးဆက်လူများကို ကတိတော်ပြည်မ၀င်စားဖို့ ကတိထားတော်မူ၏။ ဤဆန့်ကျင်ဘက်ပုန်ကန်ခြင်းအမူသည် သူတို့၏ မျိုးစဉ် ဆက် ကပ်လိုက်လာရကြောင်း ဆာလံကျမ်း ၉၅ ထဲတွင်အောက်ရေးသားထားသည်ကို ဟေဗြဲ ၃း၇-၉ ထဲတွင် ပြန်လည်ကိုးကားထားတာကို ငါတို့တွေ့မြင်ရသည်။ “ယနေ့တွင် သင်တို့သည် ဗျာဒိတ်တော်အသံကို ကြားလျက် ခိုင်မာသောစိတ်နှလုံးမရှိကြနှင့်။ သင့်တို့အဘများသည် အနှစ်လေးဆယ်ပတ်လုံး ငါ့ကို နည်း နည်း စုံစမ်း၍ ငါ၏အမှုတို့ကို မြင်ရသော တောတွင် ငါ့ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြု၍ စုံစမ်းရာ ကာလ၍ရှိသကဲ့သို့ မရှိစေကြ နှင့်။ ထိုလူမျိုးကို ငါသည်ဖြစ်၍၊ ထိုသူတို့သည်စိတ်သဘောမှားယွင်းတတ်သော လူမျိုးဖြစ်ကြ၏။ ငါ့၏အလေ့ အလာတို့ကို နားမလည်ကြဟု ငါဆိုရ၏။ ထို့ကြောင့် သူတို့သည်ငါ၏ ချမ်းသာထဲသို့ မ၀င်ရကြဟု အမျက်ထွက်၍ ငါကျိန်ဆို၏” (ဆာလံကျမ်း ၉၅း၇-၁၁)
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးရင်ဆိုင်နေသော ဘုံကိစ္စတစ်ရပ်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် “ထာဝရဘုရားကို မိမိတို့အဆင့်သို့ ဆွဲချ တတ်ကြ၏၊ ဘုရားသခင်အား သေတ္တာထဲတွင် ကျွန်ုပ်တို့ သိမ်းထားနိုင်သည် ဟူ၍ အရင်းတင်း ယုံကြည်မှု” ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိတတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ထိုအရာမှ ငါတို့ဖြတ်သန်းလာသမျှသော ဘ၀အတွေး အကြုံများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်များအား ငါတို့ဘ၀ထဲဝင်လာခွင့်ပေးကာ ကြီးမြတ်သောဘုရား သခင်ကို စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်အနက် ဖွင့်စေကြသဖြင့် ထိုနေ့အားဖြင့် ဘုရားသခင်ကို သေးသိမ်စေကြပါ၏။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကို ယနေ့ကျနော်တိုက်တွန်းပါရစေ – “ငါတို့၏အမွေကိုကြွေးကြော်၍ ဘုရားသခင်သည် ကတိတော်များတည်စေဖို့ သစ္စာရှိမှန်းကို အောက်မေ့ကြပါစို့။” ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရှေ့ကို အစဉ်အမြဲ ကြည့်ရှုကြပါစို့။ ရန်တိုက်လိုစိတ်ရှိ၍ သတ္တိရှိပါအကြောင်းမှာ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့နှင့်အတူရှိသည်ဖြစ်၍ “ဤတောင်ကိုအကျွန်ုပ်အားပေးလော့” ဟု ဘုရားသခင်အားတောင်းလျှောက်ပါ။
သင်နှင့်ကျွန်ုပ်သည် အကျင့်ဟောင်းကို ချိုးဖျက်၍အသက်တာထဲ ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်မည်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ် တို့၏အောင်မြင်ခြင်းကိုပျက်ရယ်ပြုသော လူတောင်ကြီးကိုရင်ဆိုင်၍ပြောဆိုရပါမည်။ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်သည် ဘာပဲ ရင်ဆိုင်ပါစေပြဿနာမဟုတ်၊ ငါတို့၏ပန်းတိုင်နှင့် အိပ်မက်များ ဘယ်လောက်ကြီးမားပုံရှိပါစေ ပြဿနာ မဟုတ်၊ ငါတို့၏စကားလုံးများကိုပြောင်းလဲပစ်၍ အောင်မြင်ခြင်းကို ကြွေးကြော်ကြပါစို့။
ငါတို့၏တောင်များအကြောင်းပြောဆိုခြင်းကို ရပ်နားကြပါစို့၊ ယခုသည်၎င်း (တောင်) ကို ပြောရမည့်အချိန်ဖြစ် ပြီ။ကျွန်ုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိသောတစ်ခြားသူများနှင့် ဒီလောကကြီးအားကျွန်ုပ်တို့၏ပြဿနာများအဘယ် မျှလောက်ကြီးမားတဲ့အကြောင်းပြောပြနေသောအသက်ရှင်ခြင်းများထားရစ်ကြပါစို့။ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်နှလုံး အရင်းနှင့် ဘုရားသခင်ဘယ်လောက်ကြီးမြတ်ကြောင်း သူတို့အားပြောဖို့ စတင်လိုက်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်း၌ရပ်တည်ဖို့၊ အောင်မြင်ခြင်းကို မြွတ်ဆိုဖို့နှင့် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးထားပြီးသော လွတ်မြောက်ခြင်းနှင့် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ၌ ရှေ့သို့ခြေလှမ်းဖို့ရန် လိုအပ်ပေသည်။
“ငါအမှန်ဆိုသည်ကား အကြင်သူသည်ယုံမှားသော စိတ်နှင့်ကင်း၍ မိမိဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်ရမည်ဟု ယုံကြည် လျက်တောင်ကိုနေရာမှ ရွေ့လော့၊ ပင်လယ်၌ကျလော့ဟုဆိုလျှင် ထိုသူဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်။” (မာကု ၁၁း၂၃)
ဒါကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ကြပါသလား။ ဟုတ်ပြီ၊ ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ကြပါသလား။ ထို့သို့ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်၊ အဘယ်ကြောင့် ငါတို့၏လူတောင်ကြီး ယခုပင်မပြောရတာလဲ၊ ငါတို့၏တောင်ကြီးကို ကျယ်သောအသံနှင့် ဘာလို့မအော်ရတာလဲ။
ထာဝရဘုရား၏သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားခြားနားသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည် လူယောကျာ်း များနှင့် လူမိန်းမများဖြစ်စေဖို့ အခွင့်ပေးပါ။
ကာလက် – ခြားနားသောစိတ်ဓာတ်ရှိသူ – အပိုင်း ၂
ငါ့ကျွန်ကာလက်မူကား ထူးခြားသော သဘောရှိ၍ ငါ့နောက်သို့ လုံးလုံးလိုက်သောကြောင့် သူသွားခဲ့ပြီးသော ပြည်သို့ သူ့ကို ငါဆောင်သွင်းသဖြင့် သူ၏သားမြေးတို့သည် အမွေခံရကြလိမ့်မည်။ (တောလည်ရာ ၁၄း၂၄) သတင်းစကား
ဤစကားလုံးများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့ကအခန်းကဏ္ဍဖြစ်သော ကာလက်အကြောင်းကို နိဂုံးချုပ်လိုက်ရပါ၏။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်း၌ ရပ်တည်၍အောင်မြင်ခြင်းကို ကြွေးကြော်ကာ ကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရားသခင် ပေးထားပြီးသော လွှတ်မြောက်ခြင်းနှင့် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှေ့သို့ ခြေလှမ်းဖို့ လိုအပ်ပေသည်။ ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ အကြင်သူသည် ယုံမှားသောစိတ်နှင့်ကင်း၍ မိမိဆိုသည်အတိုင်းဖြစ်မည်ဟု ယုံကြည်လျက်ထိုတောင်ကိုနေရာမှရွေ့လော့။ ပင်လယ်၌ကျလော့ဟုဆိုလျှင်ထိုသူဆိုသည်အတိုင်း ဖြစ်လိမ့် မည်။ (မာကု ၁၁း၂၃) ထိုအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်နေဆဲလား၊ ယုံကြည်ပါသလား ကျွန်ုပ်တို့၏လူတောင်ကြီးအား ဆန့် ကျင်ပြောထွက်နေဆဲလား၊ကျွန်ုပ်တို့၏တောင်ကြီးအားကျယ်သောအသံနှင့်ဆန့်ကျင်ကြွေးကြော်နေဆဲလား။ အကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်သဘောထားသည် ခြားနားသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည့် လူယောကျာ်း၊ လူမိန်းမ အဖြစ် ဘုရား သခင်၏သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်က ပြုလုပ်နေဆဲလား။
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းဆောင်မူထက်နှလုံးသားကိုသာ၍စိတ်ဝင်စား၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ နှလုံးသား မှန်ကန်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ စွမ်းဆောင်မှုလည်း နောက်ပိုင်းမှာ ပါလာဖြစ်၏။
သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်၏ဆန္ဒနှင့် ဆက်စပ်၍ရိုးရှင်းလွန်းပါသည်။ ဘုရားအတွက်နှလုံးသားဘယ် လောက်အရေးကြီးသည်ကို ကျနော်တစ်ခဏမျှပေါ့ ပျက်ပျက်ဖြစ်စေမည်မဟုတ်ပေ။ အမှန်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ ၏အောင်မြင်မှု မြင်နိုင်သောအသီးပွင့်၊ တတ်နိုင်စွမ်းနှင့် စွမ်းဆောင်မှုများသည် အချိန်အားလုံးတွင် ဒုတိယနေ ရာသာဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲ – အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့ နှလုံးသားမှန်ကန်နေရင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ စွမ်းဆောင်မှုများသည် နောက်ပိုင်းတွင် ကောင်းလာမည်ဖြစ်သည်။
ဤအကြောင်းကိုစိတ်ထဲသိုထားလျက်၊ ကာလက်၏ နှလုံးသား၊ စိတ်၊ ၀ိညာဉ်ထဲကို ပို၍နီးကပ်စွာ ယခုပင် ကြည့်ရှုကြပြီး ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဘာတွေလေ့လာတွေ့ရှိနိုင်သလဲဆိုတာ ကြည့်ကြပါစို့။ ဤသို့လုပ်ဆောင် ရာတွင် “သူ၌ထူးခြားသောစိတ်သဘောထားရှိ ငါ့နောက်သို့စိတ်နှလုံး အကြွင်းမဲ့လိုက်လေ၏” ဟူသောအချက် သည် ဘုရားသခင်၏ ကြေငြာထားခြင်းဖြစ်ကြောင့် အောက်မေ့သတိရကြပါစို့။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့ဆက်မသွားခင် အနည်းငယ်ပြန်တင်ပါရစေ –
တမန်တော်ရှင်ပေါလုက အောက်ပါစကားလုံးများ ရေးသားထား၏- “ထိုအကြောင်းအရာရှိသမျှတို့သည် ပုံသက်သေဖြစ်အံ့သောငှါ ထိုသူတို့၌ ရောက်ကြ၏။ ကပ်ကာလအဆုံးတွင်ဖြစ်သော ငါ့တို့ကို ဆုံးမစရာဖို့ ကျမ်းစာ၌ရေးထားလျက်ရှိသတည်း” (၁ကော ၁၀း၁၁)။ ရှင်ပေါလုက ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကို ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အထူးသဖြင့် ပြောထားသည်မှာ “ငါတို့သည် ကျမ်းစာ၌ပါသော သည်းခံခြင်း၊ သက်သာခြင်း အကြောင်းများကို အမှီပြု၍ မြှော်လင့်ရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းငှါ ကျမ်းစာ၌အထက်ကရေးထားသမျှသည် ငါတို့ကိုဆုံးမသြ၀ါဒပေး ၍ ရေးထားသတည်း” (ရောမ ၁၅း၎)
ဒီအထိကျွန်ုပ်တို့ဘာတွေတွေ့မြင်ပြီးပြီလဲ။ ဥပမာများက ဘာတွေလဲ။ ဘာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်တွေ တွေ့ရှိ ပါသလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့ ဘာတွေသင်ယူမိပါသလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့ထင်ရှားစွာ တွေ့မြင်ရသောအရာမှာ သူလျှို ၁၂ ဦးအကြားကွဲပြားခြားနားသော စိတ်သဘောထား ပေါ်လွင်ဖ်ာပြထားခြင်းဖြစ်သည်။
သူလျှို ၁၀ ဦး၏စိတ်သဘောထား
၁။ သူလျှို ၁၀ ဦး၏ ရှုမြင်သုံးသပ်ပုံသည် သိပ်ပြီး တောက်ပမှုမရှိ။
၂။ သူတို့၏ သတင်းပို့မှုသည် မည်းမှောင်နေ၏။
၃။ သူတို့သည်ဖြစ်နိုင်ခြေထက်၊ ပြဿနာကိုသာ၎င်း၊ ထာဝရဘုရားထက်လူကောင်ကြီးများကိုသာ၎င်း၊ အောင် နိုင်ခြင်းထက် ရှုံးနိမ့်ခြင်းကိုသာ၎င်း မြင်တတ်ကြ၏။
၄။ သူတို့၏စိတ်သဘောထားကို အငြင်းဆန်/ အနှုတ်လက္ခဏာဆန်ဟု သေချာဆိုနိုင်၏။
သူလျှို ၂ ဦး၏စိတ်သဘောထား
၁။ ကာလက်နှင့်ယောရှုသည် အလွန်အကောင်းမြင်တတ်သူဖြစ်ကြ၏။
၂။ သူတို့၏ သတင်းပို့မှုသည် မျှော်လင့်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်စေသည်။
၃။ သူတို့သည်ပြဿနာထက် ဖြစ်နိုင်ခြေကိုသာ၎င်း၊ လူကောင်ကြီးများထက် ထာဝရဘုရားကိုသာ၎င်း၊ ရှုံးနိမ့် ခြင်းထက် အောင်နိုင်ခြင်းကိုသာ၎င်း မြင်တတ်ကြ၏။
၄။ ၎င်းသည်အနှုတ်ဆန်သော လက္ခဏာထက်အပေါင်းလက္ခဏာဆန်သောကြောင့် ကျန်သူလျှို ၁၀ ဦးမှာ ကွဲပြား ခြားနားနေခြင်းဖြစ်သည်။
ထာဝရဘုရားသခင်က ကာလက်အား “ခြားနားသောစိတ်ဓာတ်ရှိသူ” ဟုခေါ်လေ၏။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့လည်း အသင်းတော်ထဲမှာ ဤလိုမျိုးအုပ်စုနှစ်မျိုးရှိနေတာ မှန်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ ခေါင်းဆောင်များတွင် အလားတူစိတ်သဘောထားများရှိတတ်ကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ တစ်ချို့က ဧ၀ံဂေလိတရားဖြန့်ဝေဖို့အခွင့်ကောင်းများမြင်တွေ့နိုင်ကာ ၎င်းတို့၏ပင်ကိုယ်စိတ်တွင် ပြောကြသည်မှာ “ငါတို့ တတ်စွမ်းနိုင်၏”ဟူ၍ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဘက်မှာ တစ်ချို့က လူတွေထဲရှိသော မကောင်းတဲ့အရာ ကိုသာ မြင်၍ ဒေါသထွက်အမှားများနှင့်ပြောတတ်ကြသည်မှာ “ငါတို့မတတ်နိုင်ဘူး” ဟူ၍ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည်သက်ဝင်လှုပ်ရှားသော ပဋိညာန်၊ ဆက်ကပ်အပ်နှံမှုနှင့် ကိုယ်အလိုအလျှောက်ဆက်ကပ်ပူ ဖော်ခြင်းမျိုးမရှိသော အသင်းဝင်များနှင့် ယုံကြည်တစ်ဦးစီတိုင်းဖြင့် ယုံကြည်သူများစုပေါင်းထားသော အသင်း တော်တစ်ပါး (သို့) ကြီးမြတ်သောတပည့်တော်မျိုးဘယ်သောအခါမှမဖြစ်စေနိုင်ပေ။ ဘုရားသခင်နှင့် ပဋိညာန်ဆက်ဆံရေးထံသို့ ၀င်စားကြသောသူများ၏ ပျက်စီးခြင်းငှါများစွာသော လက်နက်များအသုံးချခဲ့တာ မျိုးယခုနေ့ရက်မှာလည်း ဖြစ်နေတာအမှန်ကန်ပင်။ ၎င်းတို့ကြားထဲတွင်အခြား အရာများသည် စိတ်ရှုပ် ခြင်းများ၊ တုံးတမ်းစဉ်လာများ၊ ထိရောက်မှုစမ်းသပ်ခြင်း၊ မိမိဘာသာအားရကျေနပ် ခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ကြ ပြီး၊ ၎င်းတို့သည် ဤလက်နက်များ၏ပို၍ ထင်ရှားသည့်လက်နက် အချို့ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်လည်းသည့်ထက် ပိုများများရှိပါ သေး၏။
ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ဦးစီယုံကြည်ခြင်း လမ်းခရီးများတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်သဘောထားများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဆောင်မှုများဖြစ်လာတတ်ကာ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဆောင်မှုများသည် စိတ်သဘောထားများနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိရန် ပေါင်းစည်းဖို့လိုအပ်ပေသည်။ ရရှိလာသောထိရောက်မှုအကျိုးမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်ကိုက်ညီမှုရှိသော ပေါင်းစည်းခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ကြွယ်ဝသော အရင်းအမြစ်များကို ထုတ်လွှင့်ပေးပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ ကျွန်ုပ်တို့အပေါ် ဘိက်သိက်ပေးခြင်း ကျရောက်ခြင်းနှင့်တကွ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေါင်းစည်းခြင်းထဲ ဤအရာဖြစ် ပျက်လာသောအခါတွင်မူ အိုး… ကောင်းပေ၏၊ သို့ဖြစ်၍ “ငါတို့တတ်စွမ်းနိုင်၏” ဟူ၍ ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုနိုင်ပေ မည်။
သူလျှို ၁၀ ဦး၏ ထင်ရှားသောအမှုအကျင့်များ
သူလျှို ၁၀ ဦး၏ ဤကဲ့သို့အနှုတ်ဆန်သော စိတ်သဘောထားထဲသို့ အနည်းငယ်ကပ်ပြီး ကြည့်ရှု၍ သူတို့၏ စရိုက်ထဲတွင်ပေါင်းစည်းထားသော လက္ခဏာများနှင့်ထင်ရှားသောအမူအကျင့်များဘာဖြစ်သည်ကို ကြည့်ကြ ပါစို့။
သံသယစိတ် သူတို့က “ငါတို့မစွမ်းဆောင်နိုင် ဟု ပြော၏။”(တောလည်ရာ ၁၃း၃၁)။ သံသယစိတ်က ပြည်တော် ကိုသိမ်းယူဖို့သူတို့ဘုရားသခင်၏အရင်းအမြစ်များနှင့် သူတို့အားဦးဆောင်နေသော သူအပေါ်သူ တို့၏အတွင်း ပိုင်းယုံကြည်ခြင်းအပေါ်မေးခွန်းထုတ်စေပါသည်။
ကိုယ်ကိုတန်ဖို့လျော့ချခြင်း – “သူတို့ရှေ့မှာငါတို့သည် ကိုယ်အထင်အတိုင်းနှံကောင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ သူတို့ အထင်အတိုင်းလည်း ထိုသို့ဖြစ်ကြ၏” (တောလည်ရာ ၁၃း၃၃)။ သူတို့သည်ကလေးသူငယ်များက မိမိ ကိုယ်ကို အလွန်နုနယ်၍အလွန်သေးငယ်သည်ဟု မြင်သကဲ့သို့၎င်း၊ သေးငယ်သောကျိုင်းကောင်/နှံ ကောင်ကဲ့ သို့ ထွားကျိုင်းပြီး လူကောင်ကြီးများဖြင့် အလွယ်တကူချေမှုန်းခြင်းခံမည်သဘောဖြင့် ကိုယ်ကို ထင်မြင်ကြ၏။
ကြောက်ရွံ့ခြင်း – ယောရှုက တောလည်ရာ ၁၄း၉ ထဲတွင်ရည်ညွှန်းဖော်ပြထားသည်မှာ သူတိုိ့သည် မိမိတို့ အတွက် ဘုရားသခင်ပြုပြီးတော်မူသောအမှုကိုိ မြင်တွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နေဆဲဖြစ် ကြ၏။ သဘာဝအားဖြင့် ကြောက်ရွံ့ခြင်းသည် သံသယစိတ်နှင့် ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးလျော့ကျခြင်းတို့၏ အပေါင်း အဖော်ဖြစ်၏။ ကြောက်ရွံ့ခြင်းက ကျွန်ုပ်တို့အား လေဖြတ်စေကာ လှုပ်ရှားမှုကို ရပ်တန့်စေတတ်၏။
ဝေဖန်တတ်သောစိတ်ဓာတ် – လူတို့သည်အနှုတ်လက္ခဏာဆန်၍ မလှုပ်တော့သောအခါ၊ ရှေ့သို့ခြေလှမ်းချင် သောတစ်ခြားသူများကို ဝေဖန်တဲ့ဘက်တို့ ဦးတည်လာကြသည်။ လူထုတရပ်လုံးသည် ကြောက်မက်ဖွယ် သော ၁၀ ဦး၏တင်ပြချက်ဖြင့် လွှမ်းမိုးခံရသဖြင့် ငြီးထွားကာ၊ ဘုရားသခင်၏ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသော မောရှေနှင့် အာရှန်အပေါ်ဆန့်ကျင့်၍ စောဒက တက်လာကြ၏။ (တောလည်ရာ ၁၄း၁-၂)
မှန်ကန်ခြင်းနှင့် ကျေးဇူးကန်းခြင်း – သူတို့ထုတ်ပြ၍ ဖြန့်ဝေလိုက်သည့် စိတ်သဘောထားသည်ဘုရားသခင် ကိုဆန့်ကျင်သော ပုန်ကန်ခြင်းစိတ်သဘောဖြစ်ခဲ့သည်။ “…….လူတစ်စုံတစ်ယောက်ကို မြှောက်၍၊ အဲဂုတ္တို ပြည်သို့ပြန်ကြစို့” (တောလည်ရာ ၁၃း၎)။ ကတိတော်ပြည်ကိုဝင်စားလုဆဲဆဲ အခြေအနေမှ သူ့ကျွန်ခံရာပြည် သို့ပြန်လှည့်ဖို့ လိုချင်နေခြင်းအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်နိုင်ပါသလား။ သူတို့၏စိတ်ဓာတ် ညွှန်ပြထားသည်မှာ သူတို့ခံစားရသော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများအတွက် ကျေးဇူးမသိတတ်တာပင်ဖြစ်သည်။ အဲဂုတ္တိပြည်မှ ထွက်ခွာအပြီးနှစ်နှစ်တိုင်တိုင် ဘုရားသခင်ပြုပေးတော်မှုသော အရာများအတွက် သူတို့သည် အသိအမှတ်ပြုဖို့ ကျရှုံးခဲ့ကြသည်။
မယုံကြည်မှု – အနှုတ်လက္ခဏာဆန်သော စိတ်သဘောထားအမှုအကျင့် ဟူသမျှသည် မယုံကြည်မှုဟူသော စကားလုံးတစ်တည်း၌ စုပုံပါသည်။ ဟေဗြဲ ၃း၁၈-၁၉ ထဲတွင် ဟေဗြဲသြ၀ါဒစာရေးသားသူက ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြထားသည်မှာ ဤအချက်သည်ခါနန်ပြည်ကို ၀င်စားခွင့် ပိတ်ထားသောအအရာဖြစ်သည်ဟု ဆို၏။
ကျွန်ုပ်၏ညီအစ်ကိုမောင်နှမများနှင့် ပတ်သက်၍ကျနော်မသိပေမဲ့ ကျနော်ကတော့ဤစိတ်သဘောထားမျိုးကို မြင်ရတာသေလောက်အောင် ကြောက်မိပါတယ်။ ကျနော်ဟာ ကျနော်မှန်ထဲကြည့်ပြီး ဘုရားသခင်ကို “ကိုယ် တော်ဤလိုမျိုးအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ထဲ မကိန်းအောင်းဖို့အရေးတားမြစ်ပေးပါ” ဟုတောင်းဆိုပါ၏။ ဤစိတ် သဘောမျိုးယနေ့အသင်းတော်ထဲရှိနေခြင်းက ဆုတ်ယုတ်စေတတ်ပါသည်။ ၎င်းတို့က ကျွန်ုပ်တို့၏ အဆင့် အတန်းများကို ခွဲခြားထားပြီး၊ အပြစ်၏သဲကန္တာရထဲတောလည် လမ်းမှားစေလျက် ဘုရားသခင်ချမှတ်ပေ ထားသောနေရာသို့ ၀င်စားခြင်းမှ တာဆီးထားပါသည်။
အကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင့်သားသမီးများအသက်တာထဲ၌ အနှုတ်လက္ခဏာ ကျိန်းဝပ်ဖို့ခွင့်ပြုထားခြင်းနေရာ လွတ်မရှိနိုင်ကြောင်း ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအပေါ်အထူးပြုပြောကြားချင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ ကျနော် သည်လက်တွေ့ဆန်သောသူဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ၎င်းသည်သူတပါးကိုအမှုဆောင်ဖို့ကြိုးစားသူများစွာနှင့် မကြာခဏဆိုသလို ကျွန်ုပ်တို့အထဲ၌ပင်လျှင် ဆက်တိုက်ရှိတတ်သော စိတ်သဘောထားအဖြစ်၎င်း အသက် တာရဲ့ စ်ိတ်သဘောထားအဖြစ် ၎င်းရှိနေတတ်ကြောင်း ကျနော်သိမှတ်မိပါသည်။
၎င်းသည်ဘုရားသခင်၏လုပ်ဆောင်မှုကို နိမ့်ကျအောင်ပြောဆိုနေခြင်းကို ဘယ်သောအခါကမှရပ်တန့်ခြင်း မရှိသော စ်တ်သဘောထားတစ်ခုဖြစ်၏။ ၎င်းကို Doom နှင့် Gloom ရှိပရောဖက်တစ်ပါးကဲ့သို့ ဖော်ပြခြင်းရှိ၏။ အနှုတ်ဆန်သော စိတ်သဘောထားကို ဧ၀ံဂေလိ (သို့) ကယ်တင်ခြင်းသင်တန်း၌ဖြစ်စေ၊ ကျမ်းစာသင်ကြား ခြင်း၌ဖြစ်စေ၊ လမ်းပေါ်ဧ၀ံဂေလိလုပ်ငန်း (သို့) သာသနာလှုပ်ရှားမှု၌ဖြစ်စေ တင်ပြထားသော အကြောင်း တိုင်း၌ ပြောထုတ်ဖို့ဆိုတာ ဘာမှအသုံးမ၀င်သလို အကျိုးလည်းမရှိဖြစ်၍အချိန်၊ အားအင်နှင့် ငွေကြေးကို ဖြုန်းတီးရုံ သာဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
ယနေ့ထိုအနှုတ်/အငြင်းဆန်ခြင်းသည်ဆက်သွား၍မရအောင်လမ်းမကိုပိတ်ဆို့သောအတားအဆီးဖြစ်ကြောင်း၊ အသုံးဝင်ခြင်း၏လည်ပင်းပတ်လည်တွင် ဆွဲထားသောကြိတ်ဆုံနှင့်တူကြောင်း သင်တို့အားကျနော် ပြော ပြနေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဦးနှောက်ကင်းသလို လုပ်ဆောင်တတ်ပြီး ၎င်းကိုယ်တိုင်သစ္စာရှိသော သူတို့၏ စိတ်အားထက်သန်စဉ်နေခြင်းအပေါ် ရေခဲခွဲလက်နက်ကိရိယာလို တင်ပြနေတတ်၏။
၎င်းမတိုင်မှီအနှုတ်ဆန်ခြင်းက ဘာလိုမြင်တွေ့ပါသလဲ။ နှင်းဆီပန်းတောထဲက ဆူးပင်ရှိတတ်ပြီး၊ ဆူးပင်တော ထဲတွင် နှင်းဆီပန်းမရှိတတ်ပေ။ ၎င်းသည်၎င်း၏ မိဘများဖြစ်သော ဦးယုံကြည်အားနည်းနှင့် ဒေါ်ယုံကြည်အား နည်းတို့မှဆင်းသက်လာခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ပထမသားဦးကို စိတ်ပျက်ခြင်းဟု အမည်ပေး၍ မြေးကိုတော့ သဘောထားဆိုးခြင်းဟု အမည်မှည့်ကာ၊ အနီးဆုံးဝမ်းကွဲ ညီအစ်ကိုကျတော့ ခေါင်းမာခြင်းဟု အမည်ပေးထား ပါသည်။
ကာလက်နှင့် ယောရှု၏ထင်ရှားသော အမှုအကျင့်များ
ဤပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးသည် ခြားနားကြ၏ သူတို့မှာ ခြားနားသောပင်ကိုယ်စိတ်ဘ၀တွင် ခြားနားသောဦးတည်မှုနှင့် ဘုရားသခင်နှင့် သူ၏လုပ်ဆောင်မှုဘက်ဆီသို့ ဦးတည်သော ခြားနားသည့်စိတ်သဘောထားရှိကြ၏ ဘုရားသ ခင်သည် သူုတို့ကို (သူတို့စိတ်သဘောထားနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်) ပေါင်းစည်းထားပြီး၊ သူတို့ကလည်း ဘုရား သခင်၏ အရင်းအမြစ် (အင်အား)ရဲ့ လွှတ်မြှောက်စေမည့် ၀န်ထုပ်တစ်ခုရှိကြောင်း သိမှတ်ကြ၏။
ယုံကြည်ခြင်း – သူတို့ပြောဆိုသည်မှာ “ငါတို့အနိုင်ယူနိုင်စွမ်းရှိ၏” (တောလည်ရာ ၁၃း၃၀)။
အရေးကြီးဆုံးအနေဖြင့် သူတို့၏ ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကြ၏။
ယုံကြည်စိတ်ချမှု – ယောရှုက “သူုတို့ကိုမကြောက်နှင့် (တောလည်ရာ ၁၄း၉)” ဟုဆို၏ သူသည် လူကောင်ကြီး များကိုသော်၎င်း၊ မြို့များ၏အုတ်တံတိုင်းများကို (သို့) လူတွေ၏ခွန်အားကိုသော်၎င်း မကြောက်ရွံ့ပေ။
ဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ပင် သူသည်ရန်သူ့ဦးခေါင်းကို ဖြတ်ပစ်လိုက်ဖို့ ကြေငြာခဲ့သည်။ “ထာဝရဘုရားသည် သင့်ကိုငါ့ လက်၌အပ်တော်မူသဖြင့်၊ သင့်ကိုငါသတ်၍ လည်ပင်းကိုဖြတ်မည်” (၁ ဓမ္မရာဇ၀င် ၁၇း၄၆)
အစွမ်းသတ္တိ – ကာလက်က “ချက်ချင်းချီသွား၍ ထိုပြည်ကိုသိမ်းယူကြစို့။” (တောလည်ရာ ၁၃း၃၀) ဟုဆို၏ အပေါင်းဆန်သော လူတွေက “ယခုပင်သွား၍ လုပ်ကြစှုိ့” ဟုပြောတတ်ကြ၏။
ကျေးဇူးသိတတ်ခြင်း – ပြည်တော်သည်ဘုရားသခင့်ထံမှ ဆုကျေးဇူးတစ်ခုအဖြစ်၎င်း၊ သူတို့ကိုနှစ်သက်သော ကြောင့်ပေးသော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဖြစ်၎င်း သူတို့နားလည်သဘောပေါက်ကြ၏။ “ဣသရေလအမျိုးသား အပေါင်းတို့အား ခေါ်လျက်၊ ငါတို့လျှောက်သွား၍စူးစမ်းသော ပြည်သည်အလွန်တရာကောင်းသော ပြည်ဖြစ်ပါ ၏ ထာဝရဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကိုနှစ်သက်လျှင်၊ နို့နှင့် ပျားရည်စီးသော ထိုပြည်သို့ငါတို့ကို ဆောင်သွား၍ အပိုင်ပေးတော်မူလိမ့်မည်။” (တောလည်ရာ ၁၄း၇-၈)
လေ၀ိအမျိုးသားများ၊ မိန်းမများနှင့်ကလေးများမရေတွက်ဘဲ စစ်တိုက်နိုင်သော ဦးရေ ၆၀၃၅၅၀ ဦးရှိကြောင်း တောလည်ရာ ၃း၂ တွင်ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြထားသည်ကို သိမှတ်ဖို့ သတိပြုဖွယ်ဖြစ်ပါ၏။ ထိုမျှသောအရေ အတွက်အနက် ယောရှုနှင့် ကာလက်သာ ခါနန်ပြည်ကိုဝင်စားခွင့်ရခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် အနည်းဆုံး ၆၀၃၅၄၈ လောက်တော့ သူတို့၏အပြစ်နှင့် မယုံကြည်မှုကြောင့် တောထဲတွင် ဆုံးပါးသွားကြ၏။
များစွာသောလူတို့သည် ပျက်စီးခြင်းသို့ပို့ဆောင်သော ကျယ်သောလမ်းလျှောက်နေစဉ်ခိုက်မှာ အထက်သို့ပို့ ဆောင်သော ကျဉ်းမြှောင်းတဲ့ဂိတ်ကိုဝင်၍ ဖြောင့်မတ်စွာ လျှောက်သွားသောသူသည် အလွန်နည်းလိမ့်မည်ဟု ပြောသော ယေရှု၏စကားများသည် ကျွန်ုပ်တို့အား သတိပေးနေပါ၏။ (မဿဲ၇း၁၃-၁၄)။ ရှေ့နောက်စကား ဆက်များကိုကြည့်ရှုရာမှ ကျနော်သိမှတ်သည်မှာ ၎င်းသည်ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကို ညွှန်ပြနေသည့် အပြင် ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာနေသောအကြောင်း၌လည်း ငါတို့ကို ပြောပြနေတာဖြစ်ပါသည်။
ငါတို့၏ယုံကြည်ခြင်းခရီးလမ်းအပေါ် ယနေ့လျှောက်သွားနေခြင်းအပေါ် မေးခွန်းကတော့ – “ရှေးခေတ်ဘုရား သခင်၏သူရဲကောင်းနှစ်ဦးကဲ့သို့ ငါတို့၏ ပင်ကိုယ်စိတ်များတိုးတက်စေရေးဆုံးဖြတ်ကြမည်လော့” သို့တည်းမ ဟုတ်ဆိုးဝါးသောသတင်းပို့ပေးသော ရှက်ဖွယ်သူလျှို ၁၀ ဦးကဲ့သို့ ငါတို့ဖြစ်မှာလား။ အောင်နိုင်သူဖြစ်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ဘုရားသခင်အဖို့ အောင်နိုင်သောသူဖြစ်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်နိုင် ပါတယ်။
ကာလက်အသက်တာ၌ ကျွန်ုပ်တို့မှတ်သားရသည့် မတူခြားနားသောအရာများမှာ –
၁။ ကာလက်၌၀တ်ပြုကိုးကွယ်သူ၏ နှလုံးသားရှိသည်။
နံဝိညာဉ်နှင့်သော်၎င်း သစ္စာနှင့်သော်၎င်း ကိုးကွယ်သောသူများကို ရှာတွေ့ဖို့သည် ဘုရားသခင်၏ အမြဲတမ်း စိတ်ဆန္ဒဖြစ်သည်။ ယေရှုကထိုအကြောင်းကို မ်ိန့်တော်မူပြီး ၎င်းသည်ကာလက်၏ အခြေခံကျသော ထူးခြား သောလက္ခဏာတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။
“ကိုးကွယ်သောသူမှန်သမျှတို့သည် ခမည်းတော်ကို ၀ိညာဉ်နှင့်၎င်း၊ သစ္စာတရားနှင့်၎င်း ကိုးကွယ်ရမည့် အချိန် ကာလသည်လာ၍ ယခုပင်ရောက်လျက်ရှိ၏။ အကြောင်းမူကေား ထိုသို့ ကိုးကွယ်သောသူတို့ကို ခမည်းတော် သည် အလိုတော်ရှိ၏။ဘုရားသခင်သည် နံဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူ၏ ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်သော သူတို့သည် နံဝိညာဉ်နင့်၎င်း၊ သစ္စာနှင့်၎င်း ကိုးကွယ်ရမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။” (ယော ၄း၂၃-၂၄)
ငါတို့၏ကယ်တင်ခြင်းအရာ၌ ၀မ်းမြှောက်ကြပါ၏၎င်းသည် မှန်ကန်သောလုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။ လက်ဝါး ကပ်တိုင်နားကို ငါတို့ချဉ်းကပ်သောအခါ၊ ငါတို့၏ စိတ်ဝိညာဉ်ထဲတွင် ယေရှုပြောသော စကားများကို ကြား ရသည်မှာ “သင်သည်ဆင်းရဲသောသူဖြစ်လျှင် သင့်ကိုချမ်းသာစေနိုင်၏ သင်သည် အားနည်းသောသူ ဖြစ်လျှင် သင့်ကိုအားကြီးစေနိုင်ပါ၏ သင်သည်စွန့်ပစ်ခံနှင့် အထီးကျန် နေသူဖြစ်လျှင် ကြိုဆိုလျက်ပါ” ဟူသော အကြောင်းဖြစ်သည်။ ဤသည် ငါတို့၏သမိုင်းပုံပြင်နှင့် သီချင်းဖြစ်လာပေ၏။
ရှင်ယောဟန် ၄ ရှိ အခန်းငယ် ၂၃ နှင့် ၂၄ နှစ်ခုကို ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်မှောက်အချိန်နှင့် မျက်မှောက်ကာလလေးတစ်ခုဆီသို့ အသိဥာဏ်နှင့်ဆိုင်လျက် ကိုယ်ကိုပို့ဆောင်ပေးကြ၏။ မည်သို့ပင်ဖြစ် စေ၊ သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်သည် ဖန်ဆင်းခြင်းမှစ၍ နံဝိညာဉ်နှင့်၎င်း သစ္စာနှင့်၎င်း ကိုးကွယ်ဖို့ရန် အားလုံးကိုခေါ်ဖိတ်လျက်ရှိ၏။ သင်နှင့် ကျွန်ုပ်သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ ခေါ်တော်မူ ခြင်းကို နားစွန့် လျှင် သူသည် ခြင်္သေဟိန်းသံနှင့် ခေါ်နေသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ကြားရပါမည်။
ယနေ့တွင်သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်ထံမှအချက်ပေးခေါ်ခြင်းမြစ်တစ်စင်းအမြဲတမ်းရှိနေပါ၏။ ကျွနုုပ်တို့ သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဖတ်ရှုခြင်းနှင့် နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်ဆက်ကပ် အချိန်ယူခြင်းအရာ တွင် ပျော်ရွှင်ရသောအချက်ကို နှစ်သက်ကြပါ၏။
သို့ဖြစ်၍ယနေ့ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သည် အရင်ဘယ်တုန်းကမှနှင့်မတူ စိတ်နှလုံးသားများအပေါ် ရွေ့လျားနေကြောင်း ကျနော်ပြောပါ၏၎င်းသည် နယ်နိမိတ်များကို ချိုးဖျက်၍ လွှတ်မြောက်ခြင်းကိုယူဆောင် လာ၏ – သို့သော် သို့ဖြစ်၍ ဤသို့သော် ဟူသောစကားလုံးကို ကျနော်အထူးပြုလိုပါတယ်။ သို့သော်၎င်းသည် စစ်မှန်သော ကြည်လင်ပြတ်သားခြင်းရှိသည်နေရာမျိုးမှာသာ ကြေငြာခြင်းရှိ၏။
ဒီကနေ့ ကျွန်ုပ်တို့ကြေငြာသည်မှာ “ငါတို့သည်ကိုယ်တော်ကို ကိုးကွယ်ခြင်းအား နှစ်သက်၍ကိုယ်တော်၏ နာမတော်အား ချီးမွှမ်းခြင်းရှိသည်ကို နှစ်သက်ကြပါ၏။” ဒါပေမဲ့မှန်ကန်သောကိုးကွယ်ခြင်းနှင့် လက်ခံဖွယ် သော ကိုးကွယ်ခြင်းသည်နံဝိညာဉ်နှင့်၎င်း၊ သစွာနှင့်၎င်းဖော်ပြခြင်းရှိနိုင်မှသာ ၎င်း၏ဆက်စပ်ပတ်သက်မှုနှင့် လက်ခံခြင်းကို ရှာတွေ့ကြောင်း အောက်မေ့ သတိရကြပါစို့။
John Piper ကအောက်ပါအတိုင်းပြောဆို၏။ – ကိုးကွယ်ခြင်းသည် နှလုံးသားထဲတွင်မရှိမဖြစ်နှင့် စစ်မှန်ခြင်း ရှိပြီး ကိုးကွယ်ခြင်းသည် မှန်ကန်သော ဘုရားသခင်ကို သိမြင်နားလည်ခြင်းအပေါ် မှီတင်းရပါမည်။ နံဝိညာဉ်နှင့် သစ္စာတရား ရှိရပါမည်။ စိတ်လှုပ်ရှားခံစားမူမရှိသောသစ္စာတရားသည် သေသောခရစ်ယာန် ယုံကြည်မှုနှင့် အတုအယောင်အထင်ကြီးသူများနှင့်ပြည့်နှက်သော(တစ်ဝက်မျှသာ) အသင်းတော်ကြီးမျိုးကိုသာ မွေးထုတ် ပေးသည်။
အခြားတစ်ဘက်နှင့်ပြောလျှင်စိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှုမရှိသောသစ္စာတရားသည်လည်းဟောင်းလောင်း(ဘာမှမရှိ ) သော ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်ခြင်းနှင့် တင်းမာလွန်းသောအတွေးအခေါ်၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကို ငြင်းပယ်သည့် တိမ်ပါးသောလူတွေကို ပျိုးထောင်ပေးတာမျိုးသာ မွေးထုတ်ပေးပါသည်။ သို့သေ်ာလည်း စစ်မှန်သော ကိုးကွယ်ခြင်းသည် နက်ရှိုင်းစွာစိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှုရှိ၍ နက်နဲ၍မှန်ကန်သော ၀ါဒကိုချစ်မြတ်နိုးသောသူများ ထံမှလာတတ်၏။ သစ္စာတရား၌အမြစ်တွယ်သည့် ခိုင်မာသောဘုရားသခင်ကို ချစ်မြတ်နိုးခြင်းသည် သမ္မာ တရားကျသော ကိုးကွယ်ခြင်း၏ အရိုးနှင့် ခြင်ဆီဖြစ်၏။
ထို့ကြောင့် ငါတို့နှလုံးသားများမှန်ကန်ဖို့သည် လွန်စွာအရေးကြီးပေ၏။
နှလုံးသားနှင့် ပတ်သက်၍ ကျမ်းစာကဤအရာများပြောထားပါသည်။ –
“ငါ့သား၊ သင့်နှလုံးသားကို ငါ့အားပေးလော့၊ သင့်မျက်စိတို့သည် ငါသွားသောလမ်းကို ကြည့်မှတ်ပါစေ။” (သုတ္တံ ၂၃း၂၆)
“နှလုံးသည်အသက်ဖြစ်၏၊ အခြေအမြစ်ဖြစ်သောကြောင့် သင့်နှလုံးကို အထူးသဖြင့်စောင့်ရှောက်လော့။” (သုတံ္တ ၄း၂၃)
၂။ သူ၌စူးစမ်းသောနှလုံးနှင့် ယုံကြည်သောနှလုံးသားရှိ၏။
အဓိပ္ပာယ်မရှိဟု အကျိုးအကြောင်းက ဆို၏။
တစ်ကြိမ်လောက်ကြိုးစားကြည့်ပါလို့ နှလုံးသားက တို့ကိုပြောဆို၏။
ကာလက်သည် အဲဂုတ္တုပြည်တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်ခံသော်လည်း ယုံကြည်ခြင်းမပျောက်ဆုံးခဲ့ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲလို့ မိမိကိုယ်ကို မေးကောင်းမေးမိကြပါလိမ့်မည်။ ကောင်းပါပြီ။ သူဖြတ်သန်းသမျှသော စုံစမ်း စစ်ဆေးခြင်းများအလယ် – များစွာသောခက်ခဲမှုများကြားထဲတွင် သူသည်ဘုရားသခင်ကို ဆက်လက် ကြောက်ရွံ့ခြင်းအမှု၌ လျော့နည်းမသွားသောကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ကျနော်ယုံကြည်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ကျွန်ခံဘ၀ အတောအတွင်းသော်၎င်း၊ အဲဂုတ္တုပြည်မှ လွှတ်မြောက်ချိန်တွင်သော်၎င်း၊ သူ့ရဲ့ခါနန်ပြည်စူးစမ်း လေ့လာ ရာ၌သော်၎င်း၊ သူ့ရဲ့အံ့သြဖွယ်စိတ်ဓာတ်နှင့် ဘုရားသခင်ယုံကြည်ခြင်းတည်ကြည်စေခဲ့သည်။
ကျမ်းစာကရှင်းလင်းစွာ ကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြထားသည်မှာ “ယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင်၊ဘုရားသခင်၏ စိတ်တော် နှင့် မတွေ့နိုင်။ အကြောင်းမူကား၊ ဘုရာားသခင်ထံတော်သို့ ချဉ်းကပ်သောသူသည်၊ ဘုရားသခင်ရှိ တော်မူ သည်ကို၎င်း၊ ကိုယ်တော်ကို ရှာသောသူအား အကျိုးပေးတော်မူသည်ကို၎င်း ယုံကြည်ရမည်။” (ဟေဗြဲ၁၁း၆)
သူနှင့်ယောရှုတို့နှစ်ဦး ခါနန်ပြည်ကို စူးစမ်းရာမှပြန်လာသောအခါ ကာလက်ကဘာပြောဆိုခဲ့ပါသလဲ။
“ထာဝရဘုရားသည် ငါ့တို့ကိုနှစ်သက်လျှင် နို့နှင့်ပျားရည်စီးသော ထိုပြည်သို့ငါတို့ကိုဆောင်သွင်း၍ အပိုင်ပေး တော်မူလိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရားကို မပုန်ကန်ကြနှင့်။ သူတို့သည် ငါတို့စားစရာဘို့ဖြစ်ကြ၏ သူတို့၌ အမှီတဟဲ မရှိ၊ ထာဝရဘုရားသည် ငါတို့ဘက်၌ ရှိတော်မူ၏။” (တောလည်ရာ ၁၄း၈-၉)
ထိုစကားသည်ကျွုန်ုပ်၌ တိုက်ခိုက်သောစကားနှင့် ပြည့်နှက်သောယုံကြည်ခြင်း ကဲ့သို့မြည်ဟိန်းသည်။ ၎င်း သည်စစ်သူရဲကြီးနှင့် ဥာဏ်ရှိသူနှစ်ဦးလုံးပြောကြသည့်စကားအမျိုးအစားဖြစ်သည်။
ယောရှုနှင့်ကာလက်တို့၌ရှိသောအလားတူယုံကြည်ခြင်းစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ငါတို့၏ဇာတိရှိငါတို့၏ကိုယ်ပိုင်အပြစ်ရဲ့ တိုက်ပွဲကို ငါတို့သည်ဆန့်ကျင့်တွန်းလှန်ကြ၏။
တိုက်လှန်ခြင်းမရှိဘဲဘယ်အရာမှ သိမ်းယူလို့မရ။ သို့သော်ငါတို့သည်တိုက်ကြသောအခါ ငါတို့မသိမ်းယူနိုင် တာဘာတစ်ခုမှမရှိပေ။ ရန်သူများသည် တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ငါတို့ရှေ့မှောက်တွင်လဲကျကြပါလိမ့် မည်။ ထို့နောက် ငါတို့သည်အဝေးမှ “ပြည်တော်၏အသီးအပွင့်ကို” မြင်ရသည်ထက်သာ၍ နီးကပ်စွာ မြင်တွေ့ရ ပါလိမ့်မည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ၀မ်းမြောက်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့် ကောင်းသောတရား အားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့ လက်ထဲအမိဖမ်းဆုပ်ကာ ထိုအရာတို့ကို မြည်းစမ်းရကြပါသည်။ ကတိတော်ပြည်သည် ငါတို့အဘို့ ဖြစ်၏။
ကာလက်တွင်ဖော်ပြပါအကြောင်းများ ငါတို့တွေ့ရှိပါသည်။ –
အံ့သြဖွယ် ဘုရားနှင့်ဆိုင်သောမျှော်လင့်ချက် – ဘုရားသခင်သည်မိမိ၏ ကတိတော်အပေါ်မှန်ကန်မည်ဟု သူသည် ယုံကြည်သည်။
သမ္မာကျမ်းစာတွင်ဖော်ပြသောကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည့် ဘုရားသည်ကျရှုံးသွားသောလောကကြီးက ဖန်ဆင်း ထားသော ဆန်းပြားသည်ရုပ်တုဆင်းတုမဟုတ်ပေ။ လုံးဝမဟုတ်ပေ။ သမ္မာကျမ်းစာရှိ စစ်မှန်သော ဘုရား သခင်သည် အသက်အရွယ်မရွေး၊ ယဉ်ကျေးမှုမရွေး၊ ၀ိညာဉ်ဆိုင်ရာအယူဝါဒမရွေး ဘ၀အဆင့်တန်း မရွေး၊ ကလေးသူငယ်လိုသူ့ကိုစူးစမ်းကာ သူဘယ်သူဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိဖို့ အလိုရှိတော်မူသောဘုရား ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်ပင် ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့ အရေးကြီးရခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ထိုသတင်း ကောင်း၌ “ထိုသားတော်သည်မမြင်ရသော ဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဍာန်တော်ဖြစ်၏……”(ကောလောသဲ ၁း၁၅) ဟူ၍ပါရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ငါတို့၏ခွဲခွာခြင်း အဆက်ဖြတ်ခြင်းတို့သည် ဤသို့ကြွေးကြော်ခြင်းအားဖြင့် တွေ့ရှိထားသော အဖြေ တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ – “အထက်ကဘုရားသခင်နှင့် ကွာရှင်း၍ဆိုးညစ်သောအကျင့်ကို ကျင့်သဖြင့် စိတ်နှလုံး၌ ရန်သူဖြစ်သောသင်တို့ကို ကိုယ်ခန္စာတော်၌ အသေခံတော်မူသောအားဖြင့် ယခုမိတ်သ ဟာယဖွဲ့ တော်မူ ပြီ။……. သန့်ရှင်းစင်ကြယ်လျက် အပြစ်တင်ခွင့်နှင့် ကင်းလွှတ်လျက်ရှိသော သင်တို့ ကို ရှေ့တော်၌ ဆက်သ မည့်အကြောင်းတည်း” (ကောလောသဲ ၁း၂၁-၂၃)
သို့ဖြစ်၍ယနေ့ဘုရားသခင်၏အစေတော်ခံများဖြစ်ကြအားလျော်စွာ အကယ်စင်စစ်ဤအချက်သည်ယေရှု ခရစ်တော်၏အသင်းတော် တစ်ခုလုံးသို့ သက်ရောက်ပါသဖြင့် ငါတို့၏စိတ်သဘော ထားများတဖန် ပြန်စမ်း စစ်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်းသားဟု တွေးထင်လျှင် ၎င်းသည်ဆန္ဒပြင်းပြမှု အပြည့်နှင့် ၎င်းသည်အပြစ်ကင်းစင်သော လက်ခံခြင်းဖြင့်ကပ်လိုက်ပါလာကြောင်း ငါတို့သိမှတ်ကြ၏။ ထိုသည်ဘုရား သခင်နှင့်သူ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ချဉ်းကပ်ရမည့်ပုံဖြစ်သည်။သားသမီးများသည်အကောင်းဆုံးကို ဘုရား သခင်ထံမှ မျှော်လင့်သကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ကြပါ၏။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်မျှစိတ်ထက်သန်ပါသလဲ။ ကျွန်ုပ်အသက်တာထဲ၌ ဘုရားသခင်သည်အံ့သြဖွယ်သော တန်ခိုးများ သွန်းလောင်းပေးမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ကြိုတင်မျှော်လင့်ထားပါသလား။
ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်သူ့ရဲ့ ကျေးဇူးတော်နှင့် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို သွန်းလောင်းပေးလိမ်မည်ဟု သင့်ကိုကျနော်သေချာပြောနိုင်ပါတယ်။
အံ့သြဖွယ်ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော် – ဘုရားသခင်သည် သစ္စာရှိစွာသူနှင့်အတူ အစဉ်အမြဲရှိမည်ဟု သူသည်ယုံကြည်သည်။
ဘုရားသခင်သည်အစဉ်အမြဲဤလောက၌ သူ့အံ့သြဖွယ်၊ သူ့မျက်မှောက်တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ မြင်တွေ့ ခွင့်ပေးထားပါသည်။ သို့လင့်ကစား၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ၎င်းကိုမကြာခဏဆိုသလို မသိမှတ်ကြပေ။ ဘာကြောင့်လဲ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာရှိဖြစ်ပျက်သောအရာများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခြင်းခံရသဖြင့် ၎င်းတို့အလွန်မှာရှိတဲ့ ဘုရားသခင်ပြုတော်မူသော အရာများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ အားပြပေးသောအရာများကို ကျွနုုပ်တို့မကြည့်ကြပေ။ “သစ်ပင်များရှိရာသစ်တောကို ငါတို့မမြင်တွေ့ကြပေ။”
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် ရှာဖွေနေသောမေးခွန်းတစ်ခုကျွန်ုပ်မေးပါရစေ။ “ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဘယ်ရောက်နေလဲ” ကျနော်ဤသို့မေးရတဲ့အကြောင်းရင်းမှာ “သင့်နှလုံးဘယ်မှာရှိနေသည်ဆိုတာ သင်သိချင်ရင်၊ သင့်စိတ်သွားတဲ့ နေရာကိုကြည့်ပါ” ဟူသောငြင်းပယ်မရသည့်အချက်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်စိတ်သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာ သင့် နှလုံးသားသည် လိုက်သွားပါ၏။
ကျွန်ုပ်တို့အားကျမ်းစာပြောထားသည်မှာ – “ကြွင်းသေးသောစကားဟူမူကား၊ ညီအစ်ကိုတို့၊ သမ္မာတရားနှင့် ဆိုင်သောအကျင့်၊ လျှောက်ပတ်သောအကျင့်၊ ဖြောင့်မတ်သောအကျင့်၊ စင်ကြယ်သောအကျင့်၊ သူတစ်ပါးနှစ် သက်ဖွယ်သောအကျင့်၊ ချီးမွမ်းဖွယ်သောအကျင့် ရှိသမျှတို့ကို၎င်း၊ ပါရမီတစ်ပါးပါး၊ ကောင်းသောသတင်းတစ် ပါးပါးနှင့်ဆိုင်သော အကျင့်တို့ကို၎င်း၊ နှလုံးသွင်းကြလော့” (ဖိလိတ္တိ ၄း၈)။ NIV
ဘ၀သည်အချိန်များစွာတွင် ခက်ခဲမှန်းကျနော်သိမှတ်ပါတယ်။ တစ်နေ့တာအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိမ်ဖန်များစွာ ကြိုးစားရုန်းကန်တတ်ကြပါ၏။ ဘာပဲဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် ခွန်အားပေး တိုက်တွန်းမှု တစ်ခုအဖြစ် ကျနော်ပြောပြချင်သည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦးတည်မှုဟာ “တစ်ရက်တာဖြတ်သန်း ရဖို့လောက်” ထိသာ ကျုံ့သွားခဲ့ရင် ၎င်းအချိန်သည် ကျွနု်ပ်တို့၏ ရှုမြင်ပုံများချဲ့ထွင်ရမည့်အချိန်ဖြစ်ပေသည်။ ထို့သို့ပြုခြင်းအားဖြင့် အံ့သြဖွယ်နှင့်ပြည့်သော ဘ၀ကြွယ်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ခံစားပျော်မွေးနိုင်ပေမည်။
ဘုရားသခင်သည် အဆိုးဝါးဆုံးကာလတွင်ပင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူ၏။ ဘေးကျပ်နဲ့ ကပ်ကာလက ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာကို တုန်ခါစေသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သူအစာ ဘာကြောင့်ကိုမေးတတ်ကြပါ၏။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဖိလိတ္တိ ၂း၁၃ တွင်ကျမ်းစာက ကျွန်ုပ်တို့အားဆိုထားသည်မှာ အကြောင်းမူကား သင် တို့သည်အလိုရှိစေခြင်းငှါ၎င်း၊ အကျင့်ကျင့်စေခြင်းငှါ၎င်း၊ သင်တို့အထဲ၌စေတနာတော်အားဖြင့်ပြုပြင်တော်မူ သောသူကား၊ ဘုရားသခင်ပေတည်း။ – NIV သူသည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အစဉ်အမြဲအတူရှိ၍ ခြေလှမ်းတိုင်းတွင် မစပေးတော်မူလိမ့်မည်။
ကြပ်တည်းသည်ကာလတွင် ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အတူပါရှိကြောင်း ကျွန်ုပ် တို့သတိပြုလာသောအခါ၊ ငိုနေရမည့်အစား ၀မ်းမြောက်ခြင်းနှင့် ရယ်မောနိုင်ပေသည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆို သော်ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်အောင် ကူညီမစမည် အကြောင်း သိကြသောကြောင့်ဖြစ်၏။
ကျနော်ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၊ အောက်မေ့သတိရကြပါ – ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ဘက်၌ရှိ၏ အားလုံးကို ကျနော်ခွန်အားပေး၍ ပြောပြချင်သည်မှာ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ဘက်၌ရှိ၏ ဟူသောစကားဖြစ်ပါတယ်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ကိုယ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားသှူု၌ပျော်မွေ့၍ သှူု့ရဲ့လန်းဆန်းခြင်းကို ရှာတွေ့စေလိုပါ၏။
အံ့သြဖွယ်ဖန်ပေးခြင်း – သူသည်ခါနန်ပြည်၏အသီးအနှံအောင်ခြင်းကို အံ့သြမိသည်။
“ဧရှကောလချိုင့်သို့ရောက်လျှင်၊ အသီးတပြွတ် ပါသောစပျစ်နွယ်ပင်အခက်တစ်ခက်ကို ခုတ်၍လူနှစ် ယောက်တို့ သည် ထမ်းဘိုးနှင့် ထမ်းကြ၏ သလဲသီး၊ သဘောင်္သဖန်းသီးများကိုလည်းဆောင်ခဲ့ကြ၏။” (တောလည်ရာ ၁၃း၂၃)
ကမ္ဘာ့ဂရင်းစံနစ်စံချိန်တင်မှတ်တမ်းများအရ၊ မျက်မှောက်ကာလအကြီးဆုံးသော စပျစ်ခိုင်ကိုချီလီနိုင်ငံက လူတစ်ဦးစိုက်ထားသော စပျစ်ဖြစ်၏ ယင်း၏အလေးချိန်မှာ ၉.၅၂ကီလိုနီးပါးသာရှိ၏။ ဤပမာဏာသည် ကလေးငယ်တစ်ယောက်၏အလေးချိန်မျှဖြစ်၏။ကတိတော်ပြည်မှလူနှစ်ယောက်ထမ်းရသောစပျစ်ခိုင် အကြောင်းကို စိတ်ကူးကြည့်ရာတွင်၊ ၎င်းစပျစ်ခိုင်သည် ၉.၅၂ ကီလိုထက်လေးမည်ကို ပြသနေတယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့နေထိုင်သော ကမ္ဘာမြေကြီးသည်လူတွေရဲ့လောဘနှင့် မွေးရာပါဒုစရိုက်အပြစ်များဖြင့် နေရော အမြှာက်အမြားပျက်ပြားလာသော်လည်း သာယာလှပသောနေရာများစွာရှိနေပါသေး၏ ယောရှုနှင့် ကာလက်တို့သည် ခါနန်ပြည်၏လှပမှုနှင့် အသီးအနှံဖြစ်ထွန်းမှုတွေအားဖြင့် အံ့သြစေခြင်းခံရကြ၏။ တစ်ခြားနည်းဖြင့် ဘုရားသခင်သည်ယုံကြည်သူများအတွက် အသီးအနှံဖြစ်ထွန်းမှုရှိသော ပြည်တော်တစ်ခုရှိ နေကြောင်း ကျနော် ဤနေရာတွင် ပြောပြပါရစေ။ ကျွန်ုပ်တို့အထဲ၌ရှိသော ဘုရားသခင်၏ ကြွယ်ဝခြင်း နှင့်ဖန်ဆင်းပေးခြင်း ဤသို့ဖြစ်၏ – ကိုယ်တော်အား ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားကိုပေးအပ်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသား များ၏ဥယျာဉ် ကြွယ်ဝစွာသီးပွင့်မည်ဖြစ်ကာ၊ ကျွနုုပ်တို့အထဲ၌ကိုယ်တော် မွေးဖွားပေးသော ဖန်ဆင်းခြင်း၌ ကျွန်ုပ်တို့ကို အလွန်အံ့သြသင့်စေပါလိမ့်မည်။
အံ့သြဖွယ်အနားယူခြင်းနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း – ဘုရားသခင်နှင့် ခါနန်ပြည်၌ အနားယူရန်နေရာရှိသေး ကြောင်းသူသိ၏။
ခါနန်ပြည်ကိုမြင်တွေ့ပြီးနောက် ကာလက်က ၎င်းသည်စစ်တိုက်ရသည်အလုပ်မှ၎င်း၊ ချုပ်နှောင်းခြင်းမှာ ထွက်ပြေးနေခြင်းမှ ၎င်းဘုရားသခင်၏ပြည်ထူထောင်ခြင်းနှင့် အနားယူခြင်းအတွက်ပြင်ဆင်ပေးသော ပြည်တော်ဟူ၍ သိမှတ်ပေ၏။ သေချာပါတယ်၊ ရင်ဆိုင်ဖို့လူကောင်ကြီးများသေ်ာလည်းကောင်း၊ ဘုရားသခင်အု ပ်စိုးမှုကို ဖိဆန်သောလူအုပ်စုများသော်၎င်းရှိကြပါ၏- ဒါပေမဲ့ယင်းတို့၏ အလယ်တွင်အနားယူခြင်းနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းရှိပေ၏
သင့်အသက်တာရှူပ်ထွေးပါသလား၊ ၎င်းသည်မနားမရဖြစ်နေပါသလား၊ ၎င်းသည်အပန်းဖြေအနားယူဖို့၊ ပြန်လည်းလန်းဆန်းစေဖို့ လေသစ်ရှုဖို့နေရာများ ဘယ်တော့မှရှာမတွေ့ရလေအောင် အချိန်တိုင်းကျွန်ုပ်တို့ ကို သွေးရှုးစေခဲ့ပါသလား။ အကယ်၍ထိုသို့ဖြစ်နေလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ကြီးမားသော ကလပ်အသင်း ၀င်ဘ၀ (Life member ofavery big Club) ဖြစ်နေကြလို့ ဟုကျနော်ပြောနိုင်ပါတယ်။
တစ်နေ့တာအချိန်များတွင်လုံလောက်သော အချိန်နာရီမရှိဖြစ်ကာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်များအဆုံးမရှိဖြစ်ပုံပေါ် သည်။ ထိုသို့ကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်ကြသော်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ိညာဉ်၌မလျှောက်လှမ်းကြလို့ဟု ယနေ့မိတ်ဆွေ အ့တို့ကိုကျနော်ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ ၎င်းသည်အံ့သြဖွယ်သော ဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါသလား။ သမ္မာကျမ်းချက် များအပေါ် ကျွန်ုပ်ရှင်းလင်းချက်တွင် ကျနော်ဟာ ကွဲပြားဆန့်ကျင်သော သဘောရှိသူလို့ကျနော့်ကို သင်ထင်မိပါသလား။ ကောင်းပြီး။ သင်ကျွန်ုပ်ကို မပထုတ်ခင်ကျနော်ရှင်းပြပါရစေ။ ဂလာတိ ၅း၁၆-၁၈ ဖော်ပြ ပါအတိုင်းကျွနုုပ်တို့ဖတ်ရသည်မှာ ငါပညတ်သည်ကား ၀ိညာဉ်ပကတိအတိုင်းကျင့်ကြလော့။ အကြောင်းမူကား ကတိပကတိနှင့် ၀ိညာဉ်ပကတိသည် တစ်ပါးနှင့်တစ်ပါးဆန့်ကျင်သော အလိုရှိကြ၏။ တစ်ပါးနှင့်တစ်ပါး ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်၍ ယင်းတို့သည် ကျင့်ချင်သောအကျင့်ကို မကျင်နိုင်ကြသို့သော်လည်း ၀ိညာဉ်ပကတိ အလိုသို့ ပညတ်တရားနှင့် လွတ်ကြ၏။
ကျွန်ုပ်တို့ထဲ၌အလုပ်လုပ်နေသော သဘာဝဥပဒေတစ်ခုရှိ၏ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရသော သူများဖြစ်သည့်တိုင်၊ ရှင်ပေါလုက ကျွန်ုပ်တို့အားပြောထားသည်မှာ – သခင်ဘုရား၌ အသက်တာရဲ့ နူးညံသိမ်း မွေ့သော ၀ိညာဉ်ရေးရာစည်းဝါးများနှင့် ဆန့်ကျင်သော စစ်ပွဲများရှိ၏။ဟုဆို၏ ၎င်းကဘာကို တောင်းဆိုထား ပါသနည်း။ ၎င်းတောင်းဆိုထားသည်မှာ၊ – ငါတို့သည် မိမိကိုယ်ကို သူတစ်ပါးနှင့် နှိုင်းယှဉ်ဖို့ဖြစ်၏ – ကာလက် က လူကောင်ကြီးများကိုသော်၎င်း၊ လူအုပ်စုကြီးတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ကြွေးကြော်ထားသည်မှာ ……သူတို့၏ အကာအကွယ်သည် သူတို့ထံမှ ထွက်ခွာခဲ့ပါပြီ သို့ဖြစ်၍ထာဝရဘုရားသည် ငါတို့နှင့်အတူရှိ၏။ (တောလည်ရာ ၁၄) ဟူ၍ ဖြစ်၏ သို့ဖြစ်ပါ၍ ယနေ့ကျနော်တို့အားလုံးကို ကျနော့်အနေဖြင့်ပြောလိုမှာ ၎င်း (ကာလက်ပြောသောစကား)သည် ကျနော်တို့အတွက် မခြားပေ။
ကျနော်တို့သည်ဆင်းရဲမွဲတေခြင်းနေရာတွင် နေထိုင်ဖို့ချုပ်နှောင်းခံမဟုတ်ကြပေ။ ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ် တို့အားမစွမ်းဆောင်နိုင်သောသူများဖြစ်အောင် မစီရင်ထားပေ။ ယနေ့ငါတို့ဘ၀များသို့ ကပ်တွယ်နေသော ထိုအရာများနှင့်ငါတို့ခြေချင်းဝတ်တွင် သံကြိုးသဖွယ်ချည်နှောင်ထားသော အရာများကိုငါတို့သည် ကာလက် ကဲ့သို့ “သူတို့၏အကာအကွယ်သည် သူတို့ထံမှ ထွက်ခွာခဲ့ပါပြီ၊ သို့ဖြစ်၍ထာဝရဘုရားသည် ငါတို့နှင့်အတူရှိ ၏” ဟု ကြွေးကြော်နိုင်ပေသည်။
ဤလဲကျနေသောကမ္ဘာကြီးရှိ ကွဲအက်ပြီးသောလူတွေ၏ဘ၀များကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ သူလုပ်ဆောင်နေ သောအလုပ်တွင်သူနှင့် လက်တွဲဖို့ ငါတို့အတွက်ဘုရားသခင်ချဲ့ထွင်ပေးသောအခွင့်အရေးများကို ငါတို့ သိမှတ်ကြဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ ငါတို့အသက်တာနှင့် တစ်ပါးသူများအသက်တာထဲရှိ ပြဿနာများထက် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိုခြင်းကိုသာ၍ ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ဖို့ လိုအပ်ပေသည်။
ယေရှုကငါတို့အားပြောထားသည်မှာ”၀န်လေး၍ပင်ပန်းသောသူအပေါင်းတို့ငါထံသို့လာကြလော့၊ ငါသည် ချမ်းသာပေမည်” (မဿဲ ၁၁း၂၈)။
ဟေဗြဲသြ၀ါဒစာအုပ်ရေးသားသူက ငါတို့အားထပ်လောင်းပြောထားသည်မှာ – ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်၏ လူတို့အဘို့အလိုငှါ ငြိမ်ဝပ်ခြင်း၊ ချမ်းသာတမျိုးသည်ကျန်ရစ်သေး၏ ဘုရားသခင်သည်မိမိအမူအရာတို့ကို ပြီးစီး၍ ငြိမ်ဝပ်စွာ နေတော်မူသည်နည်းတူ ထိုချမ်းသာထဲသို့ဝင်ရသော သူသည်လည်း မိမိအမှုအရာတို့ကို ပြီးစီး၍ ငြိမ်ဝပ်စွာနေရ၏။ ဟေဗြဲ ၄း၉-၁၀။ ကြည့်လိုက်ပါ၊ ယေရှုကဲ့သို့ဝိညာဉ်တော်၌ ကျွန်ုပ်တို့လျှောက်လှမ်း သွားသောအခါ ကျွန်ပ်တို့သည်ဖိစီးခြင်းရှိလိမ့်မည်မဟုတ်၊ သို့ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်တို့သည် ခမည်းတော်ဘုရား၏ အလိုတော်နှင့် ဆန္ဒများကိုသိကျွမ်းခြင်းအရာ၌ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သော လျှောက်လှမ်းခြင်းရှိရပါလိမ့်မည်။ ထိုအချက်သည် အဓိကအကျဆုံးဖြစ်၍ အသင်းအဖွဲ့၊ ပြင်းပြသောဆန္ဒများနှင့် အခြားသောသူများ၏ ထောက်ခံ မှုတွေဟာ အဓိကမကျပေ။
အံ့သြဖွယ်ခင်မင်ရင်းနှီးမှု – သူသည်ဘ၀တလျှောက်ဘုရားသခင်နှင့် သူတစ်ပါးတို့နဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးအောင် ကြိုးစားခဲ့သည်။
ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကို ချစ်ခင်တွယ်တာမှု၊ သက်ဆိုင်မှု၊ နီးစပ်မှုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးအကြား ယုံကြည်မှုဟူ၍အနက် ဖွင့်ဆိုထားသည်။ အသင်းအဖွဲ့အားလုံးတွင် ခင်မင်ရင်းနှီးမှုဟာ တစ်ဦးတစ်ယောက်စီ၏ တသက်တာ တလျှောက်မရှိမဖြစ်ဆက်နွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကို ကျန်းမာသောလူသာကြီးထွားမှုဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် ဘ၀မျှော်လင့်စောင့်စားခြင်းမှား ပြင်ဆင်ရးတို့၌ အရေးကြီးသောအပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်မှတ်ယူရသည်။
ခင်မင်ရင်းနှီးမှုဆိုတာအဖော်မဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်သည်နည်းတူ ခရစ်ယာန်များယုံကြည်ခြင်းနဲ့ လျှောက်လှမ်းခြင်း လည်းတူဖို့ဖြစ်၏ ကျနော်မှန်ပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ ထိုအရာမှန်တယ်ဆိုရင်၊ ဘာကြောင့်ထိုသို့ဖြစ်ရသနည်း။ ခရစ်ယာန်ရော ခရစ်ယာန်မဟုတ်သူရော နှစ်ဦးစလုံး၌ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်လေ့ရှိသည့် ပြဿနာများမှာ စိုးရိမ် ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ယောကျာ်းချင်း/မိန်းမချင်းလိင်တူဆက်ဆံသူများဖြစ်ကြောင့် ဖွင့်ဟခြင်းရှိမှာကို စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့ခြင်း။
ပညာသင်ဆုရသူကျောင်းသားဖြစ်ပြီး ဘာမှမသိမှန်းတွေ့ရှိသည်ကို စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့ခြင်း
မေနေဂျာဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်မှန်းတွေ့ရှိမည်ကို စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့ခြင်း
အဘယ်ကြောင့်ဤသို့ဖြစ်ရသနည်း၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တခြားသူများကိုသော်၎င်း သူတို့ကိုယ်တိုင်၏ ထင်မြင်ချက်များကိုသေ်ာ၎င်း ကြောက်ရွံ့ကြသောကြောင့် ဖြစ်၏။
ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်အပေါ် ကျနော့်၏ ချစ်ခြင်းက ဘယ်လိုလဲ။
ကျွန်ုပ်အားဘုရားသခင်ပေးထားသော အသင်းတော်ကို ကျွမ်းကျင်စွာကျနော်စီမံကွက်ကဲပါသလား။
ဤအရာများကပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကို စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်ဖိစီးမှုတို့နဲ့အရှုးဖြစ်နေစေနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ဆောင်ရွက်တင်ဆက်မှုအခြေပြုခေါင်းဆောင်မှု၊ ထိန်းချုပ်မှုအခြေပြုသော ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်အကျိုးဆက်များ နှင့်တခြားသူများ၏ထောက်ခံမှုများအပေါ်အခြေပြုသောခရစ်ယာန်လျှောက်လှမ်းခြင်း တစ်ခုဆီသို့ ပို့ဆောင် တတ်ကြ၏။
ဤအရာကိုကျနော်တို့ဘယ်လိုတုန့်ပြန်ဆန့်ကျင်ကြသလဲ။ ကာလက်ရဲ့အသက်တာမှာတော့၊ ယောရှုကိုအနီး ကပ်သူငယ်ချင်းအဖြစ်ရှိနေကြောင်းတွေ့ရသည်။ ကျနော်တို့လည်းအလားတူလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ အတွင်း ပိုင်းမှာတော့ ကျွန်ုပ်တို့က သေးသိမ်သောအတွေးအခေါ်မျှသာဟုပြောမိပါလိမ့်မည်။ လုံးဝကိုမဟုတ်ပါဘူး၊ ကျနော်ကိုယ်တိုင်ထို့သို့အားနည်းချက်ရှိတဲ့အရာမျိုးမြင်သာအောင် ထုတ်ပြမည်မဟုတ်ပါ။ ဤကဲ့သို့အသက် ရှင်သော်ကျနော်တို့သည် စက်ဆုပ်ရွံ့ရှာဖွယ်အကောင်းဆုံးလူသားဖြစ်ကြလိမ့်မည်။
Augustin က သူငယ်ချင်း/မိတ်ဆွေဆိုတာဘာလဲ၊ – မိတ်ဆွေဆိုတာခန္စာကိုယ် နှစ်ခုထဲစိတ်ဝိညာဉ်တစ်ခု တည်းရှိခြင်း ဟုဆိုသည်။
Muhammad Ali က ခင်မင်ရင်းနှီးမှု/ မိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်းဆိုတာ လောကကြီးထဲတွင်ရှင်းပြရအခက်ဆုံး အရာဖြစ် ၏၎င်းသည်။ ကျောင်းတွင်သင်ယူသောတစ်စုံတစ်ခုမဟုတ်၊ သို့သေ်ာ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကို မသင်ယူခဲ့ရင်၊ ဘာကိုမှသင်သည် သင်ယူရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုဆိုထားပါသည်။
အမေရိကန်သတင်းစာနှင့် ရီဒီယိုအတင်းဖျင်းဝေဖန်သုံးသပ်သူဖြစ်သော Walter Winchell က စစ်မှန်သော သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်သည် တစ်လောကလုံးကိုယ့်ကို စွန့်ခွာသည့်အချိန်မှာ ကိုယ့်ဆီဝင်လာသော သူတစ်ယောက်ဖြစ်၏ ဟုမိန့်ခဲ့သည်။
ကျနော်မှာနှစ်ပေါင်း ၅၀ နီးပါးရင်းနှီးလာသော သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သူ့ဆီကိုကျနော်စကားပြော သင့်သလောက်မပြောဖြစ်ခဲ့ဘူး၊ တွေ့ဆုံသင့်သလောက်လည်းမတွေ့ဆုံဖြစ်ကြဘူး၊ ဒါပေမဲ့သူသည်ကျနော့် အတွက်ရှိနေပြီးကျနော်လည်း သူ့အတွက်ရှိနေတယ်ဆိုတာ ကျနော်သိနားလည်ပါ၏။
ဤခင်မင်ရင်းနှီးမှု/ မိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်းသည် ကျနော်အသက်တာ၌ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်လက်ဆောင် တစ်ခုအဖြစ် ကျနော်မြင်ပါတယ်။ သို့ဖြစ်၍သူသည် တကယ်ပဲတခြားသူများအဝေးထွက်သွားကြသည့် အချိန် မှာကျနော့်အနားမှာ ကျန်ရစ်သူဖြစ်ပါ၏။
မတွေ့ဆုံဖြစ်သော ၁၈ နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီဖြစ်သော အခြားသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကျနော့်မှာရှိတယ်။ သို့သော်ငြားလည်း၊ ကျွန်ုပ်ဘ၀၌မှောင်မိုက်ချိန်ကျရောက်၍ရှိသမျှပျောက်ဆုံးကာ၊ ကျနော်အမှန်ပင်အရာ အားလုံးအဆုံးသတ်ရောက်လုနီးချိန်တွင်- ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်း (သို့) တရားစီရင်ခြင်းမရှိဘဲ ကျနော့်အတွက်သူ ရှိနေတယ်လို့ ကျနော်သိနေပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ၀ထဲတွင် အံ့သြဖွယ်ခင်မင်ရင်းနှီးမှုရှာတွေ့ဖို့ဟာ အလွန်ပင်အရေးကြီးလှပါတယ်။ ရင်းနှီးကျွမ်း ၀င်ခြင်းလိုက်လံကောက်ယူဖို့ ကျနော်မဆိုလိုပေ – သူတို့သည်ယနေ့ဒီမှာရှိ၍ မနက်ဖြန်ထွက်သွားတတ်ကြ၏ ထို့သို့မျိုးကျနော်မဆိုလိုပါ။ ဒါဝိဒ်နှင့် ယောနသန်ပုံပြင်ထဲက ဖြစ်ကြသည်အတိုင်း သင့်ဘ၀၌ယောနသန်ပွား များပါစေလို့ ကျနော်ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
သင့်ဘ၀ထဲလူတွေကို ဖိတ်ခေါ်ပါ။ ကျနော်တို့သည်သဘာဝအရထိရှလွယ်သောသူများဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ လူတွေကိုအဝေးတွန်းပို့တာမျိုးမပြုမိစေနှင့်။ ထို့သို့ကျနော်တို့လုပ်ဆောင်ရာတွင် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ် တို့ကို ဦးဆောင်၍ ကာကွယ်ပေးမည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ကိုးစားပါ၏။ သူုတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကွဲရှနေခြင်း များမြင်ရမည်ကို စိုးရိမ်နေသော်၊ ထိုအတွက်စိတ်မပူပါနှင့်။ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်သည်ကွဲရှ၊ ကျိုးပဲ့သော သူများကိုအတူတကွယူဆောင်လာ၍ ခိုင်မာသောခင်မင်ရင်းနှီးမှုတည်ဆောက်စေနိုင်ကြောင်းကို၎င်း၊ ကျနော် တို့အားလုံးသည်တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်း၌ ကွဲရှနေကြသူများဖြစ်ကြောင်းကို၎င်း စိတ်ထဲသိမှတ်ထားပါ။
ဘုရားသခင်သည် ကျနော်တို့လိုချင်သောလူတွေကို ကျွန်ုပ်တို့အတွက်မပေးတတ်ပေ။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသော လူများမှာ- ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီမစဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ကို နာကျင်စေဖို့၊ ကျွန်ုပ်တို့ကို စွန့်ခွာ ဖို့၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ကိုပို၍ အဓိပ္ပာယ်ရှိသောသူဖြစ်စေမည့် ကျနော်တို့လိုအပ်သောသူများဖြစ်ပါ သည်။
အံ့သြဖွယ် အပြစ်လွှတ်ခြင်း – ကာလက်သည်အမှားလုပ်မိခဲ့သော်လည်း ဘုရားသခင်က ခွင့်လွှတ်သည်ကို သိတော်မူ၏။
အပြစ်လွတ်ခြင်းသည် အသိဥာဏ်တစ်ခုအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းရှိ၍ သင့်ကိုနာကျင်ထိခိုက်စေသော ပုဂ္ဂိုလ် (သို့) အုပ်စုတစ်ခုဆီသို့ သင့်ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံထိုက်ခြင်းရှိ မရှိမဆိုင်ဘဲ ခါးသီးသောခံစားချက် (သို့) ဂလက်စားချေခြင်းခံစားနေခြင်းများလို့ ဖြေလွှတ်ပေးရန် သေချာချင့်ချိန်ထားသော ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်၏။
ကာလက်၏ယုံကြည်ခြင်းခရီးလမ်းတွင်၊ သူသည်လူအနည်းငယ်တို့အပေါ် စိတ်ပျက်မိခဲ့သည်မှာ ယုံမှားစရာမရှိ ပေ။ သို့ဖြစ်၍သူသည်အနည်းငယ်ဒေါသထွက်စရာများရှိကာ၊ တစ်ချို့သောအချိန်များတွင် အနည်းငယ်ပြိုင် ဘက်ရန်သူများရှိတတ်ပေလိမ့်မည်။ အပြစ်ကိုကျုံ့စေသော စရိုက်အကျင့်ရှိသော လူစားမျိုးမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ထို့သို့ရှောင်လွှဲတတ်သူလည်းမဟုတ်ပေ။ သို့သော်ငြားလည်း ဘုရားသခင်၏ချီးကျူးဂုဏ်ပြုချီးမွမ်းခြင်းကို အမိရဖို့သူသည် သူတစ်ပါးကိုအပြစ်လွတ်ဖို့နှင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံဖြစ်ရေးနှစ်မျိုးသင်ယူခံရပါသည်။
လူသားများ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာအမြောက်အများရှိ၏။- ကိုယ်ချင်းစာတရား၌မြင့်မြတ်ခြင်းမြင်တွေ့ရ၏စာ နာခြင်း၌ လှပခြင်းတရားရှိ၏ သို့သော်ခွင့်လွှတ်းခြင်း၌ ကျေးဇူးတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရ၏။ ကျေးဇူး တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာ၌ ခရစ်တော်၏ဆက်လက်စီးဆင်းနေသောလုပ်ဆောင်မှု အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်ပေသည်။
ကျနော်တို့သည်သူတစ်ပါးကို ခွင့်လွှတ်ဖို့နှင့် ခွင့်လွတ်ခြင်းတရားလက်ခံရရှိဖို့ ခက်ခဲနေသော်၊ အပြစ်အလုံးစုံ အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်လွတ်ပေးသည်ကို သတိရပါ။ ချိန်တိုင်းမှာ ကိုယ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အား အဘယ်မျှလောက်ခွင့်လွတ်ထားသည်ကိုသတိပေးဖို့ဘုရားသခင်ထံတောင်းလျှောက်ဖို့လိုအပ်ပြီး၊ ထို့နောက် မိမိကိုယ်ကိုသော်၎င်း တစ်ခြားသူများကိုသော်၎င်း ခွင့်လွတ်ပေးဖို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျေးဇူးတင်ခြင်းအား လှုံ့ဆော် ပေးစေရမည်။
အံ့သြဖွယ်ကျေးဇူးတင်ခြင်း – သူသည်ဘုရားသခင်ထံ ကျေးဇူးတင်ခြင်းရသတစ်ခုနှင့် အစဉ်ပြည့်ဝသော သူဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်တတ်သောသူ ဖြစ်သင့်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်တတ်ခြင်းသည် အောင် မြင်မှုအဆင့်တိုင်းဘက်သို့ သော့ချက်စိတ်သဘောထားဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ရှိသမျှအတွက် ကျေးဇူး တင်တတ်ခြင်းသည် အစဉ်အမြဲပို၍ကြီးမားသော ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းဘက်ဆီသို့ ဦးဆောင်လမ်းပြပေး လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်အသင်းတော်ထဲနှင့် ပြင်ပကလူများစွာတို့သည် သူတို့၏စိတ်များကို သူတို့ရှိထားသော အရာများအပေါ် ကျေးဇူးတင်ခြင်းထက် သူတို့မရှိသောအရာများအပေါ်ကိုဘဲ ဦးတည်ဖို့အာရုံပြု တတ်ကြ သည်။ ကာလက်၏ ကတိတော်ပြည်ကိုဝင်စားခြင်းကို ကျနော်တို့ကြည့်ရင် သူသည်ကျေးဇူးတင်ခြင်းနှင့် မပြည့်ဝဘူးလို့မှန်းဆခြင်းသည်ရှုးမိုက်ရာကျပေလိမ်မည်။ လူယောက်ျား၊ မိန်းမ၊ လေ၀ိအမျိုးသား၊ လေ၀ိအမျိုး သမီးများ၊ လူငယ်လူရွယ်များနှင့် မျိုးစပ်လူစုများအပါအ၀င် လူပေါင်း ၁၀၇၈၀၀၀ တို့သည် နှစ်ပေါင်း ၄၀ တောလည်ရာက သေဆုံးကြသည်ဟု ထင်မှတ်ရပါသည်။ ထို့သို့ဖြစ်သည်တိုင်သူ(ကာလက်)သည် ကျေးဇူး တင်တတ်ဆဲဖြစ်၏။
အလားတူပင်၊ ကျနော်တို့သည်အခြေအနေတိုင်း၌ ကျေးဇူးတင်တတ်ဖို့သင်ယူသင့်ပါသည်။ ထို့သို့ကျနော် တို့လုပ်တိုင်းနိမိတ်လက္ခဏာများဖြစ်ပျက်စမြဲပင်။ ရှင်ပေါလုနှင့် သိလတို့နှင့် နှစ်ဦးကို အောက်မေ့သတိရပါ။ သူတို့သည် အကျဉ်းချခံရတာတင်မက သူတို့ခြေထောက်များသံကြိုးချည်ခံထားရသော်လည်း သီချင်းဆိုပြီး ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြ၏။ သို့ဖြစ်၍ဘာဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသလဲ။ မြေငလျင်လှုပ်၍ သူတို့ချည်နှောင်ခြင်းကြိုးများ ပျက်ထွက်ရှား၏။ (တမန် ၁၆း၁၆-၄၀)
ယနေ့တွင်လည်းအချို့တို့သည် အကျပ်တည်းအချို့(သို့) ချည်နှောင်ခြင်းများထဲ ကျရောက်နေနိုင်ပါတယ်။ – ထိုသို့ဖြစ်နေလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကျေးဇူးတင်ရှိခြင်းအလယ်တွင် အတူပါရှိသော ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေများထဲသို့ မြေငလျင်လှုပ်ခတ်စေကာ လွတ်မြောက်ခြင်းနှင့် ၀ိညာဉ်များကယ်တင်ခြင်း များယူဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျနော်သေချာပြောနိုင်ပါ၏။
အံ့သြဖွယ်ကြွယ်ဝသောအသက်တာ –သူရှေ့မှောက်တွင်တွေ့ရှိရမည့် အံ့အားသင့်ဖွယ် ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်း ရှိသည်ကို သူသိ၏
ယေရှုက “သူခိုးသည်ခိုးခြင်း၊ သတ်ခြင်းဖျက်ဆီးခြင်းငှါသာ လာတတ်၏ ငါမူကား၊ သိုးတို့သည် အသက်လွတ်ရုံ မျှမကအထူးသဖြင့် အသက်နှင့်ပြည့်စုံ (ကြွယ်ဝ)စေခြင်းငှါလာသတည်း။” (ယောဟန် ၁၀း၁၀) ဟုမိန့်တော်မူ၏။
ကာလက်သည်စပျစ်သီးများကိုကြည့်တဲ့အခါ၊ ၎င်းတို့၏အနံအရသာရှိလှသောချိုသောအရသာသည် သူသွား ကြားထဲစိမ့်ဝင်ပြီး သူ့ပါးစပ်သည်စိုစွတ်စေမည့်အတွေးမျိုးရှိမည်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ ၎င်းအပြင်ထပ် လောင်း၍ နို့နှင့် ပျားရည်စီးသောပြည်ဟူ၍ ဖွင့်ပြထားသည်ကိုလည်း သူမြင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ကာသူတို့အားလုံး အတွက်ဘုရားသခင်၏ပြည်တော်၌ ပျော်မွေ့စရာ လုံလောက်၍ စုံလင်သောကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်း ရှိသည်ကို လည်း သူသည်သိမှတ်စွဲလမ်းလေ၏။
တစ်ခါတစ်လေယေရှု၌ကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ဆိုင်ထားသော ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကို မေ့လျော့ရာ၌ကျနော်တို့အပြစ်ရှိ ကြပါသလား။ ကျနော်တို့သည်သတိမထားမိလျှင်အဆုံးစွဲပြီးသော (ပျောက်သော) သားပုံပြင်ထဲက သားကြီး လိုမျိုးဖြစ်တတ်သည်။ ခမည်းတော်ပိုင်ဆိုင်သမျှကို ကျနော်တို့ပျော်မွေ့ခွင့်ရှိသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့အားအမှန် ပင်လွတ်လပ်စွာ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကို ပေးထားရဲ့သားနှင့် ၎င်းကိုပိုင်ဆိုင်ရဖို့လိုသည်ဟု ထင်တတ်ကြသေး၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဥယျာဉ်ကိုပိုင်သောသူများဖြစ်ကြ၏အငှါးအလုပ်သမားများ မဟုတ်ကြကြောင့် သတိရပါ။
သင်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်ငါတို့၏စိတ်ကူးများအလွန်များစွာသာ၍ စွမ်းဆောင်နိုင်သော ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်ပိုင်ဆိုင်ကြ ၏။ ကျနော်သည်အသက်၆၇ နှစ်ကျော်သွားပြီဖြစ်သော်လည်း၊ ကျနော်ရှေ့မှာရှိနေသော ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်း ကိုရှာတွေ့ဖို့ဆန္ဒပြင်းပြနေဆဲပင်ဖြစ်၏။ ကျနော်မှာကျယ်ပြန့်၍ ကြီးမားသောအိပ်မက်ရှိနေဆဲ၊ ဘုရားသခင်၌ ကျွန်ုပ်၏ပြင်းပြသောစိတ်ဆန္ဒများအားဖြင့် ကျွန်ုပ်ကိုဖမ်းစားနေဆဲဖြစ်မှန်းကျနော်ကိုယ်ကျနော်တွေမြင်ပါ၏။
ယခုတွင်ကျနော်သည်အသက်ရွယ် အိုမင်းခြင်းတောင်ကြီးကို ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ကျနော့်ဦးခေါင်းပေါ်မှာ ဆံပင်ဖြူအသစ်တွေကျနော်မြင်နေရပြီး၊ အရင်ဘယ်တုန်းကမှ မခံစားဖူးတဲ့၊ ကိုက်ခဲခြင်းဝေဒနာတွေကျနော် ကိုယ်ခန္စာပေါ်ခံစားနေရပါ၏။ မနေ့တုန်းကကျနော်သည် ၁၇ နှစ်သားအရွယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံပေါ်သည်။ (အသက် ကြီးလာတာ ခဏလိုခံစားသည်)။ ထို့သို့ဖြစ်သည့်တိုင်၊ ကောင်းသောအိုမင်းခြင်း ရှုပါရုံတစ်ခုကျနော်မှာ ရှိနေဆဲပင်ဖြစ်၏။
ကျနော်ကိုယ်တိုင်အပေါ်သော်၎င်း၊ သင်တို့အပေါ်တွင်သော်၎င်း ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာစကားကို ကျနော်ပြော ဆိုပါ၏။ –
ဖြောင့်မတ်သောသူသည် စွန်ပလွံပင်ကဲ့သို့ ပွင့်လန်း၍လေဗနုန်တောင်ပေါ်မှာ အာရစ်ပင်ကဲ့သို့ ကြီးပွား လိမ့်မည် ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်၌စိုက်ပျိုးသော သူတို့သည် ငါတို့ဘုရားသခင်၏ တန်တိုင်း တော်တွင် ပွင့်လန်းကြလိမ့်မည်။ အသက်ကြီးသောကာလတွင်ပင်အသီးကို သီး၍ကြွယ်ဝစိမ်းလန်းကြလိမ့်မည်။ ထို့သို့သောအားဖြင့် ငါ၏ကျောက် ထာဝရဘုရားသည်ဖြောင့်မတ်တော်မူ၍၊ မတရားသောအမှုနှင့် ကင်းလွှတ် တော်မူသည်ဟု ထင်ရှားလိမ့်သတည်း။ ဆာလံ ၉၂း၁၂-၁၅
ကျနော့်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ သင်တို့ကိုယ်တိုင်တဖန် အိမ်မက်ဆက်မက်ဖို့နှင့် ထိုအိပ်မက်များအမှန်တကယ် ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် ထောက်မပေးရေးလုပ်ဆောင်ဖို့ စွန့်စားဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါ။ သင့်လမ်းခရီးတွင် ရပ်တည်နေသော အတားအဆီးများနှင့် သင့်အသက်တာနှင့် နယ်မြေထဲနေထိုင်ခွင့်ပေးထားသော လက်ကျန် လူကောင်ကြီးများကို ဖယ်ရှားပေးဖို့ ဘုရားသခင်ထံတောင်းလျှောက်ပါ။
ဤတောင်ကိုအကျွန်ုပ်အားပေးလော့ ဟုလတ်ဆက်သော ကြွေးကြော်မှုပြုပါ။
ထုိရှုပါရုံသည် ချိန်းချက်သောအချိန်နှင့်ဆိုင်၍ အမှုကုန်ရသော ကာလကိုဆိုလို၏။ မုသာနှင့်ကင်းလွှတ်၏ဆိုင်း သော်လည်း မြှော်လင့်လော့။ နောက်မကျဘဲ ဧကန်အမှန် ရောက်လိမ့်မည်။ (ဟဗက္ကုတ် ၂း၃)
ကာလက်သည်တစ်မနက်ခင်းသာ နူးထ၍ကျွနုုပ်တို့မြင်တွေ့သမျှသောထူးခြားသည် လက္ခဏာများသူဆီသို့ အကုန်အစင်ရောက်လာသည်မဟုတ်။ လုံးဝမဟုတ်ရပါ။ ဘုရားသခင်က “သူရဲကောင်းများ” ဟုကြော်ငြာသော ယုံကြည်ခြင်းရှိသော လူယောကျာ်းနှင့် လူမိန်းမများ အလားတူ ကာလက်သည်ဤထူးခြားသော လက္ခဏာများ ကို တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစေ၍ ရင့်ကျက်စေပါသည်။
ဤနေရာတွင်ကျနော်တို့အားလုံးအတွက် လုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့တစ်စုံတစ်ခုရှိရပါမည်။ ယင်းမှာသီးခံခြင်းဖြစ် သည်။ ချက်ချင်းပင်ကျေနပ်အားရမူပေါ်သော ကမ္ဘာတစ်ခု(နေရာတစ်ခု) ပိုင်ဆိုင်ဖို့ရန် သီးခံဖို့နှင့် ဘုရား သခင်အား စောင့်စားဖို့ဆိုတာ အလွန်ပင်ခက်ခဲတတ်ပြီး၊ အချိန်တော်တော်များများတွင်လည်း စိတ်ပျက် အားလျော့စေတတ်၏။ သို့သော်ငြားလည်း စစ်မှန်သောသီးခံခြင်းသဘောကို ကာလက်အသက်တာမှ ကျနော် တို့သင်ယူနိုင်ပါတယ်။
ယောရှုနှင့်အတူကာလက်တို့နှစ်ဦးသာ ကတိတော်ပြည်ကိုဝင်စားဖို့ ဘုရားသခင်မိန့်မှာထားသည်ကို သိမှတ် ပါ။ သို့သော်လည်း အချိ်န်ကတော့ နောက်တစ်ပတ်၊ နောက်တစ်လ(သို့) နောက်တစ်နှစ် မဟုတ်ခဲ့ပေ။ နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကုန်ဆုံး၍ လက်ရှိမျိုးဆက်များ တောထဲ၌အကုန်သေဆုံးရသည့်အချိန်ထိ သူ(ကာလက်) အနေ ဖြင့် စောင့်ဆိုင်းဖို့လိုအပ်ပေသည်။
ဘုရားသခင်ကကတိပေး၏ ကာလက်က ၄၅ နှစ်စောင့်စားခဲ့ရ၏ ကာလက်စိတ်ထဲဖြတ်သန်းလာမည့် အတွေး များကိုစိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ပါ။
ပရိသတ်ကြားထဲကမတ်တပ်ထ၍ဤလူတွေရှေ့မှာ ကိုယ်တော်ရဲ့ကိုယ်စားပြုပေးတာလုံလောက်တယ် မဟုတ်သလော့။
ဤသို့သောမေးခွန်းမျိုး ၄၅ နှစ်ပတ်လုံးဆက်တိုက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ သူသည်ထာဝရဘုရားအားသီးခံခြင်း စောင့်စားနေခြင်းက ကာလက်အားအခြားသော သူများမှသီးသန့်လူဖြစ်သည်။ သူသည်လူသားတစ်ဦးဖြစ်သည့်အားလျော်စွာသူစိတ်ထဲမှာ သံသယစိတ်လည်း ၀င်လာနိုင်ပါတယ်။ သို့သေ်ာငြားလည်းထိုအရာ သူ့အားဘုရား၏လုပ်ငန်းအပေါ် ယုံကြည်ခြင်းအရာမှ မရပ်တန့်စေခဲ့ပေ။
အလားတူသီးခံတတ်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုလည်း ခေါ်တော်မူ၏ “ထာဝရဘုရားရှေ့မှငြိမ်ဝပ်စွာနေ၍ ကိုယ်တော်ကို ငံ့လင်လော့။ မိမိအမှု၌ အောင်တတ်သောသူ၊ မကောင်းသောအကြံအစည်းတို့ကို ပြီးစီးစေသောသူ၏ အကြောင်းကြောင့်စိတ်မပူနှင့်။ အမျက်မထွက်စေနှင့်။ ဒေါသစိတ်ကိုစွန့်ပယ်လော့။ ပြစ်မှားစေခြင်းငှါ တိုက် တွန်းတတ်သောစိတ်မရှိစေနှင့်။ ပြစ်မှားသောသူတို့သည် ပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရားကို မြှော်လင့်သောသူုတို့မူကား၊ ပြည်တေ်ာကိုအမွေခံရကြလိမ့်မည်။” (ဆာလံ ၃၇း၇-၉)
ရှင်မဿဲ ၂၄း၁၃ တွင်ကျနော်တို့ဖတ်ရသည်မှာ အကြင်သူသည်အဆုံးတိုင်အောင် တည်ကြည်၏ထိုသူသည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။ အကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည် နယ်နိမိတ်မျဉ်းပြီးဆုံးသည်ထိ ဆက်သွား နိုင်ဖို့စွမ်းဆောင်နိုင်သော သီးခံသောယုံကြည်ခြင်းကို ငါတို့အားပေးတော်မူမည်ဖြစ်၏ သို့သော်ညီတူညီမျှစွာ ဖြင့်ကိုယ်တေ်ာသည်ငါတို့၏ခရီးလမ်းတွင်လည်း ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ပေးပါလိမ့်မည်။
ကိုယ်ကြီးသောလူအမျိုးအနွယ်၊ အာနကအမျိုးအနွယ်ဖြစ်၍၊ အလွန်ကြီးမားသောသူတို့ကိုလည်း မြင်ခဲ့ကြပြီ။ သူုတို့ရှေ့မှာငါတို့သည်ကိုယ်ထင်သည့်အတိုင်း နှံကောင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ သူတို့အထင်အတိုင်းလည်း ထို့သို့ ဖြစ်ကြ၏……(တောလည်ရာ ၁၃း၃၃)
အချိန်တစ်ခဏအတွက်စစ်သူရဲကြီးများနှင့် လူကောင်ကြီးများအကြောင်း အတူတကွပြောကြပါစို့လား။
ကာလက်၊ ယောရှုနှင့်ဒါဝိဒ်တို့သည် လူကောင်ကြီးသက်ဖြတ်သူတို့သည် သိထားပြီးဖြစ်၏ – ဒါပေမဲ့ယနေ့ ကျနော်ပြောပြလိုသည်မှာ ထိုလူကောင်ကြီးသတ်ဖြတ်သူများသည် ထိုပုံစံနှင့်မွေးဖွားကြတာ မဟုတ်သလို ထိုပုံစံနှင့်အစပြုကြတာလည်းမဟုတ်ကြပေ။ သူတို့သိမှတ်ကြသည်မှာ ဆုလဒ်သည်စွန့်စားမှုထက်အမြဲပင် သာ၍ကြီးမားကြောင်းဖြစ်သည်။
ဒါဝိဒ်ကိစ္စတွင်ကျနော်တို့သိကြသည်မှာသူသည် ခဲလုံးငါးခုကို ကောက်၍တစ်လုံးသည် ဂေါလျက်ကြီးကို မြေပေါ်မှောက်ချအာင် ပစ်ပစ်သတ်ဖို့ဖြစ်၍ ကျန်လေးလုံး အပေါ်မှာသူ့အစ်ကိုရဲ့နာမည်များရှိနှင့်ပြီးသားဖြစ် သည်။ လူကောင်ကြီးတစ်ကောင်သည် ဘယ်တော့မှသူတစ်ဦးတည်းမရပ်တည်တတ် ၎င်း၏နောက်ဘက် (သို့) အောက်ဘက်တွင် အကြောင်းအရင်းများပါရှိတတ်၏။ အချို့တွင်၎င်းသည်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း၊ မတော်မတရား ပြုခြင်း (သို့) အမျက်ဒေါသနှင့် အားလုံးတို့သည် နာကျင်ဝေဒနာ၊ စိတ်မသန့်ခြင်း၊ ဆုံးရှုံးခြင်း (သို့) အရှက်တရားများဖြင့် ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းရှိတတ်သည်။
အကယ်၍ကျနော်တို့သည် လူကောင်ကြီးဖြစ်သော စစ်သူကြီးတစ်ဦးနှင့်ရင်ဆိုင်နေရလျှင် မိမိကိုယ်ကို မေးခွန်း ထုတ်ဖို့လိုအပ်သည် – ယနေ့လူကောင်ကြီးရဲ့နောက်ဘက်တွင် ဘာတွယ်ကပ်ပါလာသလဲ။ ဘာပဲဖြစ်နေပါစေ၊ လူကောင်ကြီးကိုသတ်ဖြတ်သောသူတို့သည် စိန်ခေါ်မှုများဖြင့် လွှမ်းမိုးမခံကြရပေ။ ဘာကြောင့်လဲ။ အကြောင်းမှာ – “ဘုရားသခင်သည်ကြောက်တတ်သော စိတ်သဘောကို ငါတို့အားပေးတော်မူသည်မဟုတ်၊ တန်ခိုးပါသောစိတ်၊ ချစ်တတ်သောစိတ်၊ ရှင်းလင်းသောစိတ်သဘောကိုပေးတော်မူ” (၂တိ ၁း၇) ကြောင်းကိုိ သူတို့သည်သိမှတ်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်မနေ့က ကျရှုံးမှုအားဖြင့် ငါတို့၏ယနေ့ယုံကြည် ခြင်းကို လွှမ်းမိုးမခံစေရေးအရေးကြီးပါ၏။
ဘယ်အရာက စစ်သူရဲကြီးကာလက်၏ ရှုမြင်ပုံကို ထူးခြားစေပါသလဲ။ ၎င်းမှာသူသည် ယုံကြည်ခြင်းမျက်စိကို အသုံးပြုထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်၏။ ကျွန်ုပ်တို့အား ကျမ်းစာပြောထားသည်မှာ – မျက်မှောက်မမြင်ဘဲ၊ ယုံကြည် မြော်လင့်ခြင်းရှိသည်အတိုင်း ငါတို့သည်ကျင့်ဆောင်ပြုမှုသည်။ ( ၂ကော ၅း၇) ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ဘုရား သခင်၏ သားသမီးများအနေဖြင့် ငါတို့လမ်းခရီးတွင်ရပ်နေသော လူကောင်ကြီးများသော်၎င်း၊ ဘုရားသခင်ကို အာခံသောနေရာဟူသမျှကိုသော်၎င်း ဖြတ်လျှောက်သွားရမည့်အရေးမှ ငါတို့သည်လွဲရှောင်မရပေ။ မည်သို့ ဖြစ်စေကာမူ ငါတို့သည် စစ်သူရဲကြီးများဖြစ်ကြပါ၏ – အမြီးကုပ်ပြီးထွက်ပြေးမှာလား ဒါမှမဟုတ် ဘုရား သခင်၏တန်ခိုးတော်၌ ရပ်တည်ကာ လူကောင်ကြီးများကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ကြမှာလား။
ကျမ်းစာကကျွန်ုပ်တို့အားရှင်းလင်းစွာ ပြောထားသည်မှာ – ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောသူ၏ ကျေးဇူးတော် ကြောင့် ငါတို့သည်ထိုအမူခပ်သိမ်းတို့ကို ခံစဉ်တွင်ပင် အထူးသဖြင့် အောင်မြင်ကြ၏။ (ရောမ ၈း၃၇)။ ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေ ကြသောရှေ့နောက်အကြောင်းတရားရဲ့အပြင်ဘက်က ကျမ်းပိုဒ်ကျနော် ယူသုံးနေမှန်း ကျနော်သိမှတ်ပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် ဤကျမ်းပိုဒ်သည်ကျနော်တို့နေ့စဉ် ရင်ဆိုင်နေရသော လူကောင်ကြီး အကြောင်းတွင် လက် တွေ့အသုံးချရသော နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပေသည်။
အရင်ကျနော်တို့ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရသောအချိန်တွင် ခရစ်တော်ယေရှု၌အသစ်သော သတ္တ၀ါဖြစ်လာကြ၏ ကျနော်တို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရလူကောင်ကြီးများသည် တစ်နည်းမဟုတ်၊ နောက်တစ်နည်းဖြင့် တူနေကြပါ သည်။ မှန်ပါတယ်၊ ချိန်ခါအများစုတွင် ၎င်းတို့သည်အသွေးနဲ့အသားရန်သူမဟုတ်တတ်ပါ။ ပုံစံနည်းလမ်းများ စွာဖြင့် ရောက်လာတတ်ကြ၏။ မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း၊ စရိုက်ဆိုးများ၊ ပင်ကိုယ်စရိုက်အမှားများ အမည်ဖော်လို့ရတဲ့ စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းများသော်နည်းပါးပါ၏။ အမှန်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ထက်ပိုကြီးသောကျွနိုပ်တို့ထက် ပိုအားကြီး သောကျွန်ုပ်ထက် ပိုမြန်ဆန်သော ကျွုန်ုပ်တို့ထက် ပိုပါဝါကြီးသော တစ်စုံတစ်ရာသည် ကျနော် တို့ကို အနိုင်ယူကာဆက်လက်၍ ကျနော်တို့ကို အုပ်စိုးတတ်ပါ၏။
အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် အကျိုးဆက်များ၏ ပမာဏများမှာခြားနားကြပြီးအားလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုထုချဖို့ နှင့် ကျနော်တို့အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးဖို့နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကိုချုပ်နှောင့်မှုထဲ သယ်ဆောင်ပေးဖို့ တန်ခိုးနှင့်ပင်ကိုယ် စွမ်းရည်ရှိကြပါ၏။ ၎င်းတို့သည်ကျနော်တို့ကို အဓိပ္ပာယ်မဲ့ထုချသည်ဟု ကျနော်တို့ခံစားမိတဲ့အချိန်များ ရှိကြောင်း ကျနော်သိပါတယ်။
လူကောင်ကြီးများကကျွန်ုပ်တို့သည် ဘယ်လောက်သေးငယ်၍ ဘယ်လောက်ပင်အကူအညီမဲ့သူများ ဖြစ်သည် ကိုကျွန်ုပ်တို့အား အလွန်ရှင်းလင်းစွာ သတိပေးတတ်ကြပါ၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် အစွမ်းအစဖြင့်တော့ သူတို့ကို မရိုက်နှက် နိုင်ချေ။ သို့ဖြစ်၍၎င်းတို့သည် ကျနော်တို့ကြံစည်နိုင်သမျှသော ကျနော်တို့ခံစားမိတဲ့ အချိန်များရှိကြောင်းကျနော်သိပါတယ်။
ထိုကြောင့်ဖြစ်တတ်သည့်အရာမှာ ထွက်ပြေးဖို့၊ ပုန်းရှောင်ဖို့နှင့်၎င်းတို့ရှေ့မှောက်မှာ လက်မြှောက်အရှုံးပေးဖို့ သာဖြစ်ပြီး၊ တစ်ခါတစ်လေတိုက်ပွဲမစခင်မှာပင်လျှင် အရှုံးပေးတာမျိုးတောင်ဖြစ်တတ်သည်။ နာကျင်ဒဏ်ရာ ရရှိဖို့နှင့် အရှုံးပေးသူဖြစ်နိုင်ခြေမျိုးကို ကျနော်တို့ရှောင်လွဲချင်ကြပါ၏။
၎င်းသည်လွယ်ကူသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သလို လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်းထောင်ချီတုန်းက ဣသရေလလူ မျိုးများပြုသလိုမျိုးဖြစ်ပါ၏။ ကံဆိုးချင်တော့/ စိတ်မကောင်းစရာဖြင့် ၎င်းလမ်းကြောင်း/ နည်းလမ်းသည် ယနေ့ တွင်ပင်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်နေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏လူများဖြစ်ကြသည့်အားလျော်စွာ ကျနော်တို့သည် ထို့သို့လုပ်ခြင်းအရာ၌ပြဿနာအပုံလိုက် ရင်ဆိုင်ရ၏။ ဘာကြောင့်လဲ။ အကြောင်းကတော့ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူကောင်ကြီးတစ်ကောင်၊ အထူးသဖြင့်ယနေ့ခေတ်အမျိုးမျိုးသော ပြဿနာထဲကတစ်ခုကို လက်မြှောက်အရှုံးပေးကြသောအခါ ယှဉ်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခြင်းတစ်ခုထက်သာ၍ ကျွန်ုပ်တို့အရှုံးပေးတာဖြစ်ပါ တယ်။ အမှန်တော့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ တိုက်ပွဲ၊ စစ်ပွဲကိုရှုံးနိမ့်သည်သာမက ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘ၀များ ကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်ခွင့်ပင်လျှင် အရှုံးပေးကာ အုပ်စိုးပိုင်ခွင့်ကို စာတန်ကိုယ်တိုင်ထံသို့ လွဲအပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပေ သည်။ သို့သော်လည်းပဲ – ခရစ်တော်က ကျွန်ုပ်တို့ကိုလွတ်မြောက်စေပြီးဖြစ်သော လွတ်မြောက်ခြင်းရှိ ပါသည်။
ထိုလမ်းစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်ကိုရှင်သန်ချင်ပါသလား။ အမှန်တကယ် ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုလမ်းစဉ်တွင် ရှင်သန်ဖို့တတ် စွမ်းနိုင်ကြပါလား
ကာလက်၌စစ်သူရဲကြီး၏နှလုံးရှိထား၏ ၁၂ ဦးသော သူလျှိုများသည်နယ်မြေတစ်ခုတည်းကို လျှောက်ကြ၏ လူကောင်ကြီးများကိုလည်း အတူမြင်ကြ၏။ ဒါပေမဲ့နှစ်ဦးကသာ တိုက်ပွဲကိုအောင်နိုင်မည်ဟု မြင်ကြ၏။
ဘာကြောင့်ဖြစ်မလဲ – ယုံကြည်ခြင်းခွန်အား
ခေါင်းဆောင်၁၀ ဦးမှယောရှုနှင့် ကာလက်တို့ကို ခွဲခြားစေသော အဓိကခြားနားချက်က ဘာလဲ။ ၎င်းမှာ သူတို့မြင်တဲ့အရာကြောင့်မဟုတ်၊ သူတို့မြင်ပုံကြောင့်ဖြစ်သည်။
ခေါင်းဆောင်/သူလျှို ၁၂ ဦးတို့သည် ဘုရားသခင်၏အကြံစည်တော် လမ်းကြောင့်ထဲတွင်ရပ်နေကြသော လူကောင်ကြီးများနှင့် ဆိုးသွမ်းသောလူစုများကို မြင်ခဲ့ကြသည်။ ၁၀ ဦးတို့သည် လူကောင်းကြီးများကို မြင် လိုက်ရာမှာ အနိုင်ယူနိုင်မည်မဟုတ်ဟု ယုံကြည်ကြ၏။ သို့သော်လည်း ကာလက်နှင့်ယောရှုတို့သည် လူကောင်ကြီးများကို ကြည့်၍ဘုရားသခင်က မအောင်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိသည်ကို သိကြ၏။
ဂေါလျက်ရှေ့မှောက်ရပ်သောအခါ ဒါဝိဒ်ပြောသောစကားကို သင်သတိရပါသလား။ သတိမရခဲ့ရင် ကျနော်ပြန် လည်သတိပေးပါရစေ၊ ၎င်းအကြောင်းအရာကို ဓမ္မရာဇ၀င်ပထမ ၁၇ ထဲတွင်တွေ့ရသည်။ ဤနေရာတွင် ဘုရား သခင်၏လူစုတို့သည်ဧလာချိုင့်တစ်ဖက်ကမ်းတွင် အလွန်ကြောက်ရွံ့၍တုန်ခါနေကြ၏ ဖိလိတ္တိစစ်သားများ သည်အခြားတစ်ဖက်၌ တပ်ချကြ၏။၏
“ဒါဝိဒ်ကသင်သည်ထား/လှံ၊ ကိဒွန်လျက်ငါ့ထံသို့လာ၏ ငါသည်သင်ကြိမ်းပသော ဣသရေလဗိုလ်ခြေတို့ ၏ဘုရားသခင်ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ထာဝရဘုရား၏နာမတော်ပါလျက် သင်ရှိရာသို့လာ၏ ထာဝရဘုရား သည်သင့်ကို ငါ့လက်၌ယနေ့အပ်တော်မူသဖြင့် သင့်ကိုငါဆက်၍လည်ပင်းကို ဖြတ်မည်။ ဖိလိတ္တိဗိုလ်ခြေ အသေကောင်များကို မိုယ်းကောင်းကင်ငှက်နှင့် တောသားရဲ့တို့အား ယနေ့ငါပေးမည်။ ဣသရေလအမျိုး၌ ဘုရားသခင်ရှိတော်မူသည်ကို မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည် သိရကြလိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရားသည် ထား/ လှံအားဖြင့် ကယ်တင်တော်မမူကြောင်းကို ဤပရိသတ်အပေါင်းတို့သည် သိကြလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား ထာဝရဘုရားသည် စစ်မူကိုပိုင်၍ ငါတို့လက်သို့ အပ်နှံတော်မူမည်”ဟု ဖိလိတ္တိလူအားဆို၏ ဓမ္မရာဇ၀င် ၁၇း၄၆-၄၇)
ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာထဲရှိလူကောင်ကြီးများဖြစ်ကြသည့်အမှုတောမြတ်များနှင့်ခေါင်းဆောင်မှုကဏ္ဍများသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဘုရားသခင်ကြံစည်ပေးထားသော လမ်းမပေါ်မှာရပ်တည်နေကြသည်ဖြစ်၍ ၎င်းတို့ကို ကျ နော်တို့သည် ဘယ်လိုပုံကြည့်ထားသည်မှာ အရေးပါလှပါသည်။ ၎င်းတို့ကိုသင်ကြည့်မြင်ပုံဟာ ၎င်းတို့အား သင်ကိုင်တွယ်ပုံအလွန်အမင်းပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်။
သံသယစိတ်မ၀င်ပါနှင့်၊ ၎င်းတို့သည်ကျနော်တို့ထက် ပိုကြီးမား၍ကျနော်တို့ထက် လုံးဝအားကြီးလှပါ၏။ ၎င်း တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ကို မိမိတို့ခြေအောက်တွင် နင်းချေပစ်နိုင်တာ နှစ်ခါပြန်မစဉ်းစားကြရပေ။ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့၎င်းတို့သည် ဘုရားသခင်ထက်ပိုကြီးမားကြပါသလား၊ ၎င်းတို့သည် ဘုရားသခင်ထက်ပိုအားကြီးပါသ လား၊ ၎င်းတို့သည် ကြိုးဝိုင်းထဲတွင်အနန္ဒတန်ဖိုးရှင်ဘုရားသခင်နှင့် ယှဉ်ဖို့တစ်ခဏမျှတောင် တောင့်ခဲ နိုင်မည်နည်း။
ဒါဝိဒ်၊ ယောရှုနှင့်ကာလက်တို့အားလုံးကအဖြေကို သိကြ၏။ သူတို့အားလုံးသည် လွန်ခဲ့သည့်အချိန်များက သူတို့အသက်တာနှင့်ဣသရေလလူမျိုးများ၏ အသက်တာများထဲ ထာဝရဘုရားပြုခဲ့ပြီးသော အမှုတော်များကို ပြန်လည်ကြည့်တတ်ကြသည်။ သူုတို့သည်သံသယအရိပ်မှည်းကြီးရဲ့အလွန်မှာရှိတဲ့ ဘယ်လောက်ပင်ဖြစ်နိုင် ခြေမရှိဖြစ်ပါစေ၊ ယုံရခက်သောအမူဖြစ်ပါစေ၊ မှန်ပါစေ မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပါစေ ဘုရားသခင်သည် မိမိတို့ အားအောင်နိုင်ခြင်းပေးနိုင်သည်ဖြစ်ကြောင့် သိမှတ်ကြ၏။
မဿဲ ၁၉း၂၆ “ယေရှုကလည်းသူတို့ကိုကြည့်၍ ဤအမှုကိုလူမတတ်နိုင်သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်သည် ခပ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုတတ်နိုိင်တော်မူသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။’’ ဤရှေ့နောက်စကား၌ ၎င်းသည်ကယ်တင် ခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်နေ၏ သို့သော်သမ္မာတရားသည် မှန်ကန်နေဆဲ။
၎င်းသည်အပေါင်းအဖော်များအား ချီ၍ပြည်တော်ကိုသိမ်းပိုက်ရန် “၎င်းကိုအနိုင်ယူမည်အကြောင်းငါတို့ စွမ်း ဆောင်နိုင်၏” ဟူသောစကားကို ကာလက်အားပြောစေနိုင်သော စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပေသည်။ ၎င်းသည်နှစ်ပေါင်း ၄၀ တောလည်သည့်ကာလတစ်လျှောက် ဘုရားသခင်၌ယုံကြည်ကိုးစားစေသော စိတ်ဓာတ်ပေတည်း။ ၎င်း သည် အသက် ၈၅ နှစ်ရှိသည့်တိုင် တောင်ပေါ်က လူကောင်ကြီးများကို ဖယ်ရှားဖို့ဘုရားသခင်နှင့်အတူ လုပ် ဆောင်ဖို့ အဆင့်သင့်ဖြင့် စိတ်ဆန္ဒရှိစေသော စိတ်ဓာတ်ပင်ဖြစ်၏။
ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာထဲ၌ နိမိတ်လက္ခဏာများသိရှိဖို့အလိုရှိ၏။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ် တို့အသက်တာထဲ၌ ပင်လယ်ကိုနှစ်ခြမ်းခွဲပေးချင်ပါ၏ ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ ရှင်သန်ဖို့ကောင်းကင် မန္န အားချပေးချင်ပါ၏။“သင်တို့ကိုသတိနှင့်ကြည့်ရှုတော်မူသောကြောင့်သင်တို့၌စိုးရ်ိမ်ခြင်းအမှုရှိသမျှတို့ကို ကိုယ်တော်၌အပ်နှံကြလော့။” (၁ ပေ ၅း၇)
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်တိုက်ပွဲတစ်ခုထဲတွင်ရှိနေပြီးလူကောင်ကြီးများကို ရင်ဆိုင်နေရလျှင် သတိရပါ – ငါတို့စစ် တိုက်၍သုံးစွဲသော လက်နက်သည်ဇာတိပကတိလက်နက်မဟုတ်၊ ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်အားဖြင့် မြိ့ရိုး မြို့ပြတို့ကို မြိုဖျက်နိုင်သော လက်နက်ဖြစ်၏။ ထိုလက်နက်အားဖြင့် လူတို့၏အကြံအစည်တို့ကို၎င်း၊ ဘုရား သခင်ကိုသိသောပညာကို ဆီးတားသောမာန်မာနရှိသမျှတို့ကို၎င်း၊ နှိမ့်ချမှောက်လှန်၍၊ ခပ်သိမ်းသော စိတ် တို့ကို ဘမ်းသွားချုပ်ထားလျက်၊ ခရစ်တော်၏စကားကို နားထောင်စေ၏။ (၂ ကော ၁၀း၎-၅)။
ကျွန်ုပ်တို့မစွမ်းဆောင်နိုင်မှန်ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်တိုင် ယုံကြည်လျှင်စိတ်နှလုံးထဲသွင်းထားပါ။ အဘယ် ကြောင့်ဆို သော်ကျမ်းစာက – ငါ့ကိုခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူသော ခရစ်တော်အားဖြင့် ခပ်သိမ်းသော အမှုတို့ကို ငါတတ်စွမ်းနိုင်၏။(ဖိလိတ္တိ ၄း၁၃) ဟုကျွန်ုပ်တို့ကို ပြောပြထားပါ၏။
ဘုရားသခင်သည် ငါ့တို့တိုက်ခိုက်နေသောတိုက်ပွဲများတွင် ဘက်လိုက်တဲ့စောင့်ကြည့်သူမဟုတ်သလို ကိုယ်ကျိုးမျှော်လင့်သူလည်း မဟုတ်ပေ။ သူတိုိ့ငါတို့အား အနိုင်ယူစေချင်သည်။ သူသည်ငါတို့အား ကြီးထွား ၍အောင်နိုင်စေချင်သည်ဖြစ်၍ ထပ်ပြီးဘာလိုသေးလဲ။ ထို့သို့ဖြစ်ပျက်လာအောင် ငါတို့ကိုစစ်တန်ဆာဆင်ပေး ၍ခွန်အားကိုလည်းပေးသည်ဖြစ်၍ ငါတို့သည်အရာခပ်သိမ်းတွင် ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိကြ၏။ “သင်တို့တွင် ကောင်းသောအမှုကို ပြုစပြုတော်မူသောသူသည် ယေရှုခရစ်၏နေ့ရက်တိုင်အောင် ပြီးစီးလျက်ပြုတော်မူမည် ဟု ငါသဘောကျ၏။” (ဖိလိပ္ပိ ၁း၆)
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်တိုးတက်ခြင်းအရာ၌ ကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်သူများဖြစ်ကြ၏။ ထိုအရာ သည်ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်တစ်ခုပင်ဖြစ်၏။ ၎င်းသည်သူ့ရဲ့အကြံအစည်လည်းဖြစ်ဆဲပင်ဖြစ်၍ ပြိုင်ဘက် မရှိ၊ ရန်သူမရှိ၊ လမ်းခရီးတော်ထဲ ရပ်တန့်ဖို့ခွန်အားအလုံအလောက်ရှိသော လူကောင်ကြီးလည်းမရှိပေ။ လူကောင်ကြီးတိုင်းဟာ မတူကွဲပြားကြ၏ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဖြေရှင်းချက် အလုံးစုံတွက် လုံလောက်တဲ့အရွယ်အစား တစ်ခုမျှမရှိကြပေ။
ဟေဗြန်မြို့ထဲက ကာလက်သည်အာနကသားသုံးယောက် ရှေရှဲ၊ အဟိမန်၊ ကာလမဲတို့ကို နင်ထုတ်လေ၏ (ယောရှုမှတ်စာ ၁၅း၁၄)။ ၎င်းတို့အမည်များကို ကျမ်းစာထဲမှာ သုံးကြိ်မ်တိုင် ဖော်ပြထားသည်မှာ စိတ်ဝင်စား စရာကောင်းလှပါတယ်။ (ယောရှုမှတ်စာ ၁၅း၁၄၊ တောလည်ရာ ၁၃း၂၂၊ တရားသူကြီးမှတ်စာ ၁း ၁၀)။ ဘာကြောင့်များလဲ၊ အကြောင်းအရင်းကတော့ သူတို့၏အမည်များကို ကောင်းကောင်းသိထားကြ၏ လူ ကောင်ကြီးများသည် ဂေါလျက်ကဲ့သို့ ဂတ်လူမျိုးမှဆင်းသက်လာသော အုပ်စုများဖြစ်ကြသောကြောင့် တည်း။
အပေါ်ကအမည်ရေးထားသောသူများသည် ကြီးမားသောပြိုင်ဘက်များဖြစ်၍ ဤလူကောင်ကြီးများသည် ကြီး မားသောရန်သူများဖြစ်ကြ၏။ ၎င်းတို့သည် ယှဉ်ပြိုင်ရာတွင်နာမည်ကြီးသော သူများဖြစ်ကြ၏။ သို့သော် ကာ လက်သည် သူတို့ကိုနှင်ထုတ်ပစ်လိုက်လေ၏။
အကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့သည်အကျင့်ဓလေ့ဟောင်းများကို ချိုးဖျက်ကာအသက်တွင် ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်မည်ဆို လျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အောင်နိုင်ခြင်းအပေါ်ကဲ့ရဲ့သော လူကောင်ကြီးများကိုငါတို့စကားပြောရလ်ိမ့်မည်။ ငါတို့ရင် ဆိုင်နေကာ ဘာကြီးဖြစ်နေပါစေ၊ ထိုပန်းကုံးတိုင်များနှင့် အိပ်မက်များ ဘယ်လောက်ကြီးမားပုံရှိနေပါစေ၊ ငါတို့ ၏စကားလုံးများကို ပြောင်းလဲပြောကြားဖို့ စတင်လိုက်ပါ။ သို့ဖြစ်၍ငါတို့သည် မကြာမှီချိန်တွင် အောင်နိုင်ခြင်း ကို ကြွေးကြော်ရပါလိမ့်မည်။
သင်တောင်အကြောင်းမပြောပါနှင့် ထိုတောင်ကိုသာစကားပြောပါ။ လောကကိုသင့်ပြဿနာဘယ်လောက်ကြီး ကြောင်းမပြောပြပါနှင့် ဘုရားဘယ်လောက်ကြီးမားကြောင်းကို ပြောပြပါ။ ယုံကြည်ခြင်း၌ရပ်တည်ပါ၊ အောင်နိုင်ခြင်းကိုပြောပါ၊ လွတ်လပ်ခြင်း၌ရှေ့သို့ခြေလှမ်းပါ။ ဘုရားသခင်သည် သင့် အဘို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများဆိုထားခြင်းရှိ၏။
“ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ အကြင်သူသည် ယုံမှားစိတ်ကင်း၍၊ မိမိဆိုသည်အတိုင်းဖြစ်မည်ဟု ယုံကြည်လျက်၊ ထိုတောင်ကိုနေရာမှ ရွေ့လော့၊ ပင်လယ်၌ဤလော့ဟုဆိုလျှင်၊ ထိုသူဆိုသည်အတိုင်း ဖြစ်လိမ့်မည်။” (မာကု ၁၁း ၂၃)။
သင်ဘာကိုစောင့်စားနေတာလဲ၊ သင့်ရဲ့လူကောင်ကြီးတွေကို အမည်ပေး၍ နှင်ထုတ်လိုက်ပါ။
၅။ သူ၌လက်မြှောက်အရှုံးပေးသော နှလုံးသားရှိ၏။
“ညီအစ်ကိုတို့၊ အသက်ရှင်ခြင်း လက္ခဏာ၊ သန့်ရှင်းခြင်းလက္ခဏာ၊ ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူဘွယ်သော လက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံသောယဇ်ကို သင်တို့သည်ပူဇော်၍ မိမိကိုယ်ခန္စာကို ဘုရားသခင်အား ဆက်ကပ်ခြင်း တည်းဟူသော သင်တို့ပြုအပ်သောဝတ်ကိုပြုမည်အကြောင်း ဘုရားသခင်၏ဂရုဏာတော်ကို ထောက်ထား၍၊ သင်တို့ကိုငါတိုက်တွန်း နှိုးဆော်ပေ၏။ သင်တို့သည်လောကီပုံသဏ္ဍာန်ကို မဆောင်ကြနှင့်၊ ကောင်းမြတ်သော အရာ၊ နှစ်သက်ဘွယ်သောအရာ၊ စုံလင်းသောအရာတည်းဟူသော ဘုရားသခင်အလိုတော် ရှိသောအရာ သည် အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို သိနိုင်မည်အကြောင်း၊ စိတ်နှလုံးကို အသင့်ပြင်ဆင်၍ ပုံသဏ္ဍာန် ပြောင်းလဲ ခြင်းသို့ ရောက်ကြလော့” (ရောမ ၁၂း၁-၂)။
သူ၏နှလုံးသားသည်အရှုံးခံဖြစ်သောကြောင့် ကာလက်၏ဘုရားသခင်ပေးထားသော သက်သေခံချက် အကြောင်းပေါ်ထွက်လာရ၏။ အလားတူ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် – သာဓု၊ သစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်း ဟူသော ချီးမွမ်းစကားလက်ခံရရှိဖို့ဆိုရင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားများ လက်မြှောက်အရှုံးပေးကြဖို့လိုအပ်ပေသည်။”
“ထိုသူ (ကာလက်)သည် ထာဝရဘုရားနောက်တော်သို့ လုံးလုံးလိုက်သောကြောင့်မြင်ရ၏ သူနင်းသော ပြည်ကို သူမှစ၍သူ၏သားမြေးတို့အား ငါပေးမည် ဟုကျိန်ဆိုတော်မူ၏” (တရားဟော ၁း၃၆)။
လက်မြှောက်အရှုံးပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်ရင်ညှိုနှိုင်းမှုဆိုတာမရှိနိုင်ချေ။ ကျွန်ုပ်တို့ခြေများညှိနှိုင်းမှုအလယ်တွင် အေးခဲ့တာမျိုးခံစားရသည့်အချိန်များရှိတတ်ပါ၏။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ထိုအခြေအနေမျိုး၌ မီးကုန်သွား လည်းရေကဆက်လက်နွေးနေတတ်၏။ ဒါကိုအချိန်ကြာကြာကျွန်ုပ်တို့အချောင်ခိုနေသောအခါနောက်ပိုင်းတွင် အေးစက်လာကို သိသလိုကျွန်ုပ်တို့၏ ဆန္ဒပြင်းပြမူလည်း နောက်ကျန်ရစ်နေမှန်းသိရသောခါ ကျွန်ုပ်တို့မှာ နောင်တရဖို့သာ ကျန်ပါတော့သည်။ ဒါမှန်တယ်ဆိုရင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အလုံးစုံမဆုံးရှုံးသေးပေ။ ဘုရားသခင် ထံသို့ ကျွန်ုပ်သည်အလုံးစုံကို တရှိန်းထိုးအဆုံးရောက်နေပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ယခုတွင်မူ ကြောက်ရွ့ခြင်းအား အနိုင်ယူစေတော့မည်မဟုတ်ဟု ပြောပြနိုင်ပါသည်။
ခရစ်တော်ထံသို့ထိန်ချန်ခြင်းမရှိ(သို့) ၀မ်းမြှောက်ဝမ်းသာဖြင့် လက်မြှောက်အရှုံးပေးသော အမျိုးသား(သို့) အမျိုးသမီးသည် မှားယွင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုမလုပ်မိနိုင်ပေ။ – ရွေးချယ်မှုတစ်ခုစီသည် မှန်ကန်ပေမည်။
သူ့အားလုံးလုံးလျားလျားတောင့်တသော ဘ၀ကိုအပြည့်အ၀တာဝန်ယူပေးဖို့ဘုရားသခင် သည်အသင့်ရှိ၏ A. W Tozer
ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲ ငါတို့နေထိုင်သည်ဖြစ်စေဤအကြောင်းအားလုံးသည် ထပ်တူမှန်ကန်ပေ၏။ – ဘုရားသခင် သည်ရှုပါရုံရှိသောအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများကို ရှာဖွေနေ၏။
ကာလက်သည်အသေအချာပင် ထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည် – သူသည်ရှုပါရုံရှိသောလူသားဖြစ်၏။
ရှု့ပါရုံသည်အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်၍ကြီးမားသောအိပ်မက်များကို မက်ရဲသည့်နားလည်ရခက်ခဲ သည်အရာ ဖြစ်သည်။
ရှုပါရုံသည်အသေးစိတ်စီမံချက်နှင့်အတူ မျှော်လင့်ခြင်းကို ခေါ်သည်။
ရူပါရုံသည်တီထွင်သူအမျိုးသား (သို့) အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ရှိပြီးသားအပြင် တစ်စုံတစ်ခုအသစ် တီထွင်ရန်စဉ်းစားခြင်းအရာ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ရှုပါရုံသည်မိခင်တစ်ဦးက မွေးကင်းစကလေးကို ကြည့်၍ကလေးဘယ်ပုံကြီးပြင်းလာမည်ကို စိတ်ကူး ယဉ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ရှုပါရုံသည်လျော့တွက်ခြင်းခံတတ်သည်မှာ မှန်ပါ၏။ – ဥပမာတစ်ချို့ပေးပါရစေ။
၁၉၄၃ တွင် / BM ဥက္ကဌဖြစ်ခဲ့သော Thomas Watson က ကမ္ဘာကြီးထဲမှာ ကွန်ပျုတာငါးလက်ခန့် အတွက်သာဈေးတစ်ခုရှိမည်ဟု ငါထင်၏ ဟုဆိုခဲ့သည်။
၁၉၇၇ တွင် Digital Equipment Corporation ကြီးကို ထူထောင်သူလည်းဖြစ် ဥက္ကဌလည်းဖြစ်တဲ့ Ken Olson က လူတိုင်းက ကွန်ပျူတာသူတို့အိမ်မှာ လိုချင်နေကြတာဟာ အဓိပ္ပာယ်မရှိဟုဆိုခဲ့သည်။
၁၈၇၆ တုန်းက အနောက်တိုင်းပြည်ထောင်စု မှတ်တမ်းကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ – တယ်လီဖုန်းကို ဆက်သွယ်ရေးနည်းစနစ်အဖြစ် အလေးအနက်ထင်မှတ်ခြင်းတွင် ချို့ယွင်းချက်များစွာရှိ၏ ဟူ၍ ဖော်ပြထား၏။
Decca တီးသံသွင်းကုမ္ပဏီကြီး၏စကားလုံးများကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ နာမည်ကြီးရော့အဆိုတော်များက ၁၉၆၂ တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ ငြင်းဆန်ကြသောအခါ သူတို့၏အသံနှင့် ဂီတတူရိယာသံတွေက ခေတ်နောက်ကျနေလို့ ငါတို့မနှစ်သက်ပါ ဟုပြောကြ၏။
၁၈၉၉ တွင် U. S မှတ်ပုံတင်ရုံးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Charles Duell က တီထွင်လို့ရတဲ့အရာအားလုံး ဟာတီထွင်ပြီးသားဖြစ်၏။ ဟုဆိုခဲ့သည်။
ကျနော်ယူဆောင်လာဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အတွေးလေးကို သင်သိပြီလို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။
ရှုပါရုံဆိုတာလူတွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးဟူသော စကားကိုဥပက္ခာပြု၍ ဘယ်နည်းနဲ့မဆိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေ ခြင်းဖြစ်သည်။ ကာလက်ကတော့ “……..ငါတို့လုံးဝစွမ်းဆောင်နိုင်၏” ဟုပြောဆိုခဲ့တယ်။
သို့ဖြစ်၍ကာလက်သည်လူအုပ်ကြီးကို မောရှေရှေ့တွင် ငြိမ်သက်စေ၍၊ ငါတို့သည်ချက်ချင်းသွား၍ ထိုပြည်ကို သိမ်းပိုက်ကြပါစို့၊ “………ငါတို့သည်အောင်နိူင်သည်” (တောလည်ရာ ၁၃း၃၀) ဟုဆိုလေ၏။ သူနှင့်အတူသူု တို့(လူအုပ်ကြီး)တို့သည် ရှုပါရုံပြည်တော်ကို သိမ်းပိုက်နိုင်သည်ကို သူသည်သိလေ၏။
ယုံကြည်ခြင်းသည်မမြင်နိုင်သောအရာကို ကြည့်နေခြင်းမဟုတ်၊ သို့သော်ဘုရားသခင်သည် အနန္တ တန်ခိုးရှင်ဟု ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။
ယုံကြည်ခြင်းသည် အကျိုးရလဒ်မမြင်နိုင်သည့်အခါမျိုးမှာပင်လျှင် နာခံနေခြင်းဖြစ်သည်။
ယုံကြည်ခြင်းသည် လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အချိန်များများဖြတ်သန်းလျှောက်သွားကြသော်ငြားလည်းကျွန်ုပ်တို့၏ရုပါရုံသည်တဖြည်း ဖြည်း ကုန်ဆုံးတတ်၏။ ကျွန်ုပ်တို့ရူပါရုံမီးထောက်သည်မှီးမှိန်လာ၏ ဆန္ဒပြင်းပြမူက ရပ်တန့်စပြုလာကာ၊ ၎င်း၏အပူ ရှိန်သည် အေးစက်သွားတတ်၏။
အချည်းနှီးနေထိုင်သောဘုရား၏သားမဖြစ်စေနှင့်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ရူပါရုံရှိသူဖြစ်ဖို့ မွေးဖွားကြသူများ ဖြစ်ကြ၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ခြားနားသောစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ ယောကျာ်းများနှင့် မိန်းမများဖြစ်ကြ၏။ ဧဖက် ၃း၂၀ က ပြောထားသည်မှာ “ငါတို့၌ပြုတော်မူသောတန်ခိုးတော်အတိုင်း၊ ငါတို့တောင်းပန်ကြံစည်သမျှ ထက် အလွန်ထူးခြားစွာ ပြုခြင်းငှါတတ်နိုင်တော်မူသော ဘုရားသခင်” ဟူ၍တွေ့ရှိရသည်။
မေးခွန်း – ကျွန်ုပ်တို့ရှုပါရုံဘယ်လောက်ကြီးမားသလဲ။ …… ထာဝရဘုရားသည် သောဒုံမြို့ကို တရားစီရင်ခါနီး တွင်အာဗြဟံ၏တောင်းဆိုချက်သည် ၁၀၀၊ ၅၀၊ ၂၀၊ ၁၀ ဖြစ်ခဲ့လျှင်၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သော နယ်မြေ ဒေသအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုတောင်းချက်က ဘယ်လောက်ဖြစ်မည်နည်း။
ဤခြားနားသောစိတ်ဓာတ်သည် ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ဓာတ်၊ စိတ်နှလုံးအပြည့်အ၀ရှိခြင်း၊ သည်းခံခြင်း၊ ရဲစွမ်းသတ္တိ နှင့် ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
အကျွန်ုပ်တို့၏ရူပါရုံနှင့်အရာများတည်ရှိပုံများအကြားအားပြိုင်မှုတော့အမြဲရှိလိမ့်မည်။အဘယ်ကြောင့်ဆို သော် ရူပါရုံသည်လက်ရှိအခြေအနေဒုံရင်းကိုင်းရှိနေရင်၊ ၎င်းသည်ရူပါရုံမဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့်ရူပါရုံနှင့် လက်ရှိ အခြေအနေဒုံရင်းအကြားကွာဟချက်က သားရေကွင်းကိုဆွဲဆန့်သလို့မျိုးအားပြိုင်မှုဖန်ဆင်းပေးပါ၏။
မကြာခဏ၊ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအားပြိုင်မှုအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရူပါရုံသည်လက်ရှိအခြေအနေဒုံရင်းသို့ အားပျော့ လာဖို့နှင့် အရာများ၎င်းတို့နည်းလမ်းအတိုင်းရှိနေတာ ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်ဖို့ဆွဲချစေတတ်ကြ၏။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမှု၊ ထို့သို့ဖြစ်စေမည့် ထက်အရာများရှိနေပုံအားလုံးကို ရူပါရုံနဲ့ပိုမိုနီးကပ်ရသို့ အားပြိုင်မှု အားဖြင့် ဆွဲယူလာသင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာ၌လိုအပ်သော ပြောင်းလဲမှုများကို ဖန်ဆင်းရင်း၊ ကျွန်ုပ် တို့အတွက်ဘုရားသခင်ရှိထားသောအရာဘက်ဆီသို့ ဆွဲယူလာသင့်ပါသည်။
ဘုရားသခင်သည်ငါတို့အားသူပေးထားသည် ရူပါရုံသို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုသာ၍ နီးကပ်စွာဆွဲချင်သည်ကို ကျနော်ယုံ ကြည်ပါ၏။ဘုရားသခင်သည် အမြစ်မြေလှန်ပြောင်းလဲလိုမှုပြင်းထန်သော ခေါင်းဆောင်များအဖွဲ့နှင့် ကိုးကွယ် ခြင်း၊ ဆုတောင်းခြင်း၊ အမှုဆောင်ခြင်းနှင့် လှည့်လည်ဟောပြောခြင်းအတွက် ရူပါရုံအသစ်ပြုပြင်ပြီးသော သူ့လူ များဖြစ်ရေးလိုချင်ပါသည်။
တရားဟောကြားနားခြင်းနှင့် စာအုပ်ဖတ်ရုံမျှဖြင့် ရူပါရုံအသစ်ပြုပြင်ခြင်းမရှိနိုင်ရာ။
ကိုးကွယ်ခြင်းအတွက်ရူပါရုံသည် အမှန်တကယ်ကိုးကွယ်ခြင်းအားဖြင့် အသစ်ပြုပြင်ခြင်းရှိ၏။
ဆုတောင်းခြင်းအတွက်ရူပါရုံသည် အမှန်တကယ်ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့် အသစ်ပြုပြင်ခြင်းရှိ၏။
အမူဆောင်ခြင်းအတွက်ရူပါရုံသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုကျေးဇူးများကို အစေခံရာတွင် အမှန်တကယ်သုံး ခြင်းအားဖြင့် အသစ်ပြုပြင်ခြင်းရှိ၏။
လှည့်လည်ဟောပြောခြင်းအတွက် ရူပါရုံသည်အမှန်တကယ်ယေရှုအကြောင်းသက်သေခံခြင်းအားဖြင့် အသစ်ပြုပြင်ခြင်းရှိ၏။
ရူပါရုံရှိသောလူယောကျာ်းနှင့် လူမိန်းမများဖြစ်ကြပါစို့၊ သို့ဖြစ်၍ထိုသို့သောသူများအဖို့ ကြေငြာထားသည်မှာ – “သူတို့မှာခြားနားသော စိတ်ဓာတ်ရှိကြ၏” ဟူ၍ဖြစ်၏။
4 thoughts on “CalebaMan ofaDifferent Spirit – Burmese Translation”
K.T Josaphat says:
It good and encouraged so much..thanks
22nd May 2020 at 14:22
I belive it sound good…Love to see entertaining the love of Jesus to people..Thanks
So glad it blessed you. Do share it with as many folks as you can to pass on the blessing.
14th August 2020 at 10:31
Thank You – I would appreciate if if you could go to my YouTube Channel and Subscribe please. Thanks